आर्थिक | KTM Khabar
तीन करोडमा माईखोलामा पक्की पुल बन्ने
इलाम, माघ ६ । अस्थायी काठको पुलबाट खोला वारपार गर्दै आएको जमुना र सुलुबुङ बीचको माईखोलामा पक्की पुल बन्ने भएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयको डोलिडार कार्यक्रममार्फत तीन करोड १७ लाख रुपैयाँको लागतमा पक्की पुल बन्ने भएको हो। करिब डेढ दशकदेखि स्थानीय प्रयासमा सडकको ट्र्याक खोलेर सवारी आवागमन हुँदै आए पनि पक्की पुल नहुँदा स्थानीयवासीले सास्ती बेहोर्दै आएका थिए। स्थानीयवासीले खोलाको दुवैतर्फ पर्खाल लगाएर काठको मुडा तेर्साउँदै सवारी आउजाउ गर्ने व्यवस्था ...
३ अर्ब ३४ करोड राजस्व सङ्कलन
पोखरा, ५ माघ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म रु तीन अर्ब ३४ करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु दुई अर्ब ६५ करोड १९ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएको थियो । कार्यालयले अन्तःशुल्कतर्फ रु एक अर्ब ६० करोड ५६ लाख, आयकरतर्फ रु ९९ करोड ...
साँझ ८ बजेपछि चुरोट र रक्सी बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले अब साँझ ८ बजेपछि चुरोट र रक्सी बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । मानव स्वास्थ्य र समाजमा असर पारेको भन्दै सरकारले आउँदो वैशाखदेखि ८ बजेपछि चुरोट र रक्सी बेच्न प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो । १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकाहरुले सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा कुनै पनि समयमा किन्न र बे ...
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलार्इ कृषि बैंकको १५ लाख ५ माघ, काठमाडौँ । महोत्तरीमा एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण अभियानमा रहेका कलाकार जोडी सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’लाई कृषि विकास बैंकले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ५० औं स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल ...
लुटेराले सिसी क्यामेरानै लुटेपछि !
सुनसरी, माघ ५ – हतियारधारी समूहले सुनसरीमा ७८ हजार रुपैयाँसहित पाँच वटा मोबाइल र एउटा सिसी क्यामेरा लुटपाट गरेका छन् । दुहवी भलुवा नगरपालिका–४ को अग्रहरी प्रभात फुट प्रोडक्ट उद्योगबाट हतियारधारी समूहले लुटपाट गरेका हुन् । माक्स लगाएर आएका चार जनाको समूहले उद्योगमा पसेर पेस्तो देखाइ लुटपाट गरेको उद्योगका प्रबन्धक जीतु अग्रहरीले बताउनुभयो । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दुहवीले जनाएको छ । ...
सुनको भाउ अझै बढ्ने
काठमाडौं, माघ ५ – पुस महिना लागेदेखि बढेको सुनको भाउ अझै महंगिने सुनचाँदी व्यवसायीले बताएका छन् । सुनको भाउ बढेर बुधबार तोलामा ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो फाइन गोल्ड अर्थात ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत शुद्धता भएको सुनको भाउ हो । बुधबार ९९ दशमलव ५० प्रतिशत शुद्धता भएको सुन पनि तोलामा २ सय रुपैयाँले नै बढेको छ । मंगलबार ५५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ ५५ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको हो । बजारमा दुई थरीका सुनको कारोबार हुन थालेपछि उपभोक्ता ...
सप्तरी, माघ ५ । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–६ स्थित एक पसलमा मङ्गलबार आगलागी हुँदा पाँच लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको छ। स्थानीय विनोदकुमार गुप्ताको किराना पसलमा विद्युत् सर्ट भई अचानक आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। सो आगलागीबाट गुप्ताको पसलभित्र रहेका खाद्यान्न सामग्री र नगद गरी अन्दाजी पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आगोलाई स्थानीयवासी र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। कम्बल वितरण, यसैबीच, धर्मी हल्फा ...
नेपाल अण्डा उत्पादक संघद्धारा अण्डाको मूल्य समायोजन
५ माघ, चितवन । नेपाल अण्डा उत्पादक संघले अण्डाको मूल्य समायोजन गरेको छ । संघले अण्डा प्रति क्रेट १० रुपैया सस्तो बनाएको हो । चर्को मूल्यमा अण्डा खरिद गर्दै आएका उपभोक्तालाई केही राहत दिन मूल्य समायोजन गरिएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम के।सी।ले जानकारी दिए । मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी ठूलो अण्डा फार्म मूल्य ३४५ र बिक्री मुल्य ३५० तथा मिडियम अण्डा प्रति क्रेट फार्म मूल्य ३२५ र बिक्री मूल्य ३३० कायम गरिएको छ । यसअघि ठूलो अण्डा प्रति क्रेट फार्म मु ...
भूकम्प पीडितलाई आजबाट दोस्रो किस्ताको डेढ लाख दिइने
५ माघ, काठमाडौं । सरकारले आजबाट भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रुपैयाँ वितरण सुरु गर्दैछ । पहिलो किस्तामा ५० हजार अनुदान लिएर घरको जग निर्माण सकेर प्राविधिक जाँच पास गराएकाहरुले दोस्रो किस्ताको रकम पाउनेछन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो चरणमा मकवानपुर र सिन्धुलीका भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ताको डेढ लाख वितरण गर्दैछ । दुई जिल्लाबाट दोस्रो किस्ताका लागि करिव ३०० पीडितको नाम सिफारिस भएको छ । घर निर्माण अघि ...
काठमाडौँ, ४ माघ । सरकारले गरिबीको सूचकाङ्कमा पिछडिएका थप तीन जिल्लाका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले स्थानीय निकायमार्फत अछाम, रौतहट र बझाङका सबै समुदायका बालकालिकालाई मासिक रु ४०० भत्ता वितरण गर्न ...
बेनी, माघ ४ प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भिरपहरामा पाइने आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहुमूल्य शिलाजित उत्खनन हुनसकेको छैन। शिलाजित उत्खनन गरी उपभोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेपछि बर्सेनि करोडौंको नोक्सानी भइरहेको छ। म्याग्दीका बाबियाचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, कुइनेमङ्गले, मुदी, मुना, ताकम, मराङ, बिमलगायत गाविसका पहरामा शिलाजित पाइन्छ । शिलाजित उत्खनन गर्नेतर्फ सम्बन्धित ...
रामपुर महोत्सवमा पाँच करोडको कारोबार पाल्पा, माघ ४ । प्रथम रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेलामा पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। गत पुस २७ गतेदेखि सञ्चालन भएको मेलाको छैठौं दिन सोमबारसम्म एक लाख दर्शकले मेला अवलोकन गरेका छन्। मेलामा अहिलेसम्म व्यापारिक कक्षबाट पाँच करोड २५ लाख, बाल उद्यान र होटेल तथा रेष्टुरेन्टबाट २०र२० ल ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विनिमय दर
काठमाडौं, माघ ४– नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ र विक्रिदर २९ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ८७ पैसा र विक्रिदर ३० रुपैयाँ ३ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ६१ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २४ रुपैयाँ ३५ पैसा र विक्रिदर २४ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै, कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ १८ पै ...
प्रभुबैंकको १ अर्बको राइट ब्याकपछि नाफा ३ गुणा बढ्यो, तीन वर्षपछि खराब कर्जा सीमामा
४ माघ, काठमाडौं । प्रुभ बैंकले यसअघि जोखिमको लागि व्यवस्था गरिरहेको १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ फिर्ता ल्याएपछि चालु आवको दोस्रो त्रैमाशमा नाफा पनि करीब ३ गुणाले बढेको छ । बैंकले गत आवको पुससम्ममा ४० करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेकोमा यस आवको यही अवधिमा नाफा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हुनतः बैंकको नियमित आम्दानी पनि ९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले बिना पुँजी लागत कम पर्ने स्रोतहरुबाट पनि राम्रो आम्दानी गरेको छ । खुद ब्याज आम्दानी १ सय ३ प्रति ...
साढे ८ किलो चरेशसहित पक्राउ
४ माघ, काठमाडौं । प्रहरीले साढे ८ किलो चरेशसहित एक जनालाई थानकोट नागढुंगाबाट पक्राउ गरेको छ ।पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग १ ख ३६७८ नम्बरको बसमा सवार बाग्लुङ अर्गल ४ का ५० वर्षीय जुद्ध बनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव निरीक्षक विदुरचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ...
विश्वको आधा जनसंख्याको सम्पत्ती बराबर ८ महाधनाढ्यको सम्पत्ती
३ माघ, काठमाडौं । विश्वभर रहेका मानिसहरुको आधा जनसंख्या र ८ महाधनाढ्यको सम्पत्ती बराबर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । गरिबी घटाउने उद्देश्यका साथ गठन भएको संस्था अक्सफामले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा महाधनाढ्यहरुको सम्पत्ति बढ्दै गएको देखिएको हो । रिपोर्टमा आठ धनाढ्य मध्ये अमेरिकाका ६ जना, स्पेन र मेक्सिकोबाट एक उद्योगपती समावेश छन् । जसमा माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सदेखि फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गसम्म छन् । ‘गरिब र धनिबीचको भिन्न ...
शुक्लाफाँटामा पहिलोपटक गैंडा स्थानान्तरण गरिँदै ३ माघ, चितवन । सरकारले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा गैंडा स्थानान्तरणको तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बर्दिया र शुक्लाफाँटामा गैंडा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बर्दियामा केही गैंडा स्थानान्तरण भए पनि शुक्लाफाँटामा भएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले शुक्लाफाँटामा पनि केही दिनभित्रै गैंडा स्थानान्तरण गरिने अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी छिट्टै पाँच-सात जोडी गैंडा श ...
प्रोफेसनल दियालो प्राप्ति गरेको लक्ष्मी बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु
२ माघ, काठमाडौं । आइतबारबाट लक्ष्मी बैंक र र प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ ।‘क’ वर्गको लक्ष्मी बैंकले ‘ख’ वर्गको प्रोफेसनल दियालोलाई प्राप्ति गरेको हो । एकीकृत कारोबार लक्ष्मी बैंकको नामबाट भएको छ । बैंकले प्रोफेसनल दियालोलाई गाभेपछि कायम भएको चुक्ता पुँजीको आधारमा एक सय प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने तयारी गरेको छ । सो हकप्रदसमेतले पाउने गरी ३८ प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको बैंकको । हकप्रदपछि भने वास् ...
एनसेलसँग लाभांश कर उठाउन लेखा समितिको निर्देशन
२ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलसँग पूँजीगत लाभांश कर तत्काल उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एनसेलले १५ प्रतिशत र एनसेलको ९० प्रतिशत शेयर लिएको टेलिया सोनेराबाट १० प्रतिशत कर उठाउन गरेको ताकेता पूरा नभएको भन्दै तीन महिनाभित्रै काम गूरा गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको अध्यक्षतामा समितिको बैठक आइतबार बसेको थियो । यस्तै समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबापतको कर न ...
भृकुटीमण्डपको ‘बिग सेल’ मेलामा जुत्ता चप्पल किन्नेको घुइँचो
२ माघ, काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी जुत्ताचप्पलको बिग सेल मेला दैनिक रुपमा भीड बढ्दै गएको छ । मेलामा दिइएको आकर्षक दरको छुटले उपभोक्तालाई तानेको छ । नेपाली जुत्ता घरको आयोजनामा भइरहेको मेलामा व्यवसायीले शो-रुमको भन्दा दुई गुणासम्म मूल्य घटााएर जुत्ता, चप्पल बेचिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाली जुत्तामा उपभोक्ताको आकर्षण र विश्वास बढेको छ । विभिन्न कम्पनीले मेलमा मूल्य घटाएर मेलामा जुत्ता, चप्पल राखेका छन् । सबै बर्ग र उमेरका लागि हुने ...
काठमाडौ, २ माघ । जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल निकास विभागले सुख्खा क्षेत्र रहेका सात जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विभागले सुख्खा डाँडामा बस्ती गरेर बसेका बासिन्दालाई शुद्ध पानी खुवाउने उद्देश्यले सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको हो । विभागका उपसचिव अरुणकुमार सिंखडाले सुख्खा क्षेत्रका बासिन्दालाई नदीको पानी मोटरबाट पानी तानेर प्रशोधन गरी खुवाउन सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन ...
चन्द्र भण्डारीको चेतावनीः पाँच नम्वर टुक्रिए सदूरपश्चिम पाँच दिन पनि टिक्दैन
बुटवल, माघ १ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पाँचनम्वर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग पार्ने हो भने सुदूरपश्चिम पनि टुक्रिने चेतावनी दिएका छन् । आज बुटवलमा प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले भने, “पांच नम्बर प्रदेश टुक्रिए सुदूरपश्च ...
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारले सहयोगबापत दिने निर्णय गरेको रु दुई लाखमध्ये जनान्दोलनका एक घाइतेको आधा रकम गायब भएको छ । पहिलो जनान्दोलनमा घाइते भएका मेचीनगर– ६ धुलावारी बजार निवासी ५६ वर्षीय दिलीप प्रधानले पाउनुपर्ने रकम गायब भएको हो । २४ चैत २०४६ मा पञ्चायतविरुद्ध जुलुसमा सहभा ...
नागरिकको जीवनस्तर उकास्नतिर बैंक केन्द्रित हुनुपर्ने’
बागलुङ, १ माघ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले नेपाल बैंक लिमिटेड, गलकोट शाखाको आज एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभयो । सशस्त्रद्वन्द्वमा विस्थापन भएपछि सो शाखा हालै मात्र पुनःस्थापन भएको हो । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री महाराले मुलकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँ ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको विनिमय दर
काठमाडौं, माघ १ – नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ०२ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९० पैसा र विक्रिदर ३० रुपैयाँ ०६ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ६४ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २४ रुपैयाँ ३९ पैसा र विक्रिदर २४ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै, कोरियन वन १ सयको खरिदद ...
काबेली ‘ए’ जल विद्युत आयोजनाको निर्माणमा सुस्तता
ताप्लेजुङ, माघ १ । जग्गा समस्याका कारण ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको काबेली नदीबाट उत्पादन गर्न लागिएको काबेली ‘ए’ जल विद्युत आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । दशैंपछि काम थालिने भनिएको आयोजनाको काम विश्व बैंकसँगको सम्झौता अनुसार सडक क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने भएकाले अझै सडक छुट्यााउन नसक्दा निर्माण सुरु हुन नसकेको हो । विश्व बैंकले सन् २०१० मा गरेको सम्झौता अनुसार सडक क्षेत्र छुट्याउने उल्लेख थियो । ३७ दशमलव ६ मेगावाट विद्युत उत्पा ...
दमकको बजेट ३५ करोड बराबरको
१ माघ, दमक । दमक नगरपालिकाले आगामी आव २०७४ र७५ का लागि शुक्रबारको २३ औँ नगरपरिषद्बाट ३५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बजेट पारित गरेको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण विकास योजना ‘हरित नगर समृद्ध दमक’ भन्ने मूल दृष्टिलाई केन्द्रविन्दु राखेर ल्याइएको जानका ...
बालाजुबाट १५ किलो सुनसहित एक जना पक्राउ
१ माघ, काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी बृत्त बालाजुले १५ किलो सुनसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । टाटा सुमो गाडीमा रसुवाबाट लकाइ छिपाइ ल्याउदै गरेको अवस्थामा उक्त सुन प्रहरीले गए राति ८ बजे बालाजुबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका व्यक्ति गाडी चालक रहेको बताईएको । सुनको मालिकको खोजि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ...
राज्यकोष रित्याउँदै भिआइपीको लावालस्कर
१ माघ, कठमाडौं । को १ झ २३५ नम्बरको गाडी मोरङ-सुनसरी सिँचाइँ आयोजना विराटनगरको हो। जिल्ला आउँने भिआइपीका लागि आयोजनाले यो गाडी छुट्टाइदिएको छ। त्यसैले गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट राखिएको छैन। सेतो रंगको अर्को पजेरोमा हरदम राष्ट्रिय झण्डा झुण्डाइरहेको हुन्छ। चालक दुखाराम चौधरी सफारी सुट र नेपाली टोपीमा तम्तयार हुन्छन्। आयोजनाको महंगो गाडी यहाँ आउने भिआइपी ओसार्न बाहेक अरू काममा प्रयोग गरिएको छैन। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । आफ्नो कामको लागि प्रयोगम ...
विक्रेताहरुको आन्दोलनले बजारमा ग्यास अभाव ९ पुस, भैरहवा । ग्यास डिलर व्यवसायीले ग्यासको विक्री गर्न बन्द गरेपछि बजारमा ग्यासको अभाव हुने थालेको छ । उद्योगहरुले डिलर व्यवसायीले पाउने कमिसन बढाउन माग गर्दै व्यवसायीले ग्याासको विक्री वितरण बन्द गरेपछि बजारमा ग्यासको अभाव हुन थालेको हो । गत पुस २० गतेदेखि लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका साथै स्याङ्जा, प्युठान, रोल्पा र दाङका ग्यास डिलर व्यवसायीहरुले उद्योगबाट ग्यास उठाएका छैनन् । अहिले अधिकांश जिल्लाहरुमा ग्यास अभाव देखिएको छ । ग्यास बिक्रेताहरु ...
३४ किलो सुन काण्डः सरकारी कर्मचारीलाई पहिलो पटक संगठित अपराधमा मुद्धा चल्ने
२९ पुस, काठमाडौं । ३४ किलो सुन काण्डमा संग्लग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका भन्सारका दुइ कर्मचारीलाई संगठित अपराधमा मुद्धा चल्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा तथ्यांक अधिकृतको रुपमा कार्यरत श्रीनारायण यादव र एक्स रे टेक्निसियनको रुपमा कार्यरत राजकुमार ढकाललाई सीआइबीले संगठित अपराध अन्र्तगत मुद्धा चलाउने भएको हो । बिहीबार घरबाटै पक्राउ परेका यादव र ढकाल दुवैलाई सिआइबीले १८ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । गत बि ...
बागमती डेभलपमेन्ट प्राप्ति गरेको सानिमा बैंकको एकिकृत कारोबार सुरु
२९ पुस, काठमाडौं । बागमती डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको सानिमा बैंकको शुक्रबारबाट एकिकृत कारोबार शुरु भएको छ । सर्लाही हरिवनमा आयोजित एक समारोहको प्राप्ति पछिको शुभारम्भ सानिमाका ब्राण्ड प्रवद्र्धक द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचाय तथा सानिमा बैंकका संचालक समितिका सदस्य द्वय भरत कुमार पोखरोल र महेश घिमिरेले संयुक्त रुपमा गरे । अब बैंकको शाखा सञ्जालमा हरिवन तथा लालबन्दीमा पनि थपिएका छन् । बैंकले हरिवन र लालबन्दि शाखाबाट पनि सम्पूर्ण वित्तीय ...
पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामाः अर्थमन्त्री महरा
पोखरा, पुस २९ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका २१ औं नगर परिषद्को सार्वजनिकीकरण समारोहको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले भने– देशकै ठूलो पर्यटकीयस्थलको रुपमा रहेको पोखराको विकासप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। उपप्रधानमन्त्री महराले पोखराको समग्र विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै पोखराको विकासले नेपालकै विकासमा महत्व राख्ने ब ...
दुई करोड ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ
चितवन,पुस २९ नक्कली जग्गाधनी बनेर अर्कैको जग्गा बैंकमा धितो राखी दुई करोड ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चितवनको रत्ननगरस्थित साबिक बछौली गाविसमा कमल बस्नेतको नाममा रहेको १९ कट्ठा १४ धुर जग्गा बैंकमा राखेर कीर्ते गरी रकम निकालेर फरार हुँदै आएका दुई जनालाई प्रहरीले हालै पक्राउ गरेको हो। चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपककुमार थापाका अनुसार नक्कली जग्गाधनी बनेर कीर्ते गर्ने मध्येका मुख्य व्यक्ति काभ्रेपलाञ्चोक मेथिनकोट गाविस–५ बस्ने ६४ व ...
शुक्रबारका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा सटही दर
काठमाडौं, पुस २९ – नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ९४ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ८१ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५५ पैसा र विक् ...
रिलायन्सको साधारणसभा सम्पन्न
२८ पुस, काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको सातौै वार्षिक साधारणसभा २६ पुसमा ट्रेड टावर, थापाथलीमा सम्पन्न भएको छ । सभामा प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाका संचालक समिति अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले आ.व. २०७२÷७३ मा खुद मुनाफा रु. ८ करोड ६५ लाख २६ हजार भएको जानकारी दिए । बैंकले अधिकृत पूँजी रु.८० करोड, जारी पूँजी रु.७१ करोड ३१ लाख ४२ हजार ९ सय र चुक्ता पूँजी रु.४४ करोड ५७ लाख १४४ पु¥याएको छ । अहिले संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयर अ ...
चालिस किलो चरेस र एक लाख ६१ हजार रूपैयाँसहित चार जना पक्राउ
२८ पुस, काठमाडौँ । अवैध लागूऔषध चरेशसहित प्रहरीले चार जनालार्इ पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले धादिङको सिम्लेबजारबार चरेस बेच्नको लागि हिड्दै गरेका चार जनालार्इ पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले धादिङ भुमेस्थानका शम्भु रिजाल, भारतीय नागरिक अकलेशकुमार भग, सन्तोष पासवान र मधु गिरीलार्इ पक्राउ गरेको हो । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले ४० किलो चरेश र एक लाख ६१ हजार दुई सय भारतीय रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीले भारतीय नागरिकहरुलाई ४ वटा झोलामा रहेको उक्त चरेश र नग ...
मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपाल बंगलादेशले लघु कर्जा दिने
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित महिला समूह, महिला सहकारी, समुहमा आवद्ध विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र समुदायलाई लघु कर्जा प्रर्वद्धन गर्ने भएको छ । बिहिबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र नेपाल बंगालादेश बैंकले सहुलियत लुघ कर्जा प्रर्वद्धन संझौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । पहिलो चरणमा बैंकले दाङ, भैरहवा, नारायणगढ, धादिङ,तेह्रथुम र पाँचथरको फिदिमबाट लघु कर्जा प्रवाह गर्ने ...
ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढ्दो
कञ्चनपुर, २८ पुस । बढ्दो विद्युत्भार कटौतीका कारण विद्युतीय ऊर्जाको विकल्पका रुपमा कञ्चनपुरका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्न थालेका छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि सौर्य ऊर्जाको माग यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो रुपमा रहेको छ । सौर्य ऊर्जाको यहाँका बासिन्दाले पानी तताउने, कम्प्युट ...
ऊर्जामन्त्री शर्माको चेतावनीपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज नेपाल आयो २८ पुस, काठमाडौं । नेपालका विकास आयोजनाहरुको ठेक्का लिएर काम अघि नबढाउनेमा भारत सबैभन्दा अगाडि छ । उसैको सिको गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरु पनि ठेक्का लिने तर, समयमा काम नगर्ने बाटोतिर अग्रसर हुन थालेका छन् । यसैको एउटा तीतो उदाहरण बनेको छ ७५० मेघावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना । पश्चिम सेतीमा एमओयू अनुसार समयमै काम नथाल्ने हो भने लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको चेतावनीपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको उच्चस्तरीय टोली नेपाल ...
अब भारु २ हजार नेपालमा पनि चल्ने
२८ पुस, काठमाडौं । नेपालले भारतसामू भारु २ हजारको नोटको बैधानिक कारोबारका लागि प्रस्ताव गरेको छ । ५ सय र एक हजारको पुरानो नोटमा प्रतिवन्ध लगाएको भारत सरकारले २ हजारको नोट ल्याएको छ । तर, यसको कारोबार अहिलेसम्म बैध छैन । भारतले आफ्नो फरेन एक्चेन्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट अन्तरगत फेमा नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र कारोबार बैध हुन्छ । भारु ५ सय र १ हजारको पुरानो नोट सटहीबारे छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको टोली अहिले भारतमै छ । यो टोलीले भारतीय केन्द्रीय बै ...
संविधान कार्यान्वयन गर्न दलहरु गम्भीर हुनुपर्छः कोइराला
दमक, २८ पुस। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले तीनै तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन । बुधबार झापाको दमकमा बिपी चिन्तन प्रतिष्ठान झापाले गरेको प्रजातन्त्र सेनानीको सामूहिक सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयन गरी देशलाई शान्ति र संमृद्धितर्फ अघि बढाउन संविधानले दिएको समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त अधिकारलाई संस ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार तोकेको विनिमय दर
काठमाडौं, पुस २८ – नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार तोकेको अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ७ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९४ पैसा र विक्रिदर ३० रुपैयाँ ८ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ६८ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २४ रुपैयाँ ३८ पैसा र विक्रिदर २४ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै, कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ ...
आजको पत्रपत्रिकामा आर्थिक समाचारः जलविद्युतमा एक सय १० करोड प्रतिबद्धता
२८ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न समाचारले स्थान पाएका छन् । नागरिक दैनिकले जलविद्युतमा एक सय १० करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता भन्ने समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने ‘बर्दिबास-जनकपुर-जयनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा १ वर्षपछि ५ रेल आवश्यक’ समाचारलाई पन ...
न्यायमा गरिबलाई पहिलो प्राथमिकताः प्रधान न्यायधीश कार्की
खोटाङ, पुस २७ – प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीले हरेक न्यायलयले गरिब, निमुखा र पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जिल्ला अदालत खोटाङको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायधीश कार्कीले अझैपनि न्यायलयप्रति सर्वसाधारणको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निमुखा, गरिब तथा अदालतसम्म पुगेर खर्च गर्न नसक्ने सर्वसाधारणप्रति न्यायकर्मी समर्पित ...
आरएमडीसीको २० प्रतिशत लाभांश स्वीकृत
२७ पुस, काठमाडौं । रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेण्टरको १८ औं वार्षिक साधारण सभाले १० प्रतिशत बोनस तथा १० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले आव २०७२र७३ को वासलात, नाफा नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण पनि स्वीकृत गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा २६ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ संचालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाहरुलाई थोक ऋण प्रदान गर्न २०५५ कार्तिक १३ गते यस कम्पनीको स्थापना ...
४० किलो चरेससहित चार जना पक्राउ
धादिङ, पुस २७ – धादिङको भुमेस्थानस्थित सिम्लेबाट ४० किलो लागु औषध चरेससहित चार जनालाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत सिम्मलेमा गाडी कुरेर बसेका बेला प्रहरीलाई देखेपछि भागन लागेका उनीहरुलाई प्रहरीले पक्रेको हो । उनीहरुको साथबाट ४० किलो चरेससहित प्रहरीले चरेसको कारोबारबाट आएको एकलाख ६१ हजार २ सय भारतीय रुपैयाँ पनि बरामद गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धादिङ भुमेस्थान– ७ का ३४ वर्षे सन्तोष रिजाल, भारत दरभंगाका–२ ...
भारु साट्ने पहल गर्न राष्ट्रबैंकको टोली भारतमा २७ पुस, काठमाडौं । भारु सटहीबारे पहल गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको एक टोली आज भारत गएको छ । भारतले छलफलका लागि बोलाएकाल डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भिष्मराज ढुंगाना, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव र भारतका लागि नेपाली राजदुताबासका एक प्रतिनिधिसहित टोली भारत गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । भारतले छलफलका लागि बोलाएपछि अब नेपालमा रहेका एक हजार र पाँच सयका ...
सुन र डलर तस्करीका भरिया मार्फत मालिकसम्म पुग्ने प्रयास २७ पुस, काठमाडौं । नेपालभित्र सुन तस्करी र अवैध डलर कारोबार गर्ने एउटै गिरोह रहेको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार ३४ किलो सुनसहित समातिएका भरियालाई डलर तस्करीमा पनि प्रयोग गरिएको पाइएको छ । सुन र डलर तस्करीका भरिया मार्फत मालिकसम्म पुग्ने प्रयास भने अझै सफल हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । गत बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सजिलै पार भएको ३४ किलो सुन सीआईबीले बरामद गर् ...
पशु सेवा कार्यालय बैतडीले ल्यायो भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम
बैतडी, पुस २६ – बैतडीमा भैँसी लोप हुँदै गएको छ । बैतडीका धेरैजसो किसानले भैँसीपालन व्यवसायलाई छोड्दै गएकाले भैँसी लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो । भैँसीमा लाग्ने खरी रोग, भैँसीको स्याहारसुसारका लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने र दूधको बजार पनि राम्रो नभएकाले भैँसी पालन व्यवसाय संकटमा परेको पशु प्राविधकले बताएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाटन बैतडीका अनुसार पछिल्लो समयमा भैँसी पालनमा किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ । चरिचरनको अभाव, विभिन्न रोग तथा भै ...
जडिबुटीबाट ६ महिनाको अवधीमा झण्डै ४६ लाख राजस्व संकलन जुम्ला, पुस २६ – जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षको पुस १५ गतेसम्म जडिबुटीबाट ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालबाट जडिबुटी संकलन सहमति लिएका झण्डै ४० जना संकलकहरुबाट वन कार्यालय जुम्लाले ६ महिनाभित्रयो राजश्व संकलन गरेको जिल्ला वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्र ...
एनसेल सर्वोत्कृष्ट विज्ञापन करदाताबाट सम्मानित
काठमाडौं, पुस २५ – काठमाडौं महानगरपालिकाले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विज्ञापन कर बुझाएबापत सम्मान गरेको छ । सोमबार काठमाडौं महानगरपालिको २९ औं महानगर परिषद्बाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा एनसेललाई सम्मान स्वरुप कदरपत्र प्रदान गरेको हो । महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा महानगर कार्यालयले चार करोड १७ लाख रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गरेको थियो । संकलित विज् ...
मह जोडीले धुर्मूस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिए एक लाख, मुसहर बस्ती बनाउन एकैदिन ३५ लाख संकलन
२६ पुस, बर्दिबास । हाँस्य कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले मुसहर बस्ती बनाउन एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई शिलान्यास समारोहमै ३५ लाख बराबरको सहयोग जुटेको छ । फाउन्डेसनले सोमबार बर्दिबासस्थित मुसहर बस्तीमा तेस्रो एकीकृत नमूना बस्तीको शुभारम्भ गरेको थियो । बस्ती निर्माणको शिलान्यास मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले गरेका थिए । बस्तीको शिलान्यासका लागि पुगेका हास्य कलाकारद्वयले सहयोगको घोषणा गर्दै बस्ती ...
सामाजिक सञ्जाल सगुनले मिनी आइपिओमा २ करोड डलर भन्दा बढी लगानीको रुपमा जुटाउने तयारी
काठमाडौं, पुस २६ – सामाजिक सञ्जाल सगुनले अमेरिकी सेक्युरिटिज् तथा एक्सचेन्ज कमिसन एसइसीमा रेगुलेशन ए प्लस व्यवस्था अन्तर्गत मिनी आइपीओ खुल्ला हुनु अगाडि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको आशय प्राप्त गरेको छ । सगुनले मिनी आइपिओमा २ करोड डलर अर्थात २ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको रुपमा जुटाउने तयारी गरेको छ । नेपाली युवा गोविन्द गिरीले बनाएको सामाजिक सञ्जाल सगुनले मिनी आइपिओ खुल्ला गर्नु अगाडि सम्भावित लगानीकर्ताहरुबाट आशय आह्वान गरेको थियो ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विनिमय दर काठमाडौं, पुस २६ – नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ १ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ८९ पैसा र विक्रिदर ३० रुपैयाँ ५ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ६३ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २४ रुपैयाँ ३१ पैसा र विक्रिदर २४ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै, कोरियन वन १ सयको खरिदद ...
सिमसार क्षेत्रमा जलपक्षीको गणना सुरु
बर्दिया, पुस २६ – बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसहित संरक्षित क्षेत्र र सिमसार क्षेत्रमा जलपक्षीको गणना सुरु भएको छ । बर्दियाको कर्णाली नदी, बबई नदी, बढैया ताल र सतखलुवा ताल लगायतका क्षेत्रमा सोमबारदेखि जलपक्षी गणना सुरु भएको बर्दिया प्रकृति संरक्षण क्लबका अध्यक्ष एवं चरा विज्ञ रामबहादुर शाहीले जान ...
तानसेन नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १४ करोड बढी बजेट सार्वजनिक गर्यो
२६ पुस, पाल्पा । तानसेन नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १४ करोड बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ का लागि पुँजीगततर्फ १३ करोड, १४ लाख ७२ हजार ७१६ र चालुतर्फ १ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको छ । बसोमबार आयोजित तानसेन नगरपालिकाको २० औं नगर परिषदमा कार्यकारी अधिकृत अनिल पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७४ ...
२६ पुस, काठमाडौं । आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको अर्थ पृष्ठ र आर्थिक दैनिकहरुमा फरक-फरक आर्थिक समाचारले स्थान पाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट्को आर्थिक पृष्ठमा १३ अर्ब खर्चेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारी तयारी र कृषि क्षेत्रमा सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब लगानी गर्ने समाचार महत्वका साथ छापिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकको आर्थिक पृष्ठमा काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा सार्ने तयारी भएको र उर्जा मन्त्रालयले जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने प ...
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव छैनः राष्ट्र बैक
२५ पुस, काठमाडौँ । बैकंहरुले मुद्दति खाताको ब्याज दर दिनदिनै बढाइरहेका छन् । ब्याज दर ११.११ प्रतिशत नै पुगिसकेको छ । तर बैकहरुले लगानी योग्य रकमको अभाव रहेको भन्दै कर्जा प्रवाह भने गरेका छैनन् । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव भन्ने कुरामा राष्ट्र बैक सहमत देखिएको र्छैन ।पछिल्लो समय बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुले बैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएको भन्दै कर्जा लगानी गर्न हिचकिचाई रहेका छन । तर राष्ट्र बैंकले दश अर्व रिपो जारी गर्दा ब ...
सुनको भाउ आजपनि बढ्यो
काठमाडौं, पुस २५ – यो महिना लागेपछि उकालो लागेको सुनको भाउ सोमबार पनि बढेको छ । सोमबार तोलामा एक सय रुपैयाँले बढेर सुन ५३ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो महिनाको सुरुमा तोलाको ५१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन त्यसयता लगातार बढ्दै गएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको भाउ अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग बढेकाले भाउ बढ्ने अनुमान गरिएको हो । सोमबार चाँदीको भाउ भने स्थिर छ । आइतबार जस्तै चाँदी ...
प्रहरीको आँखा जडीबुटी र जुवामा पुस २५, रुकुम । प्रहरीले रुकुम जिल्लाको महत गाविसका ५५ बर्षीय मोहन बुढालाई लोपोन्मुख बनआलु भन्ने सातगाठे अवैध जडीबुटी सहित पक्राउ गरेको छ । कुकुर तरुलको संकलन पुर्जि लिई लोपोन्मुख बनआलु भन्ने सात गाठे अबैध जडीबुटी संकलन गरी मुसिकोट–५ स्थित मुरली होटलको कोलियामा लुकाई राखेको अवस्थामा बुढा ...
ट्रम्पलाई ओबामाको सुझावः ह्वाइट हाउस ‘पारिवारिक व्यवसाय होइन’
पुस २५ – अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसलाई ‘पारिवारिक व्यवासाय’ जसरी सञ्चालन नर्गन सुझाव दिनुभएको छ । अमेरिकी टेलिभिजन एबिसी न्युजसँगको अन्तर्वाताको क्रममा राष्ट्रपति ओबामाले ट्रम्पले अमेरिकी सम्मानित संस्था ह्वाइट हाउसको सम्मान गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘डोनाल्ड ट्रम्प तपाईंले सपथ लिएपछि विश्वकै ठूलो संस्थाको प्रमुख बन्नु हुनेछ, त्यसको सम्मान गर्नु ...
काठमाडौं, पुस २५ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ९१ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ७८ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ९५ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५३ पैसा र विक्रिदर २ ...
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले कर्मचारीलाई ५३ करोडभन्दा बढी बोनस बाँड्दै
२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ८ सय कर्मचारीलाई ‘बोनस’ बाँड्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले ५३ करोड २७ लाख रूपैयाँ छुट्टाएको छ। संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय सहमतिका लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पर्यटनबाट सहमति आउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स ...
घडी चोरको आरोप लागेपछि सासंद रामहरी खतिवडा के भन्छन् त ?
२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता तथा सांसद रामहरि खतिवडा यतिबेला समाजिक सञ्जालमा चर्चामा छन् । उनीमाथि रोलेक्स घडी चोरेको आरोप लागेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । र्‍याडिसन होटलको जिम क्लबबाट खतिवडाले घडी चोरेको भन्दै उनीमाथि आरोप लागेको छ । यसबारेमा पत्रकारहरुले सोधे, तपाईले पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका छोराको १४ लाख पर्ने रोलेक्स घडी चोरेको आरोप लागेको छ, खास कुरो के हो ? सांसद खतिवडाले यसबारेमा यसरी जवाफ दिए ...
भारु ५ सय र १ हजारको नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक
२४ पुस, काठमाडौं । नेपालसँग रहेको भारु ५ सय र १ हजारको नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । ‘भारतीय पक्षले छलफल गर्न चाहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौं, समय भने तय भएको छैन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा विदेशी बिनिमय बिभागका प्रमुख भिष्मराज ढुंगानाले भने । नेपालमा रहेको भारतीय दुतावासले हालै अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो जानकारी दिएको हो । छलफलको लागि भारत जान यसअघि नै डुपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवा ...
रोलरले च्याप्दा धनुषामा एक बालकको मृत्यु जनकपुर, पुस २४ – धनुषामा बाटो निर्माणको क्रममा माटो मिलाउने रोलरले च्याप्दा एक बालकको ज्यान गएको छ । धनुषाको नागराइनमा बा २ क २७७१ नम्बरको रोलरले च्याप्दा जटही बस्ने मदन यादवका तीन वर्षका छोरा प्रिन्सकुमार यादवको ज्यान गएको हो । घटनाको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गरेका छन् । रोलरका चाल ...
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकालाई ‘साथी अभियान’ले सहयोग गर्ने पुस २४ – नेपाली साझा मञ्च साउदी अरबले ‘साथी अभियान’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । रोजगारीका क्रममा पीडित भएकालाई निःशुल्क कानूनी सहयोग र परमर्श दिन अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाली राजदूतावास रियादका श्रम सहचारी अम्बिकाप्रसाद अधिकारी, गैर आवासीय नेपाली संघ साउदी अरबका पूर्व अध्यक्ष पु ...
काठमाडौं, पुस २४ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ८१ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ७८ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ९५ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५२ पैसा र विक्रि ...
आजका पत्रिकामा आर्थिक समाचारः सुनको माग बढेपछि तस्करको हल्लीखल्ली २४ पुुुस, काठमाडौं । आज आइतवार काठमाडौंवाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न समाचारले स्थान पाएको छ । बजारमा पछिल्लो समय सुनको माग बढेपछि तस्करहरु सलबलाएको अन्नपूर्ण पोष्टले उल्लेख गरेको छ । डन्डी उद्योगमा ठूलो लगानी भन्ने समाचारलाई पनि अन्नपूर्णले स्थान दिएको छ । जुम्लामा स्याउ ग्रेडिङ मेसिन राखेको समाचारलाई अन्नपूर्णले स्थान दिएको छ । नेपाली बुलेट ३३ दिनदेखि नाकामै भन्ने समाचारलाई कारोवार दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । बुढी गण्डक ...
विद्युतको ८० रुपैयाँ बुझाउन १००० खर्च
रामेछाप, पुस २३ – बिजुली बत्ती बालेको ८० रुपैयाँको बिल तिर्नको लागि रामेछापका दुर्गम गाविसका उपभोक्ताहरु तीन दिनको पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आफ्ना उपभोक्ताहरुको लागि पायक पर्ने स्थानमा विद्युत महसुल काउन्टरको व्यवस्था गर्न नसक्दा जिल्लाका दुर्गम गाविस दोरम्वा, टोकर ...
पुनर्निर्माणका लागि भारतीय अनुदान खै ?
पुस २३, काठमाडौं –भूकम्प गएको वर्ष असार १० गते सरकारले गरेको दाता सम्मेलनका बेला भारतले पुनर्निमाणका लागि सबैभन्दा बढी अनुदान घोषणा गरेको थियो । पुनर्निमार्णका लागि भारतसँग आर्थिक सम्झौता भएपनि अझैं परियोजना सम्झौता नहुँदा भारतीय सहयोग र ऋण रकमबाट काम शुरु भएको छैन । गएको फेब्रुअरीमा फाइनान्सियल सम्झौता भएपनि काम परियोजना सम्झौता हुन नसकेको हो । भारतले अनुदानका रुपमा २ सय ५० मिलियन अमेरकी डलर र ऋणका रुपमा ७ सय ५० मिलियन डलर सहयोग गर्दैछ । भ ...
अग्नी पीडितका लागि ‘संक्रान्तिबजार राहत तथा पुनःस्थापना कोष’ मा साढे १६ लाख संकलन
तेह्रथुम, पुस २३ । तेह्रथुमको आठराई संक्रान्तिबजारका अग्नी पीडितका लागि ‘संक्रान्तिबजार राहत तथा पुनःस्थापना कोष’ मा साढे १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । नेपाल बैंकमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सञ्चालन गरेको कोषमा तेह्रथुमका विभिन्न संघसंस्थासहित छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा लगायतबाट राहत सहयोग संकलन भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयप्रकाश बस्नेतले जानकारी दिए । अग्नीपीडित ...
सहजै जुट्न सक्छ फास्ट ट्रयाकमा लगानीः अर्थविद् वाग्ले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन कुनै कठिन छैन । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट सहजरुपमा रकम ल्याउन सकिन्छ । यसमा जनताबाट पनि यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सकिन्छ । पूरै रकम जनताबाट उठाउने होइन कि उनीहरुको पनि आयोजनामा अपनत्व होस् भन्नका लागि केही रकम संकलन गर्न सकिन्छ । विशेष गरी अहिले देशमा भित्रने गरेको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ । अब हामीले त्य ...
गरिबीको रेखामुनी रहेका तिन जिल्लाका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता २३ पुस, काठमाडौं । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका रौतहट, बझाङ र अछाम जिल्लाका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्र ती जिल्लामा बसोबास गर्ने पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले आम्दानी नभएका परिवारका बालबालिकालाई पोषणका लागि मासिक रु छ सय दिन लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, &ldq ...
गुल्मीका डोरविक्रम श्रीसले जिते इन्ट्याग्रिटी आइडलको उपाधि
काठमाडौं, पुुस २२ – सक्षम, इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ एकजना राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्मानका लागि एकाउन्ट्याविलिटी ल्याबले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने इन्ट्याग्रिटी आइडल २०१६ को उपाधि गुल्मीका डोर विक्रम श्रीसले प्राप्त गर्नु भएको छ ।श्रीस गुल्मीको तम्घासमा रहेको शिद्धबाबा उमाविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँले विद्यालयमा रहेर सिकाईलाई व्यावहारिक र समय सापेक्ष बनाउन कक्षा १ देखिका विद्यार्थीका लागि कम्प्युटरको ब्यवस्था गर्नुका साथै आठ हजारको हाराह ...
निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेरहद ६० वर्ष तोकिँदै
२२ पुस, काठमाडौं । तपाईं प्रशासन सेवाअन्तर्गतको सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने खुसीको खबर छ । किनकी सरकारले निजामती कर्मचारीको जागिर खाने उमेर हद दुई वर्ष थप्दैछ । सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पाँचौ संशोधन गरेर निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न लागेको छ । पा ...
शुक्रबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा सटही दर
काठमाडौं, पुस २२ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ८९ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ७६ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ९३ पैसा छ भने युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५० पैसा र विक्रिदर २ ...
लगानीकर्ताले नबुझेको करिब ७ करोड लाभांश कोषमा जाँदै, १२ कम्पनीले पठाए विवरण
२२ पुस, काठमाडौं । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका १२ संस्थाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको निर्देशन अनुसार लगानीकर्ताले नलगेको पाँच वर्ष पुरानो लाभांशको विवरण पेश गरेका छन् । ‘हामीले १ महिनासम्ममा यस्तो विवरण पठाउन भनेका हौं, हालसम्म १२ संस्थाले ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँको लाभांश लान बाँकी रहेको विवरण पठाएका छन्,’ रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । यो विवरणमा प्राथमिक सेयर निष्कासनमा आवेदन दिएर पनि पाँच वर्षसम्म नपरेको सेयर वापत फिर्त ...
चुचुरेमा जलविद्युतको काम १० प्रतिशत बाँकी
२२ पुस, रामेछाप । रामेछाप जिल्लाको चुचुरे–२ मा बन्न लागेको २.८३ मेगावाटको जलविद्युत्को काम ९० प्रतिशत पूरा भएको आयोजनाका लेखा प्रमुख दिलु कार्कीले बताएका छन्। चाके खोलाको पानीलाई चुचुरे वडा नं २, ३ र ४ हुँदै पाँच किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइसकिएको छ भने चुचुरे–२ मा विद्युत् प्रसारण गरिने घर ...
सिटी एक्सप्रेसबाट पैसा पठाउँदा सन्दिलिपले जिते काठमाडौंमा घँडेरी
२१ पुस, काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेसबाट पैसा पठाउँदा महोत्तरीका सन्दिलिपकुमार महतोले काठमाडौंमा ४ आनाम घँडेरी जितेका छन् । महतो दशैं तिहार र छठको अवसरमा लागू भएको ‘सिटी बजाउनुहोस् काठमाडौंमा घडेरी पाउनुहोस्’ उपहार योजनाको भाग्यशाली बम्पर उपहार विजेता घोषित भएका हुन् । कम्पनीले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बम्पर उपहार योजनाको विजेता विद्युतीय गोला प्रथामार्फत छनौट गरेको हो । महोत्तरीस्थित लक्ष्मीनिया(७ निवासी महतोले काठमाडौं उपत्यकामा ४ आन ...
३४ किलो सुन सहित एयरपोर्टबाट तिनजना पक्राउ २१ पुस, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३४ किलो सुन बरामत गरेको छ । सुनसँगै तीन जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार दुवईबाट काठमाडौं आएको एयर अरेवियाको विमानबाट सुन बरामद भएको हो । बरामत गरिएको सुनमा १० तोलाको दरमा २८२ पिस सुनका विस्कुट, १९ थान औंठी र २० थान सिक्रीजस्तै आकारका सुनका मालाहरु छन् । प्रहरीले यसको तौल ३४ किलो रहेको बताएको छ । कगल विषेश सूचनाको आधारमा विमानस्थल पुगेको सि ...
सुनचाँदीको भाउ आज पनि बढ्यो
काठमाडौं, पुस २१ – सुनचाँदीको भाउ बिहीबार पनि बढेको छ । तोलामा तीन सय रुपैयाँले बढेर सुन मूल्य ५३ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग बढेकाले त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसा ...
‘दंगल’ले उछिन्यो सलमानको ‘सुल्तान’ लाईः ३०४.३८ करोड माथिको व्यापार बलिउडमा नायक सलमान खानलाई बक्स अफिसका राजा मानिन्छ । तर, सलमानलाई पनि पछि पार्ने अर्का खान छन्, आमिर खान । जसको चलचित्रले बलिउडमा सर्वाधिक धेरै कमाई गर्ने गरेका छन् । सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्रको सूचीमा आमिर खानकै ‘पीके’ चलचित्र छ । बलिउडमा अधिकांश चलचित्र सय करोड कमाउन असफल हुन्छन् । तर, आमिर खानका क्रिसमसमा रिलिज भएको चलचित्र ‘दंगल’ले दोश्रो साताको ६ दिनमै १ सय करोड माथिको व्यापार गरेको छ । यो चलचित्रले दोश्रो साताको ६ ...
सूर्नयागाड लघुजल विद्युत आयोजना बन्द हुँदा ७० घरपरिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य
बैतडी, पुस २१ – बैतडीको शंकरपुर–९ मा रहेको सूर्नयागाड लघुजल विद्युत आयोजना बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । जिल्ला उर्जा शाखाको सहयोगमा २०५७ सालमा निर्माण गरिएको १० किलोवाट क्षमताको आयोजनाले शंकरपुरको वडा नम्बर १ र ९ का ७० घरपरिवारले बिजुली बाल्दै आएका थिए । गए ...
कुमारी बैंकको २१ प्रतिशत बोनस, गरिमा बिकासको २० प्रतिशत २० पुस, काठमाडौं । कुमारी बैंकले २१ प्रतिशत र गरिमा बिकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । कुमारी र गरिमा दुवैको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । बैंकहरुको यो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि साधारण सभामा पेश गरिने छ । सभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले य ...
छिनमै २० लाख कमाउन खोज्दा १० लाख यसरी फुत्कियो ।
काठमाडौं, पुस २० । लमजुङको बेंसीसहर घर भै कामाडौंको बसुन्धरा बस्ने मिनमाया तामाङले वर्षौं मलेसिया बस्दापनि कमाउन नसकेको रकम केही मिनेटमै कमाउने सपना देखिन् । यो सपना देखाएका थिए सिन्धुपाल्चोकको कर्थली ६ का ३३ वर्षीय लक्ष्य भन्ने नारायण बहादुर भण्डारी र उनकै गाउँले भाइ २३ वर्षीय सरोज भण्डारीले । मिनमायाका श्रीमानसँग नारायणको ६ महिना पहिले मलेसियाको केलाङमा सामान्य चिनजान भएको थियो । मिनमाया र उनका श्रीमान् मलेसियामा रोजगारी गर्छन् । नारायण पनि ६ म ...
नेपाल लाइफ र समता माइक्रोफाइनान्समा आस्वा प्रणाली लागु नहुने २० पुस, काठमाडौं । प्राथमिक सेयरमा आवेदन दिदा लगानीकर्ताको बैंकमा रहेको बचत खातामा रकम रोक्का रहने प्रणाली ९आस्वा० नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र समता माइक्रोफाइनान्सको सेयर निष्कासनमा लागु नहुने भएको छ । ‘हामीलाई लगानीकर्ताहरुले सोधि रहेका छन्, तर हामीले पुसअन्त्यबाट नै सेयर जारी गर्न लागेकोले माघ ...
फेमिलियरको राष्ट्रिय अभियान
१९ पुस, काठमाडौं । नेपालमा आयुर्वेदिक तथा प्रकृतिजन्य बिभिन्न वस्तु र सामग्रीहरु उत्पादन गरी आफ्नो व्यावसाय विस्तार गर्नको लागि वर्ड मार्ट युनिक सोलुसन प्रालीले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । स्वेदेशी आयुर्वेदिक उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्ध,दीर्घकालिन स्वास्थ्य सौन्र्य एवम् अर्थतन्त्रका लागि फेमिलियर अभियान भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न कार्यक्रममा आफ्नो व्यावसायलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा ब्रान्डिङ गर्नको लागि देशभर नै अभियान सन्चालन गर्ने क्रममा फेमिलियर ...
फेमिलियर व्राण्डका उत्पादनहरुको प्रदर्शनी हुँदै
स्वदेशी आयुर्वेदिक जडिबुटिजन्य उत्पादन, प्रयोग र प्रवद्धनका लागि फेमिलियर व्राण्डले फेमिलियर विशेष सेमिनार–२०७३ को आयोजना गर्ने भएको छ । पौष १८ गते दिउसो २ बजे देखी युनाईटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा हुने उक्त सेमिनारमा फेमिलियर व्राण्डका उत्पादनहरुको प्रदर्शनी, बहुउपयोगी ब्यावसायीक प्रशिक्षण सहित ‘स्वदेशी आयुर्वेदिक उत्पादनमा यसले स्वास्थ्य सौन्दर्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम ...
झन्डै तेइस लाख जनतालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने १९ पुस, काठमाडौं । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ मा २२ लाख ८९ हजार २ सय ८२ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । विभागले ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख जाति, अपाङ्ग भएका व्यक्ति र दलित तथा कर्णाली अञ्चलका पाँच वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई समेत सामाजिक भत्ता दिन लागेको हो । जसमा ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता एक हजार र औषधि उपचा ...
दुई महिनाभित्र द्धारी हाइड्रोपावरले विद्युत उत्पादन थाल्ने
दैलेख, पुस १५ । दैलेखमा निर्माणाधीन द्वारी हाइड्रोपावरले आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ । तीन वर्षअघि सुरु भएको आयोजनाबाट ३ दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पावरहाउसको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको र टर्वाईनसमेत जडान भइसकेको छ । करिव चार किलोमिटर पाईपलाईन रहेको द्वारी हाईड्रोपावरमा द्वारी खोलाको पानीलाई ४ सय १० मिटर माथिबाट खसालेर विद्युत् उत्पादन हुने छ । करिब ८५ करोडको ...
विद्युत् आपूर्ति पुनः सुरू
१४ पुस, काठमाडौँ । मर्स्याङ्दी–स्युचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनमा आएको खराबीका कारण राजधानी काठमाडौँ र आसपासको क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको विद्युत् प्रसारण पुनः सुरू भएको छ । प्राधिकरणले कुलेखानी–स्युचाटार प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएर विद्युत् नियमित गरेको जनाएको छ। आज बिहान ७ः२० बजे एकाएक मर्स्याङ्दी–स्युचाटार प्रसारण लाइनको जम्पर तार टुट्न गई राजधानीमा साढे दुई घन्टा विद्युत् अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्त ...
नेप्सेमा लगानीकर्ताको धर्ना अल्टिमेटम दिएर सकियो
१३ पुस, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रांगणमा बुधवार विहान १०स्३० बजेदेखि १२ बजेसम्म लगानीकर्ताहरुले धर्ना दिएका छन् । बिभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै नयाँ सेयर लगानीकर्ता संघले आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा अन्य लगानीकर्ताहरुको पनि उपस्थिती रहेको थियो । ‘हामीले हाम्रा मागका विषयमा आइतवारसम्ममा नेप्सेका धारणा माग गरेका छौं, त्यसपछि आउने जवाफको आधारमा अन्य कार्यक्रम तय गर्नेछौं,’ सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले भने । संघ ...
सिँचाइ गर्ने बेला बीउको बहस
१३ पुस, काठमाडौं । गहुँमा सिँचाइ गर्ने समय नजिकिसकेको बेला ससदमा गहुँको बीउका बारेमा छलफल भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा गहुँको बीउ तथा हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल आपूर्तिको अवस्थाबारे छलफल भएको हो । धान, मकैपछिको तेस्रो प्रमुख बालीका रुपमा रहेका गहुँ कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत योगदान गरेको छ । बैठकमा सांसद शिवकुमार मण्डलले भने( सिँचाइ गर्ने बेलामा बीउको कुरा गरिएको छ, दुई महिनाअघि यो ...
महत्वकाँक्षी योजना सहीत आयो काठमाडौं क्यापिटल लिमिटेड, फरक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्घोष १३ पुस, काठमाडौँ । विविध महत्वकाँक्षी योजना सहित काठमाडौं क्यापिटल लिमिटेडको औपचारी शुभारम्भ गरेको छ । सय करोड पुजी भएको काठमाडौं क्यापिटल लिमिटेडको मंगलवार उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गरेका थिए । एक अर्व पुजि भएको उक्त कम्पनीमा हाल ७ जनाको संचालक समिती रहेको छ भने सर्वसाधारण शेयर जारी भएपछि सर्वसाधारण शेयर धनिबाट थप दुई जना संचालक समितीमा सदस्य थप गरिने बताइएको छ । २ सय छपन्न जना सस्थापक शेयर धनि रहेको काठमाडौं क ...
रामपुर दामाचौर पुल निर्माण अलपत्र
११ पुस, पाल्पा । कालीगण्डकी नदीको प्याक्लुकघाटमा निर्माण गर्न लागिएको रामपुर दामाचौर मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–९ र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–४ जोड्ने रामपुर दामाचौर मोटरेबल पुलको डिजाइन परिवर्तनका लागि मन्त्रालयले अनुमति स्वीकृित नगरेका कारणबीचमै रोकिएको हो। इलाइट एस बिए जेभी कम्पनीले आव २०६७/०६८ मा १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का ...
स्थानीयवासीको रकम सङ्कलनद्वारा बाटो निर्माण
११ पुस, दाङ । यहाँका स्थानीयवासीले रकम सङ्कलन गरेर पश्चिम दाङको बाघमारेको हारीचौर हुँदै सल्यान जोड्ने सडकखण्ड स्तरोन्नति गरेका छन्। स्थानीयको रकमबाट गरुलेनीदेखि बसेनी जोड्ने सडकको स्तरोन्नति भएको छ। १० घर परिवारबाट प्रतिघर परिवार २४ हजार रुपैयाँका दरले रकम सङ्कलन गरी दुई किलोमिटर बाटो निर्माण गरिएको स्थानीय अगुवा मानबहादुर केसीले बताए। मूल सडकदेखि केही टाढा रहेको बसेनी गाउँका स्थानीयले गाविस, सङ्घसंस्था तथा विभिन्न राजनीतिक दलसँग पटकपटक हारगुहार ...
नारायणगढ–बुटवल सडकः १६ अर्ब खर्च, दाउन्नेको उकालोमा तीन लेन रविन्द्र घिमिरे/सुदिल पोखरेल, ११ पुस, काठमाडौं । नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको सडक खण्ड आधुनिक स्वरुपमा विस्तार हुने भएको छ । अहिले दुई लेनमात्रै रहेको यो खण्ड विस्तारपछि चार लेनको हुनेछ । सँगै अस्फाल्ट र सर्भिसलेन पनि जोडिनेछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तरगतको महत्वपूर्ण खण्डका रुपमा रहेको सडकलाई विस्तार गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडक विभागले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा यो खण्डको विस्तार गर्न लागेको हो । यसका लागि टेण्डर आह्वान भइसकेक ...
विद्युत्भार कटौती अभियानमा अवरोध नगर्न सङ्गठनको आग्रह
१० पुस, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा जारी विद्युत्भार कटौती मुक्त अभियानमा अवरोध नगर्न र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा राजनीतिलाई हाबी हुन नदिन नेविप्रा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (संयुक्त)ले आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणमा क्रियाशील नेविप्रा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको एकता महाधिवेनशले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा आज जानकारी दिँदै सङ्गठनले लामो समयदेखि विद्युत्भार कटौती गरेर मुलुकको आर्थिक विका ...
मोरङका किसान उखु खेतीबाट विस्थापित हुँदै
१० पुस,पथरी (मोरङ) । मोरङको कदमाहाका गणेश रायको परिचय फेरिएको एक वर्ष भयो । कदमाहाकै अभय ऋषिदेवको पनि दैनिकि बदलिएको एक वर्ष पुग्यो । अहिले ऋषिदेव र रायको दैनिकी बदलिनुका साथै पेसा पनि बदलिएको छ । उनीहरु एक वर्षअघि सम्म आफ्नो परिचय कृषक भनेर दिन्थे भने अहिले व्यवसायी । कदमाहाका राय मात्रै होइन केही वर्षयता मोरङका धेरै व्यक्ति कृषकबाट व्यापारी र मजदुर भएका छन् । कोही वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार, साउदी अरब, ओमान, दुवइ, मलेसिया, बराइन, गएका छन् । कद ...
विद्युत् लाइन काट्दा एक करोड आम्दानी
८ पुस, कावासोती । नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र, कावासोतीले विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर एक करोड १७ लाख ९४ हजार एक सय १५ रुपैयाँ असुल गरेको छ । पाँच महिनाको अवधिमा कावासोती केन्द्रले पाँचसय ६२ ग्राहकको लाइन काटेको छ। हुकिङ गरी विद्युत् चोरी गर्ने ६ सय ४९ जनालाई कारबाहीसमेत गरेको नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र कावासोतीका प्रमुख उमेशप्रसाद यादवले बताए। मिटरबाट चुहावट गर्ने ग्राहकबाट मात्रै ६ लाख नौहजार दुईसय ५७ रुपैयाँ असुल गरेको यादवले ...
८ पुस, डडेल्धुरा । केही वर्षपहिले सम्म जङ्गलमा नै बसी जङ्गली कन्दमूल, गिट्ठा भ्याकुर खाएर जीविकोपार्जन गरिरहने राउटे जातिका मानिसलाई नेपाल सरकारले पुनःस्थापना गरेपश्चात् व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख भएका थिए । जङ्गली ओडार छोडेर गाउँघरमा बस्नाका साथै खेतबारीमा अन्न लगाउन पनि उनीहरु अग्रसर बनेका हुन् । राउटे जातिका मानिस जोगबुढाको अमपानीमा व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका भए पनि तरकारीले बजार नपाउँदा र लगानी अनुरुपको तरकारीको मूल्य पनि ...
सुरुङमार्गका लागि ५ अर्व २९ करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौता
७ पुस, काठमाडौं । जापानले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि करिब १५ अर्व २९ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहिबार एक कार्यक्रमकाबीच अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले परियोजनाका लागि आवश्यक ऋण सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए।सुरुङमार्गको निर् ...
विदेश गएर फर्किएकाले बोका–पाठी बेचेर १५ लाख कमाए
६ पुस, पथरी ९मोरङ० । “मलेसिया गएको २५ वर्षको कान्छो छोरो अशोकलाई एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता बोलाएँ । जेठो छोरो टेकनाथ कतारमा छ । उसलाई पनि बोलाएँ । स्वदेशमा खसी–बाख्रा पाल्दा नै राम्रो कमाइ भएपछि किन विदेशमा गइरहनु ?” यो भनाइ हो – युवा स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिई मोरङको दर्वेशा–१ मा व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहेका फणीन्द्रप्रसाद सुवेदीको । सुवेदी परिवारको खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ । दुई बुढाबुढी, कान्छो छोरो अनि एकज ...
जलविद्युत् कम्पनीको सेयर सरकारलाई नजाने
विजयराज खनाल, ६ पुस, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्ने धेरैलाई अहिले पनि आयोजनाको सञ्चालन अवधि सकिएपछि के हुने हो भन्ने चिन्ताले बेला(बेला सताउने गरेको पाइन्छ । न त मन्त्रालयबाट हालसम्म यसमा स्पष्ट धारणाहरु आए, न त कसैले बुझाउने प्रयत्न गरे । तर, ढुक्क हुनुहोस् १ सञ्चालन अनुमती अवधि समाप्तपछि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामात्र आफूले लिएर चलाउने तर लगानी गर्ने कम्पनीको सेयर अधिग्रहण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर ...
विद्युत् चोरीको अभियोगमा १६ जना पक्राउ
५ पुस, झापा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनारमनी वितरण केन्द्रले विद्युत् चोरीको अभियोगमा १६ जनालाई आज बिहान पक्राउ गरेको छ। प्राधिकरण र प्रहरीको संयुक्त टोलीले गरामीको खोपवाडी र विरानटोलबाट सो अभियोगमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको केन्द्र प्रमुख तथा प्रमुख इन्जिनियर राजीवकुमार सिंहले जानकारी दिए। पक्राउ परेका सबैलाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा राखिएको छ। विद्युत् नचोर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि सूचनाको अवज्ञा गरेपछि बाध्य भ ...
प्रोत्साहन रकम खर्च भएन
५ पुस, म्याग्दी । गाविसस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको खातामा रहेको लाखौै रुपैयाँ बजेट परिचालन हुन सकेको छैन । समन्वय समितिको निष्क्रियता, सरोकार भएकाको बेवास्ता, गाविस सचिव परिवर्तन, नयाँ आउने सचिवले बजेटका बारेमा जानकारी नपाउनुलगायत कारणले करिब ५० लाख परिचालन हुन नसकेको हो । गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने क्रममा जिविस अन्तर्गत, पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाले प्रोत्साहनबापत तत्कालीन ४१ समन्वय समिति ...
एक किलो नुनको मूल्य १८० रुपैंया
४ पुस, सोलुखुम्बु । धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, एक किलो नुनको रु १८० पर्छभन्दा। तर सोलुखुम्बुको खुम्जुङ–९ स्थित फोर्चे गाउँका बासिन्दाको बाध्यता हो उनीहरु एक किलो आयोडिनयुक्त नुनको रु १८० नै तिर्छन्। यस्तै उनीहरु प्रायः सामान्य किसिमको मन्सुली चामल प्रयोग गर्छन्, त्यसको मूल्य रु २४० देखि २५० सम्म पर्छ। फोर्चेका आङ छिरिङ शेर्पा भन्छन्, हाम्रो बाध्यता नै हो, काठमाडौँभन्दा १० गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ। सदरमुकाम सल्लेरीसम्म ट्रकमा ल्याएको सामा ...
लोकमानको ९१ करोड डुबाउने ‘इम्बोस्ड टेण्डर’ माथि अख्तियारद्वारा छानविन शुरु
रविन्द्र घिमिरे, ३ पुस, काठमाडौं । सवारी साधनका लागि प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट को छपाइको टेण्डरमा भएको अनियमिततामाथि अख्तियारले छानविन थालेको छ । इम्बोस्ड प्लेटको टेण्डर स्वीकृत गर्दा स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीका अनुसार निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै चाहानाअनुसार टेण्डर प्रक्रियामा गडबडी गरिएको थियो । लामो समयदेखि आशंकाको घेरामा भए पनि अख्तियारले यसमाथि छानविन थालेको थिएन ...
अर्थ मन्त्रालयको ‘खाजा खर्च’ जम्मा साढे १७ लाख !
पुष्प ढुंगाना, ३ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ४२ दिनमा करिब १८ लाखको खाजा खाएको भन्दै बिल सार्वजनिक गरेको छ । भदौ र असोज महिनामा मन्त्रालयभित्र भएको बैठकमा खाजा खाँदा १७ लाख ५७ हजार खर्च भएको विल अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको हो । यी दुई महिनामा जम्मा ४२ दिनमात्रै सरकारी कार्यालय खुलेका थिए । गत आर्थिक बर्ष निजामति पुरस्कारबाट उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा सम्मानित सचिव शान्तराज सुवेदीले सम्हालेको मन्त्रालयले खाजाका नाममा यति ...
प्रतिबन्धित भारु साट्न सफ्टवेयर, सटही सीमा २५ हजारमात्रै
३ पुस, विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पाँच सय र एक हजार रूपैयाँको भारतीय नोट साट्ने पहल भइरहेको बताएका छन् । शिवाकोटीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धित पाँच सय र हजारका भारतीय नोट सटहीका लागि छुट्टै सफ्टवेयर तयार पारेको पनि जानकारी दिए । विराटनगरमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गदै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले यस्ता नोट सटहीका लागि विशेष सफ्टवेयर बनाएर नेपालीवाहेकले साट्न नपाउने व्यवस्था गर्न लाग ...
मल्कावाङमा ४२ किलोवाट विद्युत् उत्पादन
१ पुस, बेनी । म्याग्दीको दुर्गम गाविस मल्कावाङमा ४२ किलोवाट क्षमताको नन्दीवाङखोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आर्थिक सहयोग र डिसिआरडिसी बागलुङको प्राविधिक सहयोगमा कुल दुई करोड २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको लागतमा सो जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको निर्माण समितिका सहसचिव हरिबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए। सहसचिव छन्त्यालले दिएको जानकारीअनुसार जनश्रमदान रु ५९ लाख ५५ हजार, वैक ...
प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति: तीन तोेला सुन र एककट्ठा जमिन
काठमाडौं, मंसिर २९ । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बुधबार २०७३ साल साउन २० गते गठित मन्त्रिपरिषदमा रहेका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पैतृक सम्पत्तिमा तीन तोला सुन र चितवनमा एककट्ठा जमिन रहेको छ । त्यसैगरी, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको विभिन्न बैंकमा सेयर, भक् ...
विजुली थपिएको कारण लोडसेडिङ कम
२८ मङ्सिर, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले विभिन्न २३ वटा परियोजनाबाट करिब ३०७ मेगावाट विजुली थप उत्पादन भएकाले हाल विद्युतभार कटौति (लोडसेडिङ) कम गर्न सम्भव भएको जनाएको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको माग पनि त्यति नै रहेकाले लोडसेडिङ कम गर्न सम्भव भएको जानकारी दिए। उनले ओली सरकारका पालामा विद्युतभार कटौति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको र विद्युत उत्पादक क ...
सुनको भाउ वर्षकै सस्तो
२४ मंसिर, काठमाडौं । सुनको भाउ यस वर्षकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा झरेको छ । शुक्रबार सुन तोलाको ५३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । यो बिहीबारको मूल्य भन्दा चार सय रुपैयाँले सस्तो हो । अमेरिकी डलर मजबुत हुनु तथा सेयरको कारोबारमा सुधार हुँदै जानु सुनको मूल्य घट्नुको मुख्य कारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार भारतमा पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लागेकाले पनि सुनको भाउ खस्किन ...
'पाडो' चेपाङ समुदायको आम्दानीको मुख्यस्रोत
२३ मङ्सिर, हेटौँडा । मकवानपुरको विकट गाविस काँकडा—४ देवीटारका चेपाङ समुदायको आम्दानीको मुख्यस्रोत पाडो रहेको छ। भैँसीको पाडोबाट करिब डेढ–दुई वर्षमा लगानीको १२ गुना बढी आम्दानी भएकाले यस समुदायको आम्दानीको मुख्यस्रोत पाडो बन्न गएको हो। गाईवस्तु पालन नगर्ने यस ठाउँमा खेतबारी जोत्नका लागि गोरुमात्र पाल्ने चेपाङ समुदायले केही वर्षदेखि आम्दानीको वैकल्पिक स्रोतका रुपमा पाल्न थालेको पाडोबाट राम्रो आम्दानी भएपछि उनीहरु यसप्रति आकर्षित भएका हु ...
नेपाल र बङ्गलादेश विद्युत् विस्तारबारे छलफल
२३ मंसिर, काठमाडौँ । बङ्गलादेशको भ्रमणमा रहनु भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री सेख हसिनासँग दुई देशबीच विद्युत् सेवा विस्तार गर्नेबारे छलफल गरेका छन्। बुधबार साँझ भएको शिष्टाचार भेटमा उनीहरुबीच नेपालसँग विद्युत्को प्रचूर सम्भावना रहेको र बङ्गलादेशमा ठूलो परिमाणमा विद्युत्को माग भएकाले दुई देशबीच विद्युत् सेवा विस्तार गर्नेबारे सम्झौता गरी अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटका अवसरमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध वि ...
अौद्दोगिक व्यापार मेलाको तयारी पूरा
रविन्द्र यादव, २२ मंसिर, परासी । नवलपरासीको सुनवलमा हुन लागेको तेश्रो औद्योगि व्यपार मेलाको तयारी पुरा भएको छ ।मेलाको मुल गेट निर्माण संगै बाण्डरी, मञ्च, स्टल, बालउद्यान, शौचालय लगायतका मेलाको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको बताइएको छ । उद्योग वाण्ज्यि संघ नवलपरासीले आयोजना गरेको यस औद्योगि व्यपार मेलाको भोली विहिवार एक भव्य समारोह बिच उप राष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनद्धारा मेलाको उद्दघाटन हुने छ । शान्ती समृद्ध उद्योग र व्यपार, राष्ट्रनिर्माणको बलियो आधार ...
प्राधिकरणको अभियानले गाउँनै कालोसूचीमा, नौ दिनदेखि गाउँसबै अँध्यारो
रमेश गिरी, २१ मङ्सिर, भक्तपुर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भक्तपुर शाखाले विद्युत् चोरी गर्ने, मिटर जडान नगरी विद्युत्को प्रयोग गर्ने र कालोसूचीमा रहेकाको विद्युत्लाइन काट्ने अभियान सुरु गरेको छ। विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न र बाँकी बक्यौता असुली गर्ने अभियान सुरु गरेको प्राधिकरणले विद्युत्लाइन काट्न थालेपछि सिङ्गो गाउँ नै अध्यारो हुन थालेको छ। प्राधिकरणको अभियानअन्तर्गत लाइन काट्न थालेपछि नगरकोट नगरपालिका– ११ र १२ मा पर्ने बेँसीटोलका १०० ...
मुस्ताङ सदरमुकाम जोड्ने पुल निर्माण कार्य अलपत्र
२० मङ्सिर, मुस्ताङ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम जोड्न कालीगण्डकी माथि निर्माण गर्न लागिएको पक्की पुल अलपत्र बनेको छ। निर्माण सुरु भएको चार वर्षसम्म पनि पुलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पुल निर्माण नहुँदा हिउँदको समयमा सदरमुकाम जोमसोम र त्यसभन्दा माथि आठभन्दा बढी गाविसका सर्वसाधारण कालीगण्डकीमा जोखिम मोलेर काठे पुलबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने वर्षायाममा सवारी आवागमन ठप्प हुने समस्या छ। सर्वसाधारण कालीगण्डकी माथि वर्षौं पुरानो काठ ...
बेरोजगार हुनुहुन्छ ? रोजगारीको अवसर यहा छ !
२० मंसिर, काठमाडौं । देशका युवाहरू बेरोजगार भई विदेशीरहेका बेलामा HFN ले युवा तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी होटलहरूमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गरेको छ ।हस्पिटालिटी फाउण्डेशन अफ नेपाल नामक संस्थाले विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूसँग सहकार्य गरी बेरोजगार तथा होटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भनी भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गरेको हो । HFN ले सेफ, कुक, हेल्पर, क्यासियर लगायत आठ विभागका लागि ६८ जना मागेको छ । ...
उखु मूल्य निर्धारणमा सधैँ किचलो, उद्योगी खोज्छन् सस्तो
बिनोद आचार्य, १९ मंसिर, काठमाडौं । उखु उत्पादक किसान र उद्योगीबीच सहमति हुन नसक्दा यस वर्ष पनि उखुको मूल्य समयमै निर्धारण हुन सकेको छैन। गत कात्तिक २६ गते किसान प्रतिनिधी र उद्योगीबीच बसेको बैठकमा उखुको मूल्यमा सहमति हुन नसक्दा बैठकबिना निष्कर्ष सकिएको थियो। नेपाल उखु उत्पादक कृषक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीका अनुसार उद्योगीले बजारमा बढेको चिनीको भाउलाई आधार मानेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न आनाकानी गरेकाले सहमति हुन सकेको छैन। ‘ ...
मेलम्चीमा सुन, खन्ने कामै रोकेर सुरक्षा !
१७ मंसिर, काठमाडौं । मेलम्ची आयोजनाको हेडवर्क्स साइटमा पहेँलो पदार्थ भेटिएको छ । सो पदार्थ महत्वपूर्ण खनिज भएको हुन सक्ने आशंकामा हेडवर्क्स निर्माणको काम रोकिएको छ । मेलम्ची नदी छेउ छेउको पहाड काट्ने क्रममा पहेंलो पदार्थ भेटिएपछि सुरक्षाको कारण काम तत्कालका लागि रोकिएको मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पहाड काट्दा निस्कएको माठोमा चम्किलो पहेँलो कणहरु देखिएका छन् । त्यो के पदार्थ हो भन्ने त्यहाँ खटिएका इञ्जिनियरले ...
तेस्रो औद्योगीक व्यापार मेलाको तयारी तिब्र रबिन्द्र यादव, १७ मंसिर, नवलपरासी । नवलपरासीको सुनवलमा आयोजना हुन लागेको तेश्रो पश्चिमाञ्चल स्तरीय औद्योगिक व्यपार मेला २०७३ को तयारी तिब्ररुपमाभैरहेको छ। आगामी मंसिर २३ गतेदेखि पुष ३ गतेसम्म संचालन हुने मेलाको तयारी तिब्र रुपमा भैरहेको छ कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यपार एवं सुचना प्रविधिको वृहद प्रर्शनी गर्ने उद्देश्यले यस अद्योगिक व्यपार मेलाको आयोजना गरिएको छ। जिल्लाका कृषिजन्य उपज बस्तु तथा धार्मिक एवं पर्यटकयि क्षेत्रहरुको राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट ...
शिक्षा सुधारका लागि एडिबीले १३ अर्ब ऋण दिने
१७ मंसिर, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकले नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल प्रमुख केनिची योकोमानबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडिपी) अन्र्तगत परिचालन हुने रकम माध्यमिक तहको शिक्षा सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने बताइएको छ। यसैगरी विभिन ...
पुल निर्माणले गति लिन नसक्दा स्थानीयलाई सास्ती
आदित्य दाहाल, १७ मङ्सिर, मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी भेगमा रहेको हाँडीखोला पुल निर्माण कार्यले हालसम्म गति लिन सकेको छैन। पुल निर्माणका लागि केन्द्रीय बजेट योजनाअनुसार चार करोडको बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण नभएकाले निकै कष्ट खेप्नु परेको स्थानीयवासीले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। जिल्लाको कर्थली, घोर्थली गाविसबाट बग्ने हाँडीखोलाको पुल चारवर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण सुरु भएको छैन। चार वर्षअघि हाँडीखोलामा पक्की पुल निर्माण गर्नका लाग ...
दूध बिक्रीबाट मासिक सत्तरी हजार आम्दानी
१६ मङ्सिर, भीमदत्तनगर । छब्बीस वर्षीय हरेन्द्र बोहरा काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर पढाइ सकेर दुई वर्षअघि घर फर्किनुभयो । अन्ठाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएर स्नातकोत्तर गरेका बोहरा कृषि पेसामा व्यावसायिक रुपमा लागेर सफलतातिर लम्किँदै गइरहनुभएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका– ४ मौवाफाँटाका बोहरा अहिले दूध बिक्रीबाट मासिक रु ७० हजार कमाउन थाल्नुभएको छ । उहाँले भैँसीपालन, केराखेती, बाख्रापालन, माछापालन र आँपखेती गरिरहनुभएक ...
सुन तोलामा ६ सय रुपैयाँ घट्यो
१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुन तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार एकैदिन तोलामा ६ सय रुपैयाँले गिरावट हुँदै सुनको मूल्य ५४ हजार रुपैयाँ प्रतितोलमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार सुन तोलाको ५४ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । चाँदीको मूल्य पनि बिहीबार १० रुपैयाँले घटेको छ । ...
'हिमालयन ओरेन्ज टुरिजम फेस्टिबल'मा सलकपुरको सुन्तला
१६ मङ्सिर, इलाम । यसबर्ष डिसेम्बरको १ देखि ३ तारिखसम्म भारतको कोलकातामा हिमालयन ओरेन्ज टुरिजम काउन्सिलले आयोजना गरेको ‘तेस्रो हिमालयन ओरेन्ज टुरिजम फेस्टिबल’ मा इलामको सलकपुरको सुन्तला स्टल राखिएको छ । सुन्तलाको स्टल राख्न सलकपुरबाट आठजनाको सांस्कृतिक टोलीसहित १५ जना किसानको टोली सुन्तला बोकेर कोलकाता पुगेका छन् । भारतको पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीमा रहेको इको टुरिजमको व्यवस्थापन र प्रकृति संरक्षण समाज बाहुनडाँगी, झापाको समन्वयमा सलकपुरम ...
एउटै वडामा भित्रियो महिनामा चार करोड रेमिट्यान्स
१६ मङ्सिर, गुल्मी। गुल्मीको वामी गाविस वैदेशिक रोजगारबाट जिल्लामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने गाविस मध्येमा पर्दछ । गाविसको एउटै वडाका विभिन्न मुलुकको वैदेशिक रोजगारीका लागि चारसयजना भन्दा बढी युवा गएको पुष्टि भएको छ । उनीहरुबाट ती मुलुकमा हुने गरेको न्यूनतम तलब आम्दानी जोड्दा पनि झन्डै साढे चार करोड आम्दानी एकै महिनामा हुने गरेको छ । वामी–९ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क समितिले मात्रै विभिन्न मुलुकमा रहेका वामी–९ का युवाको सङ्ख्या पा ...
‘साझाको एटीएम’ पेट्रोलपम्प योजनाको १० हजार कित्ता सेयर बिक्रि
१६ मंसिर, काठमाडौं । साझाका पेट्रोल पम्पलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले साझा पेट्रोलपम्पको १० हजार कित्ता सेयर किनेको छ । पेट्रोपम्पसहित साझा सेवा सहकारीका सेवालाई आधुनिक सुविधासम्पन्न महानगरपालिकाले १० हजार कित्ता सेयर किनेको हो । महानगरपालिकाको लगानी पछि साझा पेट्रोल पम्पलाई अत्याधुनिक सुविधासहितको बनाउन काम थालिने भएको छ । पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि एटिएम प्रविधिबाट किन्न सकिने गरी सेवा थाल्ने योज ...
पृथ्वी राजमार्गका मोटरेवल पुलको मर्मतकार्य सुरु
१५ मङ्सिर, दमौली । पोखरा—काठमाडौँ पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने सानाठूला दुई दर्जन मोटरेवल पुलको मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ। पुल जीर्ण र कमजोर हुन थालेपछि ती पुलको मर्मत सुरु गरिएको छ। ती पुलहरुमा रङ्गरोगन गर्ने, लुज भएका नटबोल्ट टाइट गर्ने, वेल्डिङ गर्ने, दायाँ बायाँ बोर्ड राख्ने काम हुने पुल योजना सेक्टर नं। २, मध्यक्षेत्र, पाटनढोका, ललितपुरका इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने सानाठूला दुई दर्जन पुलको मर्मत थालिएको जानकारी उन ...
ठेकदारसँग कुरा नमिल्दा काठमाडौं टावर अलपत्र, कुरामात्रै काम शुन्य १५ मङ्सिर, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा) ले निर्माण गर्न थालेको काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । टावर निर्माण गर्ने विषयमा ठेकदार कम्पनी र महानगरपालिकावीच कुरा नमिल्दा टावर निर्माण हुन नसकेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०७२ मा गएको भूकम्प अघिनै टावर निर्माणका लागि सम्झौता भएको तर भूकम्पपछि पुनः टावरको तला घटाउने निर्णय भएपछि ठेकेदारसँग कुरा नमिल्दा टा ...
किसानले भैंसी सुत्केरी भत्ता पाएनन्
११ मङ्सिर, बैतडी । नेपाल सरकारले पशु र पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गरी पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पशु बिमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका भैंसीपालक किसान भैँसी सुत्केरी भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। सरकारले बैतडीसहित २० जिल्लामा किसानलाई भैंसी सुत्केरी भत्ता दिने घोषणा गरेको भए पनि बैतडीका कुनै पनि कृषकले भैंसीको बिमा नगराउँदा भैंसी सुत्केरी भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्। यस जिल्लामा थुप्रै भैंसीपालक किसान रहे पनि अहिलेसम्म क ...
स्थानीयवासीको अवरोधपछि हेवा खोला ‘ए’ परियोजना ठप्प
११ मङ्सिर, पाँचथर । हेवा खोला जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ का लागि स्थानीयवासी र पाँचथर पावर कम्पनीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाई स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि परियोजनाको काम ठप्प भएको छ । स्थानीयवासीले केही दिनदेखि कार्यालयको मूलढोकामै तालाबन्दी गरेका छन् । परियोजनाको कार्य क्षेत्रभित्र कालो झन्डा समेत गाडिएको छ । वार्ताका लागि प्रहरी प्रशासनले बोलाए पनि स्थानीयवासी वार्तामा बस्न नमानेको कम्पनीले जनाएको छ । परियोजना सञ्चालनका क्रममा ...
सुन ८ सय रुपैयाँ सस्तो
११ मंसिर, काठमाडौं । बिवाहको मुख्य महिना मंसिर लागेयता सुनको मूल्य लगातार ओरालो लागिरहेको छ । अघिल्लो साता प्रतितोला १४ सय रुपैयाँले सस्तिएको सुन यो सातामा पनि ८ सय रुपैयाँले घट्यो । साताको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला ५५ हजार रुपैयाँ कारोबार भएको सुन अन्तिम दिन ५४ हजार २ सय रुपैयाँमा ओर्लियो । डलरको मूल्य १ सय दश रुपैयाँ नाघेको यो साता सुन भने सस्तिने क्रम रोकिएन । बुधबार ५५ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म पुगेको सुन बिहीबार एकैपटक ८ सय रुपैयाँले घटेर ५४ हज ...
काठमाडौं, मंसिर १० । शुक्रबार पनि सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम जारी रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पच्छ्याउँदै यस दिन पनि स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४ सयले झरेर ५४ हजार २ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन पनि ८ सयले झरेर ५४ हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्य भने ७ सय ७५ मै स्थीर रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार साँझसम्म सुन प्रति औंन्स ११ सय ८८ डलर हाराहारीमा कारोबार भैरहेको ...
भारतले नेपालका लागि छुट्टयाइएको ३० अर्ब भारू अब के गर्ने ?
१० मंसिर, नयाँ दिल्ली । भारतले नेपालको विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्न सहयोग स्वरुप यस वर्ष ३० अर्ब भारतीय रुपैयाँ छुट्टयाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। भारतले नेपालभन्दा बढी भुटानका लागि यस वर्ष ५ खर्ब ४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। नेपाल र भुटानमा यसअघि नै पाँच सय र हजार रुपैयाँको भारतीय मुद्रा रहेको छ। यसलाई साट्ने विषयमा दुवै देशका सरकारले भारतसँग सहयोग मागेका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपलाई उध्रृत गर्दै भारतीय सञ्चा ...
नेपालमा चिनियाँ इन्टरनेट : मंसिरभित्र व्यावसायिक सम्झौता
रवीन्द्र शाही, १० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चीनबाट इन्टरनेट ल्याउन चाइना टेलिकम्युनिकेसनसँग सैद्धान्तिक सम्झौता गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि व्यावसायिक सम्झौता हुन सकेको छैन। गएको साउनमै ब्यान्डवीथ खरिद गरेर नेपालमा चिनियाँ इन्टरनेट ल्याई भारतीय एकाधिकार अन्त्य गर्ने योजना टेलिकमले बनाएको थियो। तर दुई सेवा प्रदायकबीच अझैसम्म व्यावसायिक सम्झौता नहुँदा चिनियाँ इन्टरनेट आउनेबारे अन्यौलता भने कायमै छ। पूर्वाधारका सबै काम सम्पन भई परीक्षण ...
नपड्किने ग्यास सिलिन्डर सबै उद्योगले ५ प्रतिशत राख्नैपर्ने
९ मंसिर, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डरमा आगलागीको जोखिम उच्च हुँदा उपभोक्ताहरु सँधै त्रासमा हुन्छन् । तर, अब केही समयपछि भने तपाईंले आफ्नो भान्छामा नपड्किने गुण भएको सिलिन्डर राख्न पाउनुहुनेछ । नेपाल आयल निगमले फलामबाट बनेको परम्परागत सिलिन्डरको सट्टा आधुनिक प्रविधिको ‘कम्पोजिट’ सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसलाई तत्काल अनिवार्य नगरेपनि प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै लैजाने नीति निगमको छ । यसका लागि सबै ग्यास उद्योगल ...
कालिमाटी-कलंकी सडकखण्डमा घर परेकाद्वारा मुआब्जा माग
९ मङ्सिर, काठमाडौं । कालीमाटी सडक विस्तार नागरिक सरोकार समितिले त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सरकारसित माग गरेको छ । नागरिकको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी सम्बन्धित नागरिकको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार न्यायोचित रुपमा क्षतिपूर्ति दिन समितिले माग गरेको हो । सडक विस्तारका लागि विसं २०२३ फागुन २२ गते विष्णुमतीको पुलदेखि सोल्टीमोडसम्मको क्षेत्रमा सरकारले अधिग्रहण गरी विसं २०२८ माघ २४ गते रोक्का फुक्का गरेको समितिका संयोजक सुमन सा ...
बिजुलीबजार पुलको काम दुई वर्षमा १० प्रतिशत !
९ मंसिर, काठमाडौँ । पुल निर्माणको अवधि सकिन एकवर्ष मात्र बाँकी हुँदासमेत बिजुलीबजारस्थित रुद्रमती ९धोबीखोला० माथिको पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । माइतीघर–बिजुलीबजार–बानेश्वर–तीनकुने–कोटेश्वर सडक आठलेनमा विस्तार भएसँगै बिजुलीबजार र तीनकुनेमा अत्याधुनिक पुल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको पुल निर्माणका लागि एक वर्ष मात्र अवधि बाँकी छ । तर स्थलगतरुपमा पुल निर्माण ...
८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कामदारको लागि प्रमुख गन्तव्य मानिएको साउदी अरबको रोजगारीमा संकट बढ्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर कच्चा तेलको मूल्य तल्लोस्तरमा रहेपछि अर्थतन्त्रमा जटिलता बढ्न थालेका छन्। साउदीका कम्पनीहरु धराशायी हुने क्रम बढ्न थालेपछि काम तथा तलब नपाउने नेपाली कामदारको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावासले ५० भन्दा बढी कम्पनीमा कार्यरत कम्तीमा एक हजार नेपाली काम र तलब नपाएर अलपत्र परे ...
ग्यालेक्सी एस सेभेन सुरक्षित छ: सामसुङ
ग्यालेक्सी एस सेभेन सिरिजका स्मार्टफोन पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको दाबी सामसुङले गरेको छ । एक संक्षिप्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सामसुङले यस्तो बताएको छ । ब्याट्रीको समस्याका कारण ग्यालेक्सी नोट सेभेन स्मार्टफोनको उत्पादन बन्द गर्नुपर्दा करोडौँ डलर घाटा बेहोरेको सामसुङले अहिले आफ्नो ध्यान एस सेभेनमा केन्द्रित गरेको हो । अाफ्नो ब्राण्ड इमेजमा परेको नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्नका लागि ऊ एस सेभेन पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको विषयमा उपभोक्तालाई विश्वस्त गराउन ...
अपराधको नयाँखेती भारु सटही, एक हजार नेरुमा एक हजार भारु किनबेच
७ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिबन्धित एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट साटिदिने भन्दै ठगी सुरु भएको छ । पान पसलदेखि चिया पसलसम्म सजिलै कारोबार हुने एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोटमा एक्कासि प्रतिबन्ध लागेपछि त्यसको असर नेपालमा समेत परेको छ । नेपाली बजारमा परेको असरको फाइदा उठाउँदै केही दलालले सटही गर्ने भन्दै ठगी धन्दा नै थालेका छन् । अहिले एक हजार भारतीय रुपैयाँ बराबर एक हजार नेपाली रुपैयाँ लिने–दिने गरिएको छ । तरकारी पसलेले जतिको त्यतिमै पैस ...
तिनकुनेमा शान्ति मण्डला : मुआब्जा विवादले योजना अलपत्र
७ मंसिर, काठमाडौं ।मुआब्जा समस्याले तिनकुनेको खाली जग्गामा शान्ति मण्डला बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मण्डला निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले मुआब्जा समस्याकै कारण मण्डला निर्माणको काम अघि नबढेको बताए । ‘तिनकुनेमा अत्याधुनिक ल्यान्डमार्क बनाउने योजना बन्यो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भयो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसपछिको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण म ...
नगद भारु नपाए महँगी बढ्छ
७ मंसिर, काठमाडौं ।आयातकर्ताले पर्याप्त नगद भारु नपाए दुईपक्षीय व्यापारको लागत ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने र त्यसको भार महँगीमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । ‘अहिले हामीलाई ड्राफ्टमार्फत कारोबार गर्न भनिएको छ,’ अध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘त्यसो गरियो भने कारोबार लागत ३० प्रतिशत र उद्योगको उत्पादन लागत १० प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ ।’ यसअघि व्यवसायीले नगदमा कारोबार गर्दा लागत कम परेको र त्यसले महँगी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको महास ...
आजका पत्रपत्रिकामा आर्थिक खबरः बैंक मालिक बन्ने सांसदको प्रयास असफल
७ मंसिर, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने आर्थिक पत्रिकाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने ऐन बाफिया पारित भएको समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । साथै भारतीय ५ सय र हजारको नोटमा लागेको प्रतिवन्धले नेपाली व्यवसायीलाई पारेको प्रभावलाई पनि आजको बिजनेश खबरमा प्राथमिकता दिइएको छ । आजको कारोबार दैनिकले ५ सय र एक हजारका भारुमाथिको प्रतिवन्धले नेपाली व्यवसायी अन्योलमा भन्ने शीर्षकको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । त्यस्तै अर्थ समितिले बाफ ...
पाँच सडक आयोजना सञ्चालन
६ मङ्सिर, म्याग्दी । एकै ठाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्यले पाँच वटा आयोजना सञ्चालन भएका छन् । दलका नेताको स्वार्थ, मुख्य सडकले आफ्नो बस्तीलाई समेट्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग, पहिले खनेको सडक असफल हुनु जस्ता कारणले एउटै ठाउँसँग जोडिने फरकफरक नाम गरेका आयोजना सञ्चालन भएको हो । दरवाङदेखि सोले हुँदै बागलुङको लामेला तमान जोड्ने पाँच वटै सडक जिविसमार्फत सञ्चालन भएका हुन् । एउटै ठाउँलाई जोड्ने फरकफरक नाम गरेका आयोजना हुँदा कुन योजनालाई प्राथमि ...
विश्व बैंकको सहयोगमा सडक विस्तार
६ मङ्सिर, पाल्पा । तनहुँको भिमाददेखि घिरिङ देउराली हुँदै पाल्पाको रामपुर नगरपालिका जोड्ने मोटरबाटो विस्तार तथा मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको छ । कृष्णमार्गअन्तर्गत पर्ने घ्यानुङ देउरालीदेखि केलादीसम्मको मोटरबाटो विस्तारको काम अघि बढाइएको छ । आठ मिटर चौडाइ रहेको झन्डै २५ किलोमिटरको बाटो विस्तार तथा मर्मत कार्य अहिले तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत रु १० करोड ७६ लाखको लागत स्टमेटमा सो मोटरबाटो ...
काठमाडौँमा पहिलो पटक खुल्यो ताइवानी रेस्टुरेन्ट
५ मंसिर, काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक ताइवानी रेस्टुरेन्टको स्थापना भएको छ । काठमाडौँको भाटभटेनीमा ताइवानीहरुले नै ‘हेप्पी ववल क्याफे रेस्टुरेन्ट’ खोलेका छन् । ताइवानमा खानपिन तथा जीवशैलिमा कलम चलाएकी ताइवानी पत्रकार वाइवाइलगायतको टोलीले सो रेस्टुरेन्ट खोलेका हुन् । भुकम्प अघि काठमाडौँको ठमेलमा सुरु गरेको रेस्टुरेन्टमा भुकम्पले गर्दा छोड्न परेपछि उनी नेपालमा खालि नै बसेकी थिइन । शनिबारदेखी संचालनमा आएको उत्तः क्याफेमा ताइवानमा ...
विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानमा स्मार्ट मिटरको तयारी
२ मङ्सिर, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकालाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरेपछि मुलुकभर नै विद्युत् चोरीमा संलग्न र चुहावटमा संलग्नलाई समेत कारबाहीको प्रक्रिया युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर प्राविधिक र अन्य गरी २५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट हुने गरेको छ । त्यसमा चोरीको मात्रा करिब पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले पहिलो चरणमा चोरी नियन्त्रण गर्ने अभियान सुरु गरेको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुरमा ...
चियाको बजार खोज्न विशेष पहल सुरू : झलनाथ खनाल
१ मङ्सिर, इलाम । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चिया खेतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन विशेष पहल सुरू भएको बताएका छन्। आज बिहान सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा उनले इलामको पहिचान चियालाई ‘अग्र्यानिक’ अभियानमा लगेर विश्व बजारमा पु¥याउन सकेमा इलामसहित देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए।‘चियालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जापानको जाइका कम्पनीले इलामका केही चिया बगानको परीक्षण तथा अनु ...
सुन तोलाको ४ सय रुपैयाँले घट्यो
२६ कात्तिक, काठमाडौं । सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा ४ सय रुपैयाँले सस्तो भएको छ । हिजो १४ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज पनि घटेको हो । आज सुन प्रतितोला ५६ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो सुन तोलाको ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । बुधबार भने सुन एकैपटक १३ सय रुपैयाँले महंगो भएको थियो । सुनको भाउ आज फेरि तोलको २० रुपैयाँले बढेर ८ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । ...
नेपालमा ५०० र १००० का भारु साट्न प्रतिबन्ध
२४ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ५०० र १००० दरका पुराना भारतीय नोट ९भारु० नचल्ने घोषणाले नेपालमा तरङ्ग ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बुधकार बिहान बसेको बैठकले तत्कालका लागि ५०० र १००० दरका भारतीय नोट नसाट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरेको छ । ‘हामीले आज तोकिएका दरका भारतीय नोट नसाट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने । ...
सुनको भाउ तोलामा चार सयले गिरावट २३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार ४ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार प्रतितोला ५७ हजार ३ सय रुपैया रहेको सुन चार सयले घटेर मंगलबार ५६ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य भने घटेको छैन् । सोमबारकै मूल्यमा अर्थात प्रतितोला ८ सय २५ रुपैयाँमा चादी किनबेच भइरहेको छ । ...
देशका सबै शहरमा लोडसेडिङ हटाउछु : उर्जामन्त्री
२३ कात्तिक, दाङ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले देशका ठूला शहरमा लोडसेडिङ हटाउन अभ्यास थालिएको बताएका छन्। रिपोटर्स क्लव दाङले मंगलबार बिहान तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो अभ्यास काठमाडौंवाट सुरु गरिएको बताए। उनले भने, ‘ काठमाडौं उपत्यकामा अहिले भइरहेको प्रयास त्यसैको परीक्षणको लागि हो र यो विस्तारै मुलुकका सबै ठूला शहरमा सुरु गरिने छ।’ मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ अन्त्यलाई निरन्तरता दिन एउटा प्रावि ...
पेट्रोलियम पाइपलाइनको आकार बढाउन मानेन भारत
२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइनको आकार तथा क्षमता बढाउन राखेको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको छ । रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको पाइपको आकार बढाउन भारतीय पेट्रोलियम अधिकारीले असहमति जनाएका हुन् । यो पाइपलाइन भारतले बनाइदिन लागेको छ । निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत असहमत भएपछि अब पुरानै योजनाअनुसार पाइपलाइन बन्ने भएको हो । भारत भम्रणको एजेण्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको ...
स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा धुम्रपान र मद्यपानमा नेपालीको खर्च बढी
२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा चुरोट र रक्सीमा बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । एक वर्षमा एकजना नेपालीले स्वास्थ्यका लागि गर्ने खर्चभन्दा धुम्रपान र मद्यपानमा गर्ने खर्च बढी छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सहरी क्षेत्रमा बस्ने एकजना मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यका लागि एक वर्षमा चार हजार चार सय ३० रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने मद्यपान र धुम्रपानमा पाँच हजार दुई सय ३१ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा एक व्यक्त ...
हेवाखोलाले विजुली उत्पादन थाल्ने
२२ कात्तिक, काठमाडौं । पाँचथरको ‘हेवाखोला( ए’ जलविद्युत आयोजनाले यही मंसिर १० गतेदेखि विजुली उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । कुल १४।९ मेगावाट उत्पादन क्षमताको आयोजना विजुली उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको हो । आयोजना निर्माण गर्न २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाका सञ्चालक बसन्त नेम्वाङले बताए । आयोजनामा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा माछापुच्छ्रे र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ऋण लगानी छ । आयोजनाको अध्यक्ष शिक्षा तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थापित व्याव ...
बैंकमा ऋण दिने पैसा छैन
२२ कात्तिक, काठमाडौं । वैकिङ प्रणालीको अवस्था खुम्चँदै गएपछि बैंकहरुमा थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकरहरुका अनुसार अहिलो बैंकहरुसँग कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पर्याप्त पैसा छैन । बैंकहहरुसँग अहिले सर्वसाधरणलाई दिनको लागि थप रकमसमेत नरहेको उनीहरुको भनाइ रहेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार कात्तिकको पहिलो सातासम्ममा १८ खर्ब २८ अर्ब विदेशी मुद्रासहित निक्षेप पुगेको छ भने सो अवधिमा कर्जा प् ...
मुआब्जाले बनायो करोडपति
२२ कात्तिक, काठमाडौं । पाथीभरा गाविस–४ का लीलाबहादुर राई हुलाकका पूर्वकर्मचारी हुन् । श्रेणीविहीन उनले गत वर्ष मात्र जागिरबाट अवकाश पाएका थिए । केही वर्षयता सपरिवार सदरमुकाम खाँदबारीमै बस्दै आएका उनी गाउँ फर्कने मनस्थितिमा थिएनन् । गाउँमा पाखोबारी त थियो, तर तीन महिना पनि खान नपुग्ने । तर, आज उनी एकाएक करोडपतिमा दरिएका छन् । बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले डुबान तथा अन्य कारण अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा गएको बुधबारबाट वितर ...
हरेक नेपालीको थाप्लोमा १९ हजार वैदेशिक ऋण !
काठमाडौं, कात्तिक २१ । हरेक नेपालीको थाप्लोमा अहिले रु १९ हजार वैदेशिक ऋण रहेको छ । विसं २०४६ मा प्रतिव्यक्ति रु ६ हजार वैदेशिक ऋण भएकामा अहिले तेब्बर बढी भार थोपरिएको छ । पुरानो शक्ति अभियान नेपालले आइतबार राजधानीमाआयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकाले सो भार बढेको भन्दै वक्ताहरुले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म आगामी दिनमा यो अझ बढेर जाने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागका प्रमुखमाथ ...
सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं, कात्तिक २१ । आइतबार सुनको मूल्यमा बृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पछ्याउँदै यसदिन स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ सयले बढेर ५७ हजार ७ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार तोलाको ५७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको भाउ पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर ८ सय ३० मा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ । आइतबार साँझसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १३ सय ४ डलर हाराहारीमा कारोबार भ ...
मालभोग र चम्पाचिनी प्रजातिको केरा भन्दै मिरिचमान केरा बेच्दै
२१ कार्तिक, सिरहा । छठ पर्वमा केरा नभई नहुने । नसक्नेले काइयो र सक्नेले घरी नै चढाउँछन् । यति बेला यहाँका बजारहरू केराले भरिभराउ देखिन्छ । खरिद गर्ने उपभोक्ताको पनि लर्को देखिन्छ । तर मालभोग र चम्पाचिनी प्रजातिको केरा भनेर यहाँ उपभोक्तालाई अर्कै प्रजातिको केरा धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् । स्वादमा उच्च कोटिको केरा चम्पाचिनी र मालभोग भन्दै यहाँको बजारमा भुटानको मिरिचमान प्रजातिको केरा व्यापारीहरूले बिक्री गरिरहेका हुन् । तर, नियमनकारी निकाय मौन रहेक ...
सहकारीको बिकासले देश अघि बढ्छ : नेता खनाल
रबिन्द्र यादव, २१ कार्तिक, नवलपरासी । नेपाली कागं्रेसका युवानेता एवंम् संसदीय दलका सदस्य बिक्रम खनालले सहकारीको बिकास बिना देशको आर्थिक बिकास सम्भव नहुने बिचार राख्नुभएको छ । उहांले नवलपरासीको दाउन्नेदेवीमा चेतना महिला कृर्षी सहकारी संस्थाको लिमिटेडको बार्षीक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बिचार राख्नुभएको हो । सरकारी संस्थामा त्यसमा पनि अझं महिलाद्धारा संस्था सरकारी संस्था संन्चालनका लागी सरकारीले बिशेष निति ल्याउनुपर्ने माग राख्दै सहकारी संस ...
नरिवल र फलफूलको कारोबारमा वृद्धि
२० कात्तिक, इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासहित जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा नरिवल र अन्य फलफूलको कारोबारमा वृद्धि भएको छ । छठ पर्वका अवसरमा उपयोग गरिने नरिवल, उखु, मुला, कागती, सुन्तला, सख्खरका साथै बाँसबाट बनेको नाङलो, कोनियाँ र माटोको भाँडाकुडा लगायत समानको कारोबारमा वृद्धि भएसँगै यी समानको मूल्य समेत बढेको छ । मूल्य बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । अहिले बजारमा प्रतिगोटा ७० देखि एक सय रूपैयाँसम्ममा नरिवलको खरिद बिक्री भएको नरिवल व्यापारी रा ...
बजार अनुगमनमा बयान लिनै जान्दैनन् कर्मचारी
१९ कात्तिक, काठमाडौं । बजार अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम देखिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कर्मचारीहरुमा कानुनबमोजिम बयान लिने सीप तथा क्षमतासमेत नदेखिएको मन्त्रायलका अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुगमनबाट बजारमा ठूलो विकृति देखिए पनि अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले कानुनबामोजिम बजार अनुगमनको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमता नभएको र बयान नलिएको पाइएको आजको कारोबार दैनिकले जनाएको छ । विभागबाट खटिएका अनुगमन टोलीले ...
भूकम्प र नाकाबन्दीले थलियो माथिल्लो तामाकोसी
१९ कात्तिक, काठमाडौं । गत वर्ष वैशाखको भूकम्प, बाढीपहिरो र भारतीय नाकाबन्दीले निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना थलिएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण गत असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने समय दुई वर्ष धकेलिएको छ । आयोजना ०७५ असारमा मात्रै सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट १० पुस ०७२ मा ३०९ मेगावाट र ३० असार ०७३ मा ...
१९ कात्तिक, काठमाडौं । दशैंतिहारका बेला संरक्षण नगरी झुत्रो पारेका नोटलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर शाखा भैरहवाले तत्काल सटही नगर्ने जनाएको छ । दशैंतिहार बीचको एक महिनामा सिद्धार्थनगर शाखाले ३ अर्ब २५ करोडका नयाँ नोट वितरण गरेको थियो । उक्त रकम लुम्बिनी अञ्चलसहित रोल्पा र प्युठान गरी ८ जिल्लाका ४ सय २४ वटा बेंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वितरण गरिएको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ । नयाँ नोट एक महिनामै फटालेर बैंकमा तत्काल जम्मा वा सटही गर्न ...
१८ कात्तिक, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न रु १२ अर्ब ऋण सहयोगको घोषणा गरेको छ । बैंकले उक्त ऋणमध्ये रु पाँच करोड अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइने मनिलास्थित उक्त बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराइने उक्त ऋण र अनुदान दुईसयवटा नमुना विद्यालय भवननिर्माणमा उपयोग गरिनेछ । साथै, ती नमुना ...
यसरी चलिरहेको छ दशौँ गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी (भिडियो रिपोर्ट)
१२ कात्तिक, ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेल स्थित जावलाखेल फुटबल ग्राउण्डमा यहि कात्तिक १० गतेबाट १३ गतेसम्म हरेक बर्ष झैँ दशौँ गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी २०७३ चलिरहेको छ । तीन दिन चल्ने उक्त पुष्प मेला हिन्दुहरुको दोश्रो महान पर्व दिपावलीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको आयोजक पक्षले जनाएको छ । प्रतियोगीताको आयोजना पुष्प व्याबसायीहरुको एक मात्र छाता संस्था फ्लोरी कल्चर एसोसियसन "फ्यान" ले गरेको हो । उक्त मेला कस्तो भईरहेको छ भन्ने बारेमा ...
घुघुती पुनःनिर्माणका लागि भारतीय दूतावासले दिनेभयो दुई करोड ६३ लाख
११ कात्तिक, जुम्ला । घुघुती जुम्लाको पुनःनिर्माणका लागि भारतीय दूतावासद्वारा दुई करोड ६३ लाख सहयोग जुम्ला, कात्तिक ११ साना जलविद्युत् घुघुती जुम्लाको पुनःनिर्माणका लागि भारतीय दूतावासले दुई करोड ६३ लाख सहयोग गर्ने भएको छ। विसं २०४० मा ५०० घरधुरीका जीर्ण विद्युत्को क्षमता अभिवृद्धिका लागि दूतावासले यो सहयोग गर्ने भएको हो। ३३ वर्षअघि ५०० उपभोक्ताका लागि निर्माण भएको २०० किलोवाट बत्ती घटेर १०० किलोवाट पुगेको छ। अहिले उपभोक्ता बढेर दुई हजार ७०० पुग्द ...
मेलम्ची पहुँचमार्ग स्तरोन्नति हुदै
१० कात्तिक, काठमाडौँ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको लामिडाँडा– तिम्बु ४३ किमी सडकको स्तरोन्नति हुने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सामान ओसार्न पहुँचमार्गका रुपमा प्रयोग भइरहेको यो सडक जीर्ण बन्दा आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने बचन दिएको मेलाम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले जानकारी दिए। “बैंकले आयोजनालाई नै सडक स्तरोन्नतिका लागि भनेको थियो, सड ...
दशौं गोदावरी पुष्प मेला आजदेखि सुरु
१० कात्तिक, काठमाडौं । गोदावरी फूल प्रतियोगात्मक प्रदर्शनीको दशौं संस्करण बुधबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ । जावलाखेलमा आजदेखि रोपेर फूल गोदावरी, सजाऔं घर आँगन वरिपरि भन्ने नाराका साथ १० औं गोदावरी फूल प्रतियोगितात्मक प्रर्दशनी शुरु भएको हो । कृषि मन्त्रालयको सहयोगमा फ्लोरिकल्चर एसोशिएसको आयोजनामा भएको सो प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीको कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले उद्घाटन गरिन् । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै फ्लोरीकल्चर एसोशिएसनका उपाध्यक्ष र ...
पश्चिमाञ्चल स्तरीय उद्योग व्यापार मेला सुनवलमा हुने
रविन्द्र यादव, ९ कात्तिक, नवलपरासी । नवलपरासीको सुनवलमा तेश्रो पश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यपार मेला २०७३ आयोजना हुन लागेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यपार एवं सुचना प्रविधिको वृहद प्रर्शनी गर्ने उद्देश्यले यस अद्योगिक व्यपार मेलाको आयोजना हुन लागेको हो । शान्ती समृद्ध उद्योग र व्यपार, राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार मुल नाराका साथ आयोजना हुन लागेको व्यपार मेलामा जिल्लालाई कृषि पर्यटन र औद्योगिक जिल्लाको रुपमा परिचत गराउदैधार्मिक, पर्यटकिय क्षेत्रको विका ...
तिहार लक्षित गोदावरी मेला, जावलाखेल खेल मैदानमा भेला !
८ कात्तिक, काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एसोशिएसन नेपालको आयोजना तथा नेपाल सरकार कृषि बिकास मन्त्रालयको सहयोगमा कार्तिक १० गतेबाट आयोजना हुने गोदावरी मेलाको तयारी पुरा भएको छ । ललितपुरको जावलाखेल खेल मैदानमा ४ दिन सम्म चल्ने १० औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीको तयारी पुरा भइसकेको फ्यान उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक रामजी तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । दिपावली तथा छट पर्ब लक्षित गोदावरी मेलामा प्रतिश्पर्धात्मक, सूचनामुलक तथा व्यवसायीक स्टल गरि ४२ ...
अण्डामा आत्मनिर्भर घोषणा तयारी
४ कात्तिक, काठमाडौँ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणाको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ६२ जिल्लामा एक अर्ब २० करोड अण्डा वार्षिक उत्पादन भएको छ । सो सङ्ख्या स्थानीय कुखुराबाट उत्पादन हुने अण्डा बाहेकको सङ्ख्या हो । राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्क तथा ती जिल्लामा गरिएको सर्भेक्षणको प्रतिवेदनको अध्ययन चाँडै गरिनेछ । त्यसको अध्ययनपछि घोषणा गरिने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ...
कोरलामा आन्तरिक पर्यटक बढे
२ कात्तिक, म्याग्दी । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाका अवलोकन गर्न जानेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले नाका सञ्चालनका लागि चीनसँग कूटनीतिक संवाद र भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति गर्न थालेपछि व्यापारी, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता नाका पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थिति अवलोकन गर्न थालेका हुन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका व्यापारी दसैँको बिदा मनाउन नाका अवलोकन गर्न थालेको लोमान्थाङका स्थानीय सुवर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो । &l ...
आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य मनाङ
२ कात्तिक, बेसीसहर । हिमालपारीको जिल्ला मनाङ आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ । जिल्लामा मोटरबाटो बनेपछि आन्तरिक पर्यटक सवारी साधनबाट आउने क्रम बढेको हो । बिदा मनाउन र घुमघाम गर्नका लागि युवायुवती मोटरसाइकल तथा अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन चडेर मनाङसम्म आउने आन्तरिक पर्यटक बढिरहेको मनाङ पर्यटन व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताउनुभयो । “मनाङमा अहिले दैनिक काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन, पाल्पालगायतका स्थानबाट आन्तरिक पर्यटक आउने गरे ...
सुनको मूल्य साँढे २ हजार घट्यो
२८ असोज, काठमाडौँ । दसैँको सुरुवातसँगै सुनको मूल्य घटेकाले कारोबार बढ्दै गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ । दसैँको घटस्थापनाको दिन प्रतितोला रु ५८ हजार ३०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु ५६ हजार र तेजावी सुनको मूल्य रु ५५ हजार ७५० कायम रहेको छ । सङ्घका अनुसार घटस्थापनापछि पटक पटक गरी सुनको मूल्य घटेर प्रतितोला रु दुई हजार ३०० भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा कमी आएसँगै नेपालमा पनि त्यसको प्रभावले मूल् ...
सामसुङ नोट ७ को उत्पादन बन्द, स्विच अफ गरेर राख्न अपिल
मर्मतपछि सुरक्षित भनी बजारमा पठाइएका ग्यालेक्सी नोट सेभेन स्मार्टफोनमा समेत आगलागी भएको घटना सार्वजनिक भएपछि सामसुङले तत्कालै नोट सेभेन स्विच अफ गरेर राख्न आफ्ना प्रयोगकर्तालाई अपिल गरेको छ । सोमबार एक चेतावनी जारी गर्दै सामसुङले नोट सेभेन प्रयोगकर्तालाई यस्तो आग्रह गरेको हो । उपभोक्ताको सुरक्षामै खतरा उत्पन्न गराएको नोट सेभेनको उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरेको एक दिनपछि नै सामसुङले यस्तो अपिल गरेको हो । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सामसुङले ग्यालेक्सी ...
२० असोज, भोजपुर । जिल्लाको पश्चिमी गुप्तेश्वर तथा सिद्धेश्वर गाविसमा दसैँ, तिहार नजिकिएसँगै नुन, तेललगायत खाद्यान्नको अभाव देखिन थालेको छ। चाडपर्वका बेला आवश्यकताअनुसारको सामान लिन नपाउँदा स्थानीयबासिन्दा मारमा परेको स्थानीय लक्ष्मण चौहानले बताए। ढुवानी समस्याका कारण आवश्यकताअनुसार खाद्यान्नको आपूर्ति गर्न नसकेको व्यापारी भलाकाजी खड्काले बताए। केही दिनमै सडक राम्रो भएमा सामान आपूर्ति सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ। रासस ...
जान्नुस कुन नोट छाप्न कति रुपैयाँ लाग्छ ? हजारको भन्दा सयको नोट महंगो !
१९ असोज, काठमाडौं । के तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको गोजीमा भएको एउटा नेपाली नोट छाप्न कति रुपैयाँ लाग्छ रु पक्कै पनि तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ । र, हजार रुपैयाँको भन्दा सय र पाँच सयको नोट छाप्न महंगो पर्छ भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्ला । सन् २०१३ पछि राष्ट्र बैंकले सन् २०१६ मा मात्रै नयाँ नोट छापेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । प्रवक्ता पंगेनीका अनुसार एक हजार रुपैयाँको नोट छाप्न भन्दा एक सय र पाँच सय रुपैयाँका नोट छाप्न महंगो प ...
सुनको भाउमा असामान्य गिरावट
१९ असोज, काठमाडौं । सुनको भाउ बुधबार तोलामा एकैदिन ११ सय रुपैयाँले घटेको छ । सुन बुधबार तोलाको ५६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार तोलाको ५७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ यो हप्ताको सुरुदेखि नै घट्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेकाले नेपालमा पनि सस्तो भएको महासंघले जनाएको छ । चाँदी पनि बुधबार तोलाको ३० रुपैयाँ घटेर ८ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । ...
ब्रुनाई विदेशी कामदारका लागि उपयुक्त गन्तव्य मुलुक
१७ असोज, बुनाई । ब्रुनाई विदेशी कामदारका लागि रोजगारीको उपयुक्त गन्तव्य भएको छ । ब्रुनाईमा अहिले १ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको त्यहाँका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ब्रुनाईको श्रम विभागका कार्यवाहक आयुक्त हि शरिफुल बहारीले अधिकांश कामदार निर्माण कम्पनीमा कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।निर्माण कम्पनीहरु विदेशी कामदारका लागि लोकप्रिय रहेको सो विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसुार सन् २०१४ मा चार लाख ११ हजार ९ सय जनसङ्ख्या रहेको ब्रुन ...
सबै नेपाली नोटमा जनावरका चित्र फेरिदै, हजारको नोटमा अब दुई वटा हात्ती
१४ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपाली नोटमा रहेका जनावरका चित्र परिवर्तन गर्ने भएको छ। अहिले राष्ट्र बैंकले १ सय र ५० का नयाँ नोटमा चित्र परिवर्तन गरेर गभर्नर डा। चिरञ्जिवी नेपालको हस्ताक्षरमा बजारमा आइसकेका छन्।राष्ट्र बैंकले यी बाहेक १ हजार, ५ सय र २० रूपैयाँको नोटमा भएका जनावरको चित्र पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ। यसअघिका नोटमा रहेका जनावर नेपाली हुन् वा होइनन् भन्ने आधिकारिकता पुष्टि नभएपछि राष्ट्र बैंकले सबै नोटमा नेपाली जनावरको च ...
पुनर्निर्माण लागत २६८ अर्ब बढ्यो
१० असोज, काठमाडौं । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म उल्लेख्य प्रगति नभए पनि अनुमानित लागत भने उल्लेख्य बढेको छ । गत वर्षको दाता सम्मेलनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद् व्यवस्थापनको आवश्यक आँकलन प्रतिवेदनले पुननिर्माणका लागि ६ सय ७० अर्ब आवश्यक रहेको देखाएको थियो । अहिले भने पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत बढेर ९ सय ३८ अर्ब पुगेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । भूकम्प प्रभावितलाई पूर्वघोषित दुई लखा अनुदान रकममा थप एक लाख रुपैया ...
दसैंका लागि आठ अर्बका नयाँ नोट वितरण गरिँदै
१० असोज, काठमाडौं । यसपालि दसैंमा ८ अर्ब रुपैयाँका विभिन्न दरका नयाँ नोट चल्तीमा आउँदै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सरकारी कार्यालय, सैनिक, प्रहरी र सहकारी संस्थामार्फत उक्त रकमबराबरका नयाँ नोट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्याकाभित्र मात्र वाणिज्य बैंकमार्फत करिब डेढ अर्ब, विकास बैंकमार्फत २० करोड र फाइनान्स कम्पनी मार्फत ७ करोड रुपैयाँका विभिन्न दरका नयाँ नोट वितरण गर्दै छ । यसैगरी ...
१० असोज, काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट तीन वर्षमा २२ हजार तीन सय ४१ जनाले उपचार गराएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आठ हजार दुई सय १३, ०७१/७२ मा ६ हजार ९५ र ०७२/७३ मा आठ हजार ३३ जनाले सरकारी उपचार खर्च पाएका हुन् । सबैभन्दा धेरै उपचार खर्च लानेमा क्यान्सर रोगी सरकारले छुट्याएका आठ प्रकारको गम्भीर रोगमध्ये सबैभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामीले विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचार गराएका छन् । कोषअन्तर्गतको व्यवस्थापन महा ...
तलब खान मन्त्रालय धाउँदै मजदुर
१० असोज, काठमाडौं । अर्धसरकारी स्वामित्वको गारखाली रबर उद्योगका मजदुर पारिश्रमिकको लागि सरकार फेरिएपपिच्छे मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । उनीहरु विभिन्न नेताका साथ लागेर अर्थ र उद्योग मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । भूकम्पपछि बन्द रहेको उद्योगले श्रमिकलाई तलसमेत दिन सकेको छैन । महिनौदेखि तलब नपाएपछि उयनीहरु मन्त्रालय आउन बाध्य भएका छन् । रबर उद्योगका महाप्रवन्धक दिनेश बर्तौलाले श्रमिकलाई तलब खुवाउन १० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताए । अवकार प्राप्त कर्मचा ...
कामका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या घट्यो
४ असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या लगातार घट्दो क्रममा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को पहिलो दुई महिना वैधानिक रुपले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर ६४ हजार नेपाली विदेश गएका छन् । तर, यो संख्या अघिल्लो महिनाहरुभन्दा न्युन हो भने गतवर्षको तुलनामा पनि कम हो । गतवर्ष साउन भदौमा म्यानपावरले कामदार विदेश पठाउन छाडेर फ्री भिसा विरुद्ध उत्रिँदा पनि विदेश जानेको संख्या यो वर्षको सोही भन्दा बढी थियो । गत वर्षको साउन तथा भदौमा ७४ ...
ठमेलको विकासमा कुुनै पनि सम्झैता हुदैनः अध्यक्ष, ठमेल पर्यटन विकास परिषद
४ असोज, काठमडौँ । ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष रामशरण थपलियाले परिषद्का केही गलत व्यक्तिहरुले परिषद्का विषयमा कु–प्रचार गरेर परिषदको बदनाम गरेको बताएका छन् । राजधानीमा सोेमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर थपलियाले ठमेलमा बल पर्योग गरेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता भएका एक दुई जनाले गर्दा ठमेलको बदनाम भएको बताएका हुन । आफूले गरेका विगतका कार्यहरुको विषयलाई लिएर केहिले आफ्नो विरुद्धमा घोेर सड्यन्त्र गरेको बताउँदै थपलियाले भ ...
पाँच महिना बित्दा पनि पुगेन हुम्लामा चामल
४ असोज, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंसहित सहर बजारमा दसैँको चटारोले छुँदै छ । दसैँलाई लक्षित गर्दै लत्ताकपडादेखि सवारीसाधनसम्म किन्नेको घुइँचो बढ्दो छ । तर, यही देशमा यस्तो पनि ठाउँ छ, जहाँ दसैँमा समेत चामलको भात खान नपाइने भयो भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । दसैँ नजिक आइसक्दा पनि ढुवानीमा देखिएको असामञ्जस्यका कारण कर्णालीको हुम्लामा चामल पुग्न सकेको छ । हुम्लाको सम्भावित भोकमरीलाई लक्षित गरी सरकारले पाँच महिनाअघि नै चामल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत ...
नेपालबाट चीनतर्फ डलर तस्करी
४ असोज, काठमाडौं ।नेपालबाट चीनतर्फ अमेरिकी डलरको तस्करी हुने गरेको छ । तस्करीकै कारण नेपाली बजारमा डलरको अभाव चर्किएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चिनियाँ पर्यटक र नेपाली व्यवसायीहरूले नेपाली बजारबाट नगद डलर संकलन गरी चीनतर्फ तस्करी गर्ने गरेको स्रोतले बतायो । ‘चिनियाँ पर्यटकहरू कार्ड बोकेर आउँछन्,’ ठमेलमा मनी चेन्जर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘यहाँबाट महँगो दरमा नगद डलर किनेर लैजान्छन् ।’ नेपाली व्यवसायीले पनि ...
पाँच जलविद्युतले सेयर निष्कासन गर्दै
४ असोज, काठमाडौं । पाँच वटा जलविद्युत कम्पनी र एउटा लघुवित्त संस्थाले प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गर्दै छन् । आईपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन् । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती कम्पनीको सेयर बजारमा आउँछ । ती कम्पनीले प्रतिसेयर अंकित मूल्य १ सयका दरले ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ६० लाख ३० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । सामान्यतया अनुमति पाएको मितिले २ महनिाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने ...
१ अर्ब लागतमा विराटनगरमा ११ तले सपिङ मल
३ असोज, विराटनगर । एक अर्बभन्दा बढीको लगानीमा विराटनगरमा ११ तले महल मल निर्माण अघि बढाइएको छ । पूर्वाञ्चलको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर उद्योगपति मोती दुगडले विराटनगर–७ स्थित शिव मन्दिर छेउमा महल निर्माण सुरु गरेको बताए। एकै स्थानमा सबै सुविधा उपयोग गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले महल निर्माण सुरु गरेको यो महल सम्भवतः नेपालकै ठूलो महलका रुपमा स्थापित हुने र भारतीय सीमाक्षेत्र जोगवनीले जस्तै यो महलको निर्माणले नेपाली ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने ...
कावेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा
३ असोज, पाँचथर । काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने कावेली नदीमा निर्माण गरिने ३७।६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको जिम्मा झिझ्याङ, टिडब्लु र सीडब्लू नामक चिनियाँ कम्पनीले पाएको आयोजना प्रमुख वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यसअघि काबेली हाइड्रोपावर इनर्जी प्रालिले निर्माणको काम सुरु गरेपनि विवादका कारण अघि बढाउन सकेको थिएन । दसैँ लगत्तै चिनिय ...
तेक्वान्दोक संघका उपाध्यक्षले सञ्चालन गरे अर्जुन फिटनेस सेन्टर ३ असोज, काठमाडौँ । तेक्वान्दोका पूर्व राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय खेलाडी तथा नेपाल तेक्वान्दोक संघका उपाध्यक्ष हरिश्वर पोखरेलले काठमाडौंको नक्साल नारायणचौरमा अर्जुन फिटनेस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तेक्वान्दो, यरोविक, जुम्बा, कराँते, बि–बोइङ सिकाइने उक्त फिटनेस सेन्टर हरेक दिन बिहान ६ बजेदेखी ८ सञ्चालनमा हुन्छ । अर्जुन फिटनेस सेन्टरले ३ वर्षभित्र करिव ५ देखी १० हजार खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त फिटनेस सेन्टरका सञ्चालक ...
सुन्दरले बनाए 'उज्यालोको सहर राजघाट'
२८ भदौ, मोरङ । गाउँको विकास निर्माणमा सरकारको मुख नै ताक्ने प्रवृत्तिलाई चिर्दै मोरङ राजघाट-७ का युवा व्यवसायी सुन्दर श्रेष्ठले आफू जन्मिएको ठाउँ नै झलमल्ल बनाएका छन्। राजघाट-७ को भोटेपुल र खोपिडाँडा आसपासका पोलमा श्रेष्ठले एकल लगानीमा सडकबत्ती जडान गरी गाउँ झलमल्ल पारेका हुन्। उनले एउटा बत्ती बराबर दुई हजार २०० पर्ने पाँच दर्जनभन्दा बढी बत्ती जडान गरिदिएका छन्। आवश्यक परे थप सहयोग गर्न उनी आतुर पनि छन्। स्थानीय कमल फ्याक, कैलाश थापामगर, दिनेश था ...
२६ भदौ, काठमाडौँ । नेपालीको महान् चाड दसैँ, तिहार तथा छठलाई लक्षित गरी जुम्लामा उत्पादित अर्गानिक स्याउ काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख चोकमा बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ । एस डिके एप्पल गार्डेनिङले यहाँ शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि चाडपर्वलाई लक्षित गरी जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ ल्याइसकेको जानकारी दियो । सो गार्डेनिङले विगत चार वर्षदेखि जुम्लाको अगार्निक स्याउ बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।नेपालको अर्गानिक सर्टिफाइड, ताजा र गुण ...
गभर्नरसँग जनताको बचत सुरक्षित गर्न माग !
१७ भदौ, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जनताको बचत सुरक्षित राख्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । भिबोभर सोइसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको आज यहाँ उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले नाफाका लागि खोलिने निजी कम्पनीले जस्तो जनताको पैसामा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो । “जनताको रकम बैंकले सुरक्षित गर्नुपर्छ, अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता नै खराब हुन्छ,&r ...
‘हरियो नम्बरप्लेटले गैरपर्यटक बोक्न नपाउने
१७ भदौ, काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले हरियो नम्बरप्लेटका सवारी साधनमा गैरपर्यटक बोक्न नपाइने बताउनुभएको छ । पर्यटन पत्रकार सङ्घ ९जाट० नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महानिर्देशक श्रेष्ठले पर्यटक र गैरपर्यटकको स्पष्ट पहिचान गरी आवतजावत गराउनुपर्ने बताउनुभयो । “निजी सवारीले पर्यटकलाई बोक्न पाउनुहुँदैन कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ, बोकेमा कारबाही हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो– “सरकारले ...
विद्युतीय सवारीलाई नेपालमा प्रोत्साहन
१६ भदौ, काठमाडौँं । जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले हाल मुलुकले भोग्दै आएको ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि जलविद्युत् एवम् सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा जोड दिइएको बताउनुभएको छ । मन्त्री जोशीको सम्मानमा ऊर्जा विकास परिषद्ले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा बोल्दै उहाँले यातायात क्षेत्रमा इन्धनको ठूलो हिस्सा खपत हुने गरेको र यसको आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च हुने र वातावरणमा पनि असर पुगेकाले अब विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ...
काठमाडौँ टावरले महानगरपालिकालाई झण्डै एक करोड रोयल्टी बुझायो
१४ भदौ, काठमाडौँ । पुरानो बसपार्कमा बनाउन लागिएको काठमाडौँ टावरको ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर, स्वछन्द विकोइले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रु ९८ लाख ३३ हजार ३०० राजस्व तिरेको छ । निर्माण सुरु गर्नुपर्ने लामो समय बितिसक्दासम्म निर्माणको लागि जिम्मा पाएको कम्पनीेले काम सुरु नगरेपछि कामपाले पटक पटक ठेक्का रद्दगर्ने चेतावनी दिएपछि टावर निर्माणको ठेकेदार कम्पनीले राजस्व तिरेको हो । सम्झौताअनुसार गत वैशाखदेखि काम सुरु गर्ने भनिएपनि हालसम्म काम सुरु नभएको भन्दै ...
नेपालमा किन पाएनन् विदेशी बैंकहरुले शाखा ?
८ भदौ, काठमाडौं । व्यावसायी डा. रुप ज्योतिले २०५३ सालतिर नेपालमा कोरियन हाना बैंकको शाखा स्थापना गर्ने प्रयास गरे । हाना बैंकले राष्ट्र बैंकलाई आफूले शाखा स्थापना गर्न चाहेको भन्दै औपचारिक पत्र पनि पठाएको थियो । तर, ज्योतिको प्रयास सफल भएन । त्यस्तै, तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको इच्छामा ०५५ सालतिर चीनको बैंक अफ चाइनाको शाखा पनि भित्र्याउन खोजियो । त्यसबेला, बैंक अफ चाइनाले पनि शाखा स्थापना गर्न चाहेको पत्र पठाएको थियो । अन्तत ...
सर्वोत्कृष्ट करदातामा एनसेलकै अग्रता
७ साउन, काठमाडौं । एनसेल चौथो पटक सर्वोत्कृष्ट करदाता बन्ने भएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा रु २८ अर्व भन्दा बढि राजश्व सरकारलाई बुझाएर फेरी सबभन्दा ठूलो करदाता बन्न लागेको हो । यद्यपी सम्बन्धित कर कार्यलयबाट भने कुन कुन कम्पनी अथवा करदाता आर्थिक बर्ष २०७२-७३ को उत्कृष्ट करदाताहरु हुन् त्यसको आधिकारीक सूची भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । यस अघि लगातार तिन वर्ष ९२०६९-२०७०, २०७०-२०७१ र २०७१-२०७२० सबै भन्दा बढि कर ...
बिच्कियो लेबनान, नेपाली कामदारमाथी प्रतिबन्ध
७ भदौ, काठमाडौं । लेबनानले नेपाली कामदार लिन बन्द गरेको छ । नेपाल सरकारले विदेशिने घरेलु कामदारका लागि ल्याएको नयाँ निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै लेबनानले नेपाली कामदार लिन बन्द गरेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले घरेलु कामदारका लागि विभिन्न अनिवार्य रुपमा शर्तहरु राख्दै ल्याएको निर्देशिका आफ्नो श्रम कानुनसँग बाझिएको भन्दै लेबनानले नेपाली कामदार लिन प्रतिबन्ध जारी गरेको हो । लेबनानको श्रम मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गर्दै कामदा ...
युरोपको लिथुएनियामा नेपाली कामदार माग, न्युनतम् तलव १३ सय युरो
५ भदौ, काठमाडौं । युरोपेली मुलुक लिथुएनियाका विभिन्न उद्योगहरुबाट नेपाली कामदारको माग आएको छ । म्यानपावरमार्फत आएको मागमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सम्भव नभएपछि सरकारले लिथुएनियामा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । लिथुएनियाबाट दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको माग भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसलाई खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही म्यानपावरहरुले लिथुएनियाबाट निर्माण, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रका उद्योगहरुमा लैजान अनुमति मागे ...
चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको आँखा बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा
३२ साउन, काठमाडौं । चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) ले १२ सय मेघावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएको छ । साथै उसले माथिल्लो त्रिशुली ए परियोजनाको ६५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको जनाएको छ । चाइनिज कम्पनी सीजीजीसीका तर्फबाट पीआर म्यानेजर ओमबन्धु कार्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘सीसीजीजीसीले हालै नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकको विकासको आशा बनेको १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त बुढीगण्डकी ...
बढ्दो युवा आकर्षण तरकारी खेतीमा
३१ साउन, ललितपुर । पछिल्लो समय तरकारी खेतीप्रति युवा आकर्षण बढ्दै गएको छ । तरकारी खेतीबाट उनीहरुले आफ्नो दैनिकी जीविकोपार्जन राम्रोसँग गर्दै आएको पाइएको छ । यसबाहेक परिवारको हेरचाह एवम् आर्थिक अवस्था पनि मजबुत देखिएको छ ।खेतीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर राम्रो शिक्षा दिन पनि उनीहरु सफल भएका छन् । तरकारी खेतीबाटै उनीहरुले समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन समेत सफल भएको पाइएको छ ।घुसेल गाविस–८ बस्ने गोविन्द गौतमले ...
सेयरमा ‘कालोधन’ प्रकरणः नेपाल कालोसूचीको उच्च जोखिममा ३० साउन, काठमाडौं । सेयर बजारमार्फत अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य नियन्त्रणमा धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै यो क्षेत्रमा संलग्न अन्य निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सेयरमा हुने लगानीको स्रोत खोजी गर्ने कार्यबाट बोर्ड पछाडि हटेपछि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी नभएको आरोपमा नेपाल फेरि कालोसूचीको खतरामा पर्ने भन्दै सम्बद्ध निकायले चासे र चिन्ता जनाएका छन् । शेयर बज ...
ट्राफिक कारबाहीबाट उठ्यो चालीस लाख राजस्व
२७ साउन, भीमदत्तनगर । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कञ्चनपुरले ट्राफिक कारबाहीबाट रु ३९ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।गत आवमा ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चालकबाट सो जरिवाना असुल गरिएको हो । अघिल्लो आवमा रु ५२ लाख २४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टक्कर स्वाँरले नाकाबन्दीका कारण यस वर्ष राजस्व असुलीमा गिरावट आएको बताउनुभयो । ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र बिना सवारी चलाउनेलगायतका का ...
खड्काको बदमासी, ‘करोडौं लेनदेन’मा तीन सय ट्यांकर खरिद
२७ साउन, काठमाडौं । कानुनी प्रक्रिया मिच्दै मोटो रकम चलखेलमा नेपाल आयाल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर खरिद अनुमति दिएका छन् । यसअघि पनि पटक पटक विवादित निर्णय गरेका खड्काले पछिल्लोपटक निगम सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई चोरबाटोबाट सेटिङ मिलाएर करिब ३ सय ट्यांकर खरिदको अनुमति दिएका हुन् । इन्डियन आयल कर्पोरसन आईओसीबाट डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर खरिद अनुमतिमा करिब ३ क ...
सरकारी बैंकमा ऋणीसँगै मिलेर करोडौं रुपैँया भ्रष्टाचार २५ साउन, काठमाडौं । पूर्णसरकारी स्वामित्वको एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैैंकमा कराडौं रकम भ्रष्टाचार तथा हिनामिना भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानले बैंकमा विभिन्न शिर्षकमा ठूलो रकम गोलमाल भएको देखाएको हो । केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायलाई बुझाउनु पर्ने भए पनि हालसम्म बुझाइएको छैन । गोप्य राखिएको सो प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध भएको छ । प्रतिवेदनले खुल ...
नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च अंकको गिरावट
२४ साउन, काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ८८ दशमलव ८१ अंकले घटेको छ । यो एकै दिनको कारोबारमा हालसम्मकै उच्च अंकको गिरावट हो । बजार खुलेदेखि नै घट्न शुरु गरेको नेप्से कारोबार समय अघि नै ५ प्रतिशतले बढेपछि सर्किट ब्रेकर९एकै दिन नेप्से ५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्दा कारोबार बन्द गर्ने प्रक्रिया० मार्फत बजार बन्द गरिएको हो । यो घटाईले नेप्सेलाई १ हजार ६ सय ७।५ दशमलव ९१ मा झारेको छ । उक्त दिन ८ वटा समूह अन्तरगतका कम्पनीहरुको सेयर कारोबार भएकोमा ...
सात लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादनमा वृद्धि हुने
२१ साउन, काठमाडौँ । चालु आवमा धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा करिब सात लाख ५० हजार मेट्रिक टनले वृद्धि हुने भएको छ । गत वर्ष २०७२र७३ मा ४२ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा चालु आव २०७३र७४ मा ५० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । अहिले देशभर करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धानको माग रहेकाले अझै पाँच लाख मेट्रिक टन धान नपुग हुने देखिन्छ । चालु आवमा करिब रु १० अर्बको चामल आयात गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्ष रु २५ अर्बको ...
२० साउन, काठमाडौं । खाडी मुलुकको महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिने दुबई उडान बन्द भएको चार वर्षपछि पुनःउडान सञ्चालन गर्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी भदौ २ गतेदेखि नियमित काठमाडौँ–दुबई सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको निगमले एक वर्षमा ४० हजार बढी यात्रुलाई सेवा दिएर उक्त रकम आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको हो। विसं २०४१ माघदेखि काठमाडौँ–दुबई उडान प्रारम्भ गरेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरल ...
जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा लगानीका चीनको प्रतिबद्धता
साउन १९, काठमाडौँ – मित्रराष्ट्र चीनको छन्डु एसोसिएसन अफ फरेन इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कोपरेसनले नेपालमा विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा ट्रेड कोपरेसनद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोपरेसनका महासचिव छेन स्याओको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएका १६ सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा प्रचूर सम्भावना रहेकाले चीनको लगानीको प्रतिबद ...
राष्ट्र बैंक भन्छ, 'बैंकहरुको निक्षेप सवा ३ खर्ब र ३ खर्ब कर्जाको बीमा'
१८ साउन, काठमाडौं । बैंकहरुको निक्षेप १६ खर्ब र कर्जा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगिसकेको छ । तर, हालसम्म सवा ३ खर्ब निक्षेप र ३ खर्ब रुपयाँ कर्जाको मात्रै बीमा भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पाँच वर्षअघिदेखि सरकारले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण ९बीमा० गर्न थालेको थियो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले सुरक्षणको काम गर्दै आएको छ । अहिलेसम्ममा १ सय ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब १८ अर्ब ३६ करोड रुपयाँ बराबरको निक्षेप सुर ...
दुगडको गोदामबाट २ लाख प्याकेट खान नमिल्ने फ्रुटी सरकारी अनुगमन टोलीद्वारा नस्ट
१८ साउन, काठमाडौं । सतुङ्गलस्थित दुगड फूड्स एण्ड बेभरेजको गोदाममा रहेका २ लाख साना प्याकेट फ्रुटी खान नमिल्ने भेटिएपछि सरकारी अनुगमन टोलीले नस्ट गरेको छ। यसअघिनै आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा उपभोक्तावादी संस्थाहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले उद्योगमा रहेको प्लान्ट तथा गोदाममा सिलबन्दी गरेको थियो। बजारमा बिक्री नभई म्याद सकिएका फ्रुटी फिर्ता ल्याएर त्यसमै नयाँ लेबलिङ गर्दै पठाउने ...
फेसबुकको आम्दानीमा बृद्धि
काठमाडौं, साउन १४ । फेसबुकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा गत वर्षको तुलनामा १८६ प्रतिशत बढी आर्थिक बृद्धि गरेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा १८६ प्रतिशतले आम्दानी बढेको जनाइएको हो । जारी तथ्यांक अनुसार यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा फेसबुकले दुई सय करोड डलरको शुद्ध आम्दानी भएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा ७१ करोड ९० लाख डलर आम्दानी भएको थियो । कम्पनीका मूख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्गले एक भिडियो स ...
१७ साउन, गोरखा l जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गोरखाका १४ गाविसका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण प्रयोजनका लागि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको घरजग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता नहुने भएपछि उनीहरु अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत गोरखा र धादिङ क्षेत्रका घरजग्गाको किनबेचमा रोक लगाएको छ । घ्याल्चोक, ...
लोकमान कार्कीको सम्पत्ति विवरण माग, ५५ जनाको निवेदन पर्यो
१६ साउन, काठमाडौँ । सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सको नेतृत्वमा गएको टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको सम्पत्ति विवरण माग गरेका छन्। आइतबार अख्तियारको कार्यालय गएर प्रमुख आयुक्त कार्कीको सम्पत्ति विवरण माग गर्दै ५५ जनाले निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अन्तर्गत लोकमानसिंह कार्कीको सम्पत्ति विवरणको सूचना माग गरेका हुन्। सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका व्यक्तिहरुले एक हप्त ...
विपन्नका नाममा नेता-सांसदलाई पैसा बाड्दै सरकार
१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा राज्यकोषबाट एकै दिन एक करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । तत्कालिन गृहमन्त्री शत्तिःबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा २६ असारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ७८ जनालाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको हो ।आर्थिक सहायता पाउनेमा विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता धेरै छन् । संवैधानिक निकायमा व्यक्तिहरुले पनि आर्थिक सहायता पाएका छन् । निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई तीन लाख दिइएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ...
पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि उद्योगीसँग छलफल जारी : उद्योगमन्त्री
१४ साउन, काठमाडौँ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका उद्योगीसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिअन्तर्गत एकीकृत कर्मचारी सङ्घको छैठौँ केन्द्रीय अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेयले स्वदेशी स्रोत साधनलाई उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणको कार्य अगााडि बढाइने बताए। मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्न देशमा औद्योगीकरण गर्न ...
एरोमा फेसनको शाखा अब ललितपुरमा पनि
१४ साउन, काठमाडौँ । एरोमा फेसनले आफ्नो दोस्रो शाखा ललितपुरको महापालमा विस्तार गरेको छ । थाईल्यान्डमा उत्पादन र तयार गरिएका लेडिज ,जेन्स् कपडा नेपाली उपभोक्तालाई पु¥र्याउने उद्देश्यले २ वर्ष अघि एरोमा फेसन काठमाण्डौँ लाजिम्पाटमा सञ्चालनमा ल्याईएको थियो । स्वदेशी र विदेशी दुवै किसिमका ग्राहकलाई लक्षित गरि बिहिवारबाट ललितपुरमा एरोमा फेसनले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । ललितपुरको महापालपछि तत्कालै मकवानपुरमा पनि शाखा विस्तार गर्न लागिएको र ने ...
काभ्रेका भूकम्पपीडितले धमाधम बैंक खाता खोल्न थाले
१३ साउन, बनेपा । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गरेका भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाउन विभिन्न बैंकमा धमाधम खाता खोल्न थालेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा पहिले अनुदान सम्झौता गरेको रविओपी गाविसमा जिल्ला विकास समितिले पठाएको पैसा प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बनेपा शाखामा खाता खोल्ने काम जारी रहेको गाविस सचिव छविलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । “अबको केही दिनमा नै खाता खोल्ने काम सकिन्छ, त्यसपछि पीडितले पहिलो कि ...
चार लाख ७४ हजार ४४४ घरधनीलाई पहिलो किस्ता, पुनर्निर्माणका लागि २० अर्ब
१२ साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई अनुदान पाउने सूचीमा परेका घरधनीलाई घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तास्वरुप अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको अख्तियारी प्रदान गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार चार लाख ७४ हजार ४४४ घरधनीलाई पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन २३ अर्ब ७२ करोड २२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। उक्त रकम स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जाने गरी अख्तियारी प्रदान गर ...
जलविद्युत् रोयल्टी वितरण प्रक्रियाको तयारीमा, सबैभन्दा बढी गोरखालाई रु १० करोड ६७ लाख
११ साउन, काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु गर्ने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना भएका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आव २०७१(७२ को जलविद्युत् रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजनाले उपलब्ध गराउने रकमका आधारमा रोयल्टी वितरण गर्न रु ५७ करोड छुट्याएको छ । विभागले आव २०७०(७१ मा धनुषाको लागि दिन ब ...
भूकम्पपीडितलाई राँगो, बोका वितरण कार्यक्रम रोकियो
११ साउन, भक्तपुर । भूकम्पपीडित राहत कोष पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत भूकम्पले पशु मरेका पीडितका लागि उन्नत जातको राँगो र बोका वितरण गर्ने कार्यक्रम रोकिएको छ। जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा जेठ २७ गते आएको २३ लाख रुपैयाँ समय अभावका कारण देखाउँदै राँगो, बोका वितरण गर्न नसकेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको हो। कार्यालयका पशु चिकित्सक एवम् सूचना अधिकृत उमेशलाल प्रधानले ढिलो गरी बजेट आएको र प्रक्रिया पुर्याएर वितरण गर्न ढिलो भएकाले बजेट आएपनि वितरण गर्न नसकि ...
यार्सागुम्बाबाट एक करोड राजस्व
९ साउन, काठमाडौँ । सुदूरपश्चिममा यार्सागुम्बा सङ्कलनबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु एक करोड १९ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको छ । यार्सा सङ्कलन हुने सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बझाङ र दार्चुलामा गरी हालसम्म तीन क्विन्टल ६६ किलो यार्सा जिल्ला बाहिर निर्यातका लागि छुटपूर्जी लिइएको छ । अपि नाम्पा संरक्षण कार्यालय दार्चुलाका अनुसार गत असार मसान्तसम्म जिल्लाबाट दुई क्विन्टल ५७ किलो यार्साको छुटपूर्जी लिइएको छ । जिल्लाबाहिर लैजान प्रतिकिलो यार्साको रु २ ...
पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने बाटो बन्द
७ साउन, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न पाउने बाटो तत्कालका लागि बन्द गरेको छ । ०६९ मा जारी भएको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेशलाई बुधबार साँझ बसेको पेट्रोलियममा निजी क्षेत्रको प्रवेश बन्द गरेको हो । नियमन आदेशले निश्चित सर्त राखेर निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले ८ कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ३ कम्पनीलाई ग्यास कारोबारका लागि स्वीकृतिसमेत प्रदान गरेको थियो । तर, गठन आदेशै खा ...
अरबपतिको क्लबमा एनआइसी एसिया
५ साउन, काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंक पनि अरब कमाउने बैंकको सूचीमा उक्लिएको छ । यसअघि ८ वटा बैंकले मात्रै अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउँदै आएका थिए । एनआइसी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पहिलोपटक १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । बुधरबार प्रकाशित गत वर्षको वासलात अनुसार बैंकले एक वर्षको अवधिमा ५७ प्रतिशतले नाफा बढाएको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ६८ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकको सञ्चालन आम्दानी १० करोडले बढेको छ । ...
अवको साढे दुई महिनामा फोरजी सेवा
४ साउन, काठमाडौँ । सरकारले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति २०६९ मा पहिलो संशोधन गरी फोरजी सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको हो । मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी नीति संशोधन गरेको जानकारी दिएको छ । सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले फोरजी सेवा सञ् ...
सुनको मूल्यो बढ्यो
४ साउन, काठमाडौँ । मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला १ सय रुपैयाँ बढेर ५८ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो सोमबार सुन ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यस्तै चाँदी भने आज स्थिर रहँदै हिजोकै भाउ ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । ...
उपत्यकामा नै ट्राफिकबाट १५ करोड ८२ लाख राजस्व संकलन
४ साउन, काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा आव २०७२/७३ मा १५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महाशाखाले विभिन्न ट्राफिक कारबाहीबाट उक्त रकम संकलन गरेको हो । महाशाखाका सहप्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले रु पाँचलाख ४८ हजार ४७० सवारी कारबाहीबाट उक्त राजस्व संकलन गरिएकोे जानकारी दिए । उनले गत वर्ष १४ करोड ४९ लाख ९७ हजार ५८५ रुपैयाँ संकलन भएको बताए । ‘ट्रफिकको सक्रियताले गत वर्षको तु ...
एक करोड २५ लाखका बोका नेपालमा
४ साउन, काठमाण्डौ । उन्नत नश्लका बाख्राको उत्पादन गरी मासु उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले अष्ट्रेलियाबाट बोयर जातका बोका ल्याएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको किसानका लागि उन्नत विउ विजन कार्यक्रम (केयूविके) ले अष्ट्रेलियाबाट ५० वटा बोका खरीद गरी ल्याएको हो । सरकारले नै विदेशबाट बोयर बोका खरीद गरेको यो पहिलो पटक भएको पशुविकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि गतवर्ष विश्व खाद्य कार्यक्रमले अनुदानमा दिएको बोयर बोका ल्याएपनि आफै गरीद गरको भने यो पह ...
हावाबाट बिजुली ‘हावाजस्तै’, कम्पनी बेपत्ता !
३ साउन, काठमाडौं । हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव गर्ने कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ। दी गोर्खाज युकेले प्रस्ताव पेस नगरेपछि लगानी बोर्डले निर्णय खारेजीको तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको ११ माघको बैठकले हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० पेस गर्न दी गोर्खाज युकेलाई निर्देशन दिएको थियो। बोर्डले निर्देशन दिएको ६ महिना पुग्ने वेलासम्म कम्पनीले डिपिआर पेस गरेक ...
‘गोफन्ड मी’ले संकलन गरेको करोडौंको राहत रकम खोइ ?
३ साउन, न्युयोर्क । ‘वैशाख १२’ महाभूकम्पको केही घण्टा नबित्दै फ्लोरिडाको टेम्पा सहरकी प्रतिज्ञा तामाङले अर्थ संकलनका लागि ‘गोफन्ड मी’ नामक अनलाइन प्लेटफार्ममा खाता खोलिन्। अभियानको नाम राखियो, ‘भूकम्प पीडितहरूका लागि घर’। सहयोग याचनामा वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा भत्किएका घरहरूका तस्बिर पोस्ट गरियो। तामाङको त्यो सुरुवाती अभियानले धेरैको सहानुभूति पायो। तामाङले सात महिनाकै अवधिमा १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ...
कुमारी बैंकले एनसीसी बैंकसँगको मर्जर तोड्नुको रहस्य खोल्यो !
२ साउन, काठमाडौं । कुमारी बैंकको विषेश साधारणसभाले एनसीसी बैंकलगायत अन्य ४ वटा विकास बैंकसँगको मर्जर तोडेको छ । बैंकको शुक्रबार भएको साधारणसभामा बहुमत सेयरधनीले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेपछि यी संस्थाहरुबीचको मर्जर प्रक्रिया टुंगिएको हो । बैंकको सञ्चालक समिति मर्जरको पक्षमा रहेपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीले कुमारी बैंकसँग मर्जरमा जान नहुनेमा मत खसालेका छन् । शुक्रबार मर्जरमा जाने कि नजाने भनेर बैंकले सेयरधनीलाई गोप्य मतदान गराएको थियो । ‘ ...
एटीएम कार्डबाटै अनलाइन पेमेण्ट
२ साउन, काठमाडौ । तपाईंसँग एससीटी नेटवर्कको एटीएम कार्ड छ ? यदि छ भने ढुक्क हुनुहोस्, अब तपाईंले अनलाइन पेमेण्टका लागि कुनै कठिनाइ बेहोर्नुपेर्ने छैन । एटीएम कार्डको प्रयोग एटीएम मेशिनका अलावा मोबाइल र कम्प्युटरमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । हो, तपाईंसँग एससीटी नेटवर्कको एटिएम कार्ड छ भने अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरीदबापत सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ । अनलाइन सपिङ अर्थात इन्टरनेटमार्फत बस्तु तथा सेवा खरीदविक्री गर्न चाहनेहर ...
कोरियामा रहेका नेपाली कामदारको लागि खुशिको खबर
१ साउन, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारको तलब बढेको छ । कोरियाको ज्याला निर्धारण समितिका अनुसार इपीएस भाषा पास गरेर रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका नेपाली कामदारको तलब बढेर न्यूनतम १ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको हो त्यहाँको ज्याला निर्धारण समितिको १४ औं बैठकले शनिबार ७.३ प्रतिशतले कामदारको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै नेपाली कामदारको न्यूनत्तम तलब १ लाख ३० हजार पुगेको कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । नया ...
१ साउन, काठमाडौं । वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले चैत तेस्रो साता २० हजार रुपैयाँको लागतमा सिरहाको बेलहामा दुईवटा सोलार बत्ती उद्घाटन गर्न करिब ३ लाख रुपैयाँ भाडा लाग्ने हेलिकप्टर प्रयोग गरे । मन्त्रालय आउजाउ गर्न साइकल चढ्नेदेखि विदेश उड्न ठिक्क परेका सहसचिवलाई फिर्ता बोलाई पासपोर्ट कब्जामा लिएर चर्चा कमाएका मन्त्री पासवान आफ्नै गाउँका जनतालाई देखाउनकै निक्ति हेलिकप्टर चढेका थिए । तर उनलाई अहिले त्यही हेलिकप्टरको बिल टाउको दुखाई बनेको छ । न ...
सरकारबाट बाहिरिएको माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बजेट पारित गर्न सघाउने
२९ असार, काठमाडौं । सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकालाई ‘अन्तिम’ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी नेता एवं हालका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माओवादी केन्द्रको बुधबार संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिए पनि बजेट पारित गर्न सघाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । व्यवस्थापिका संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरक ...
एक्स्काभेटर चलाएर भविश्य बनाउने हो भने २५ हजार खर्चिनुस् !
२९ असार, काठमाडौं । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित एमएडब्लु अपरेटर तालिम केन्द्रमा धेरै जना युवा हेभी इक्वीपमेण्ट चलाउन सिक्दैछन् । तालिम सकिएपछि राम्रो अवसर पाइने आशा उनीहरु सबैमा छ । तालिममा ८ कक्षा उत्तीर्ण भएकादेखि ब्याचलर सकेकाहरुसम्म सहभागी छन् । न्यून शैक्षिक योग्यता भएपनि नेपालमै मासिक ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने भएपछि युवाको आकर्षण अपरेटर तालिममा देखिएको छ । तालिम केन्द्रकी प्रशिक्षक संगीता गैरे भन्छिन्, ‘क्यानडामा पीआर पाए ...
आयल निगमका कर्मचारीलार्इ मासिक १ लाख बोनस
२८ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पारिश्रमिकबाहेक मासिक औसत १ लाख रुपैयाँ बोनस पाउने भएका छन् । ऋणमुक्त भएपछि पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नाफा उच्च राखेकाले बोनसमा ठूलो रकम पाउने देखिएको छ। यो बोनस रकम आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा ४ गुणा बढी हो। निगमका अनुसार मासिक पेट्रोल २९ हजार किलोलिटर तथा डिजेल १ लाख १० हजार, मट्टितेल १५ सय र हवाइ इन्धन १० हजार किलोलिटर खपत हुन्छ। यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यास २७ हजार टन बिक्री हुने गरेको छ ...
तीनकुनेमा बुद्ध मूर्तिसहितको शान्ति मण्डला (भिडियोसहित)
२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा जस्तापाताले बेरिएको खुला जमीन छ । तर, अब यो खुल्ला ठाउँ एउटा मनमोहक आध्यात्मिक केन्द्र बन्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको सपना साकार पार्ने गरी महानगरपालिकाले यहाँ धार्मिक संरचना बनाउन लागेको हो । हिउँदमा धुलाम्मे र वषरमा हिलो एवं झाडीले ढाक्ने झण्डै ५० रोपनीको यो चौरीलाई महानगरपालिकाले एउटा धार्मिक एवं आध्यात्मिक पार्कका रुपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । छाडा पश ...
२७ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १४ वर्षपछि आइतबार ऋण मुक्त भएको छ। आइतबार सरकारलाई अन्तिम किस्ताको साँवा ब्याज गरी १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तिरेपछि निगममा अब कुनै ऋणभार रहेन। स्वचालित मूल्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेपछि निगम नाफामा गर्इ ऋण तिर्न सफल भएको हो। ‘करिब १४ वर्षदेखिको ऋण आइतबारबाट मुक्त भयौं,’ निगम अर्थ विभागका निर्देशक सीताराम पोखरेलले भने,‘ऋण तिर्न सफल हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यम ...
सुनको भाउ तोलाको ५९ हजार !
२६ असार, काठमाडौ । सुनको भाउ आइतवार फेरी तोलामा एक सय बढेर ५९ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । आईतवार छापावाल सुन ५९ हजार र तेजावी सुन प्रतितोला ५८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोवार भईरहेको छ । शुक्रवार छापावाल सुन ५८ हजार ९ सय र तेजावी सुन ५८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँमा कारोवार भएको थियो । आइतवार चाँदी प्रति तोला ९ सय ५ रुपैयाँमा कारोवार भईरहेको छ । ...
चिनियाँ जहाज खरिदमा मन्त्रिपरिषद् र पर्यटन मन्त्रालयबीच विवाद
२२ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासले चिनियाँ जहाज खरिदसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको खुलासा भएको छ। पर्यटन सचिवले नै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भए पनि किन पठाइएको भनेर मन्त्रिपरिषदले पत्र पठाएपछि यसको खुलासा भएको हो। मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने प्रावधानका कारण पछिलो वर्षाहरुमा सचिवस्तरमा गर्न सक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाटै हुँदै आएका छन्। पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले सचिवको ...
अब उद्योग बन्द, हडतालजस्ता गतिविधि गर्न नपाइने
२१ असार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । सो विधेयकमा परेका संशोधनमा आजको बैठकमा छलफल भई पारित भएको हो । सो विधेयक अब संसद्को मूल बैठकमा चाँडै पेस हुनेछ । निर्यात प्रवद्र्धनका माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० सञ्चालन गर्ने सो विधेयकले लक्ष्य लिएको ...
चिनियाँ तराजु प्रयोग गरेर ठग्दै सुनचाँदी व्यवसायी
असार २०, जाजरकोट – जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाका सुनचाँदी व्यवसायीबाट उपभोक्ता ठगिँदै आएको खुलेको छ । गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जबाट आएको टोलीले गरेको अनुगमनबाट यस्तो रहस्य खुलेको हो । सुनचाँदी व्यवसायीले नाप तौल गर्ने तराजु मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको हो । गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका सहायक निरीक्षक गुरुप्रसाद पोखरेलको टोलीले सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गर्दा सरकारी मान्यता विपरितका तराजु प्रयोग गरेको पाइएको ह ...
तरकारीको भाउ एक सातामै दोब्बर
१९ असार, काठमाडौं । वर्षा बढेसँगै उपत्यकामा तरकारीको भाउ बढेको छ। एक सातामै केही तरकारीको भाउ सतप्रतिशत वृद्धि भएको छ। तर, सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि कुनै कदम चालेको छैन। एक साताको अवधिमा सबैभन्दा धेरै हरियो खुर्सानीको मूल्यवृद्धि भएको छ। साताअघि ९११ असार० ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको हरियो खुर्सानी शनिबार १ सय ५५ रुपैयाँमा बिक्री गरियो। ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको तिते करेला र घिरौँला शनिबार क्रमश स् ८० र ७० रुपैयाँमा बिक्र ...
अब १५ दिनमा १ अर्ब खर्च
१७ असार, काठमाडौं । सरकारले यही असारभित्र अर्थात अबको १५ दिनमा एक खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्दैछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विकास खर्चका लागि ६७ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहेका बेला सरकारले विकास खर्चको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास खर्चका लागि दुई खर्ब विनियोजन भएपनि अर्थ मन्त्रालयले संशोधित अनुमानमार्फत एक खर्ब ५९ अर्ब खर्च हुन ...
मुक्तिनाथमा पेट्रोलियम पदार्थ र तेताङमा नुन खानी, ४ वर्षभित्र उत्खनन् सम्भव
१६ असार, मुस्ताङ । युरेनियम अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ र नुनको खानी अध्ययन गर्न मुस्ताङ आएको सरकारी टोलीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा वि.सं २०७०र७१ सालमा गरिएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट पत्ता लागेको युरेनियमको अध्ययनमा थप नयाँ तथ्य फेला परेको टोलीले दाबी गरेको छ । ...
कालोधनलार्इ सेतो बनाउन सेयर बजारको प्रयोग
१५ असार, काठमाडौं । ‘एकजना व्यापारीले सेयर किन्न दुई करोड रुपैयाँ ल्याएर छाडिदिएको छ, अफिसमा पैसा राखेको छु,’ केही दिनअघि सेयर ब्रोकरको अनौपचारिक जमघटमा एक ब्रोकरले भने,‘पछि केही असजिलो पर्ने पो हो किरु त्यसकै तनावमा छु।’ त्यस्तो कारोबार गर्दा आफू बचेर गर्नु भन्ने सुझाब आफूले दिएको अर्का ब्रोकरले बताए। लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा नगद ल्याएर ब्रोकरलाई जिम्मा दिने गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । ठूला व्यापारिक घराना, विद ...
चार करोडको सेयरमा १८ करोडको आवेदन
१४ असार, काठमाडौं । दिब्येश्वरी हाइड्रोपावरले निष्काशन गरेको ४ करोड रुपैयाँको साधारण सेयरमा सोमबार एकैदिन १८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको माग आवेदन परेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि आगामी बिहीबारसम्ममा लागि साधारण सेयरको बिक्री खुल्ला गरेको छ । ‘कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित दरका जम्मा ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर खुलाएको हो, पहिलो दिन नै १८ करोड २० लाख रुपैयाँको आवेदन परेको छ,’ सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एस क्यापिटलका प्रमु ...
शून्यमा खातामा वर्षमा १ अर्बका चेक बाउन्स
१४ असार, काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक प्रयोगकर्ता मानबहादुर थापाले खातामा पैसा नभएपनि सुशील ताम्राकारलाई ५ लाखको चेक दिए। ताम्राकारले पटक पटक बैंक धाउँदा पनि चेक साटिएन। त्यस्तै सरिता लामाले तत्कालीन ग्रान्ड बैंकमार्फत नवीनकुमार विष्टका नाममा २ लाखको चेक दिइन्। विष्टले पनि चेकमा उल्लेख ...
मधेस आन्दोलनका पीडितलाई ६ करोड बढी निकासा
१४ असार, काठमाडौं । तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेलाई सरकारले अहिलेसम्म ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उपलब्ध गराइसकेको छ। मधेस आन्दोलन र सीमांकन विवादका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएका झडपमा मारिएका व्यक्तिका आश्रितलाई सहित परिवारसरह १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने र सबै घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम निकासा गरिसकेको छ। अधिकांश आश्रित प ...
ठूला कर्मचारीको अनाधिकृत इन्धनले राज्यकोषमा ६ करोड अतिरिक्त व्ययभार
१३ असार, काठमाडौं । निजामती सेवाका सचिव-सहसचिवले पाउनेभन्दा बढी इन्धन प्रयोग तथा नपाउने दर्जाका कर्मचारीले गाडी प्रयोग गर्दा राज्यकोषमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार परेको छ। सवारीसाधन तथा इन्धन-मर्मतको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी व्ययभार घटाउन सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।सचिवले महिनामा एक सय लिटर इन्धन ९पेट्रोल० सुविधामा पाउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार तिनले औसत एक सय ४० लिटर इन्धन प्रयोग गर्छन्।सचिव ९मुख्यस ...
प्रतिबन्धित कार्बाइडयुक्त भारतीय आँप बजारमा
१३ असार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका बजारमा भारतबाट ल्याइएका आँपमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने कार्बाइडको प्रयोग गरी बिक्री वितरण भइरहेको छ । भारतीय व्यापारीले प्रतिबन्धित कार्बाइड हालेर पकाएको आँप बिक्रीका लागि नेपाली बजारमा पुर्याइ रहँदा समेत कारबाही हुन सकेको छैन् । कार्बाइड हालेर पकाएका आँप भारतीय बजार खटिमा, बनवसा र बरेलीलगायतका ठाउँबाट व्यापारीले ट्रकमा राखेर सोझै महेन्द्रनगर, सुडा, दैजी, झलारी, गुलरिया र कैलालीको अत्तरियासम्म बिक् ...
गौतमबुद्ध विमानस्थललाई निर्माण सामग्री अभाव
१२ असार, भैरहवा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढिरहेको भए पनि निर्माण सामग्रीको अभावले केही समस्या थपेको छ । आयोजनाका लागि अत्यावश्यकपर्ने गिटी तथा ढुङ्गा, माटोको आपूर्तिमा समस्या पैदा भएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेडेट फिडर उपलब्ध नगराउँदा अर्को जटिलता पैदा भएको छ । दैनिक ३०० ट्रक गिटी आवश्यकपर्ने भए पनि स्थानीय प्रशासनले स्वीकृति नदिँदा समस्या भएको आयोजनाका प्रमु ...
१२ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै हिमालयन बैंकलाई १ करोड १५ लाख ६६१ रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा तोकिएको अनुपातमा विपन्न वर्ग कर्जा सीमा अनुसार नभएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई जरिवाना गरेको हो । कारोबार दैनिकमा समाचार छ । ...
जनमत संग्रहको परिणामले पाउण्डको मूल्य २५ वर्षपछिकै सबैभन्दा कम
१० असार, लण्डन । बेलायत इयुबाट अलग हुने जनमत संग्रहको परिणामले वित्तिय क्षेत्रमा तुरन्तै व्यापक प्रभाव पारेको छ । लन्डन स्टक मार्केट अन्तर्गत शेयरको मुल्यमा ८ प्रतिशतको गिरावट आएको छ िसमग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने कुनै घटनाले वित्तिय क्षेत्रमा यस्ता प्रभाव पार्ने गर्छन् । लन्डन स्टक एक्सचेन्जको सूचीमा रहेको १०० ठूला कम्पनी ‘फुटसी’का मूल्यमा ५०० अंकको गिरावट आएको बिबिसीले जनाएको छ िबेलायती बैंकहरु बारक्लिज़ र आरबिएसको सेयर मूल्यमा ३० ...
पन्ध्र करोडमा सिँचाइ आयोजना
१० असार, झापा । दक्षिणी झापाको राजगढमा ६०० हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने गरी फैंदारघाट सिँचाई उपआयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाल सरकारको साना तथा मझौला सिँचाइ योजनाअन्तर्गत रु १५ करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त योजना सञ्चालन गर्न लागिएको सिँचाइ विकास डिभिजन झापाका प्रमुख ईश्वरी तिवारीले जानकारी दिनुभयो । अन्धुवा खोला पानीको मुहान रहेको फैंदारघाट सिँचाइ उपआयोजना राजगढ–८ को पनेरु गाउँ हुँदै पाँच किलोमिटर ‘मेन च्यानल’ र चार किलोमिटर ...
१० असार, काठमाडौं । सामाजिक मिडिया एप्समध्ये एक भाइबरले नेपालमा लगानी गर्ने जनाएको छ । भाइबरका लागि नेपाल एक प्राथमिक बजार भएकाले भविष्यमा थप लगानी गर्न र नवीन अफरहरु ल्याउन इच्छुक रहेको भाइबर साउथ एसियाका क्षेत्रीय प्रमुख अनुभव नैय्यरले बताए । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमा सम्बोधन गर्दै उनले पब्लिक च्याटको सफलतापछि ग्राहकमाझ नयाँ अफर ल्याउने निर्णय गरेको बताए । प्रयोगकर्तालाई आफ्नै भाषामा भावना व्यक्त गर्न सजिलो बनाउन भाइबरले नयाँ र वि ...
आँपले उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो
९ असार, उदयपुर । स्थानीय उत्पादित आँपले उचित मूल्य नपाएको जिल्लाका किसानले गुनासो गर्न थालेका छन् । व्यापारीले बाहिर जिल्लाबाट आँप ल्याएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न थालेका कारण स्थानीयले उत्पादन गरेको आँपले उचित मूल्य पाउन नसकेको त्रियुगा नगरपालिका–८ बगाहाका किसान श्रवणदेव चौधरीले बताउनुभयो । सदरमुकाम गाईघाट बजारमा स्थानीय आँपको मूल्य प्रतिकिलो रु ४० देखि रु ५० सम्म रहेको छ । तर बाहिरबाट आयातित आँप प्रतिकिलो रु २५ देखि रु ३० मा बिक्री भ ...
बेरोजगार युवालाई तालिमसँगै अनुदान
९ असार, लहान । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिरहाले चालु आव २०७२,०७३ मा जिल्लाका १०० भन्दा बढी बेरोजगार युवालाई व्यावसायिक तरकारी खेतीसम्बन्धी तालिमसँगै अनुदान रकम प्रदान गरेको छ । तरकारी खेतीमार्फत जिल्लाका युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जिल्लाभरिका १२० जना युवालाई चार चरणमा व्यावसायिक तालिमसँगै तरकारी खेती गर्न चाहेकालाई अनुदान रकम प्रदान गरेको हो । तालिमसँगै रु ३० हजारका दरले अनुदान रकम समेत प्रदान गरेको जिल्ला कृषि विकास क ...
किसानलाई अलैँचीका बिरुवा वितरण सुरु
९ असार, इलाम । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले किसानलाई अलैँचीका बिरुवा वितरण गर्न थालेको छ । अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल, विभिन्न निजी बगानबाट खरिद गरेर किसानलाई निःशुल्क बिरुवा वितरण गरिएको हो । यस वर्ष कार्यालयले एक लाख ६८ हजार विरुवा वितरण गर्ने जनाएको छ । ती बिरुवा तीन नगरपालिकासहित ४३ गाविसका किसानलाई वितरण गरिने छ । अलैँचीको व्यावसायिक खेती गर्ने किसानले अहिले निजी बगानले उत्पादन गरेको बिरुवासमेत किनेर बगान विस्तार गरिरहेका छन् । ...
९ असार, काठमाडौं। खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक पोषिला खाद्य परिकारका बारेमा प्रचार गर्ने उद्देश्यले यही असार १० र ११ गते भृकुटीमण्डपमा खाद्य मेला गर्ने भएको छ । बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म निःशुल्क अवलोकन गर्न सकिने उक्त मेलामा विभिन्न जातजातिका परम्परागत परिकारसहित १८ स्टल, विभिन्न सङ्घसंस्थाका जानकारीमूलक २४ स्टल तथा विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने गरी ३६ स्टलसहित ७८ स्टल रहनेछन् । मेलाम ...
सेनाका जहाज व्यापारिक उडानमा प्रयोग
८ असार, काठमाडौं । नेपाली सेनाले आफूसँग भएको सैनिक जहाजबाट शुल्क लिएर व्यापारिक चार्टर उडान भर्ने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सैनिक विमान चार्टर उडान विकास समिति गठन आदेश ९२०७३० जारी गरेपछि सेनाले व्यापारिक प्रायोजनमा समेत आफ्नो जहाजबाट चार्टन उडान गर्ने छन्। रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको गठन आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपाली सेनाले विधिवत रूपमा रूपमा व्यापारिक उडान सुरू गर्नेछ।उक्त गठन आदेश राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रक्रियामा छ। रक्षा मन् ...
किसानलाई महंगो मोबाइल र सिम
८ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी साउनदेखि किसानलाई महँगो खालको स्मार्ट मोबाइल फोन सेट र सिम निः शुल्क उपलव्ध गराउने भएको छ। यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। किसानलाई प्रविधि मैत्री बनाउन गत चैतदेखि नै मोबाइल र सिम वितरणको योजना बनाइएको भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण साउनदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ। सरकारले यस्तो मोबाइल र सिमकार्डको सहयोगमा खाद्यान्य, तरकारी , तेलहन, दलहन, मल तथा विषादी, मौसमको अवस्था, खेती, प्रविधि, बजारको अवस्थालगायतक ...
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक फिर्ता
७ असार, काठमाडौ । सरोकार राख्ने निकायको चर्को विरोधपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई पुनःसमितिमै फिर्ता पठाइदिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनर्विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै ...
७ असार, काठमाडौ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सो संस्थाले पेट्रोल, डिजेल लगायत पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरी बजारमा उत्पादनमा सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यले पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि गृहकार्य अगाडि बढाउँदैछ । कर्पोरेसनले पम्प सञ्चालनका लागि हेटौँडा तथा त्यस आसपास क्षेत्रमा सम्भावित अध्ययन गरिरहेकोे छ । करिब पाँच दशक अगाडि स्थापित उक्त संस्थाले विशेष गरी नुनको अभाव हुन नदिन त्यसको मौज्दात राख्दै बज ...
६ असार, काठमाडौं । साताको दोश्रो दिन सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घटेको छ । ५६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोवार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसअघि आइतबार प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमवार तेजावी सुन प्रतितोला ५६ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । यता सोमवार चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । आइतवार प्रतितोला ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमवार ...
आर्थिक अनियमितता रोक्न छलफल
६ असार, सप्तरी । जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तथा बजेटको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा आज यहाँ कार्यालय प्रमुखहरुबीच छलफल भएको छ । कोेष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य, संस्थान तथा स्थानीय निकायअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । एकल खाता कोष प्रणाली सहयोगबारे कोषका प्रमुख नियन्त्रक बज्रमोहन कोइरालाले बेरुजु फछ्र्योट, आर्थिक हिनामिना र ...
झापामा चैते धानको उत्पादन बढ्यो
६ असार, भद्रपुर । झापामा यस वर्ष चैते धानको उत्पादन बढेको छ । जिल्लामा चैते धान हल्दिनाथको उत्पादन परीक्षण गर्दा एक बिगाहामा १२८ मन फलेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मेघनाथ तिमल्सेनाले जानकारी दिनुभयो । अहिले चैते धान अहिले भित्र्याउने बेला भएको छ । किसानले बजार मूल्य राम्रो नपाएपछि घरमा भण्डारण गर्न समस्या भएको छ । उत्पादन गरेको धान घरमा कुहिने समस्याले कृषक चिन्तित बनेका छन् । यस वर्ष जिल्लामा १९ हजार सात सय हेक्टर जग्गामा चैते धान लगाइएको छ भने औ ...
अमेरिकी उद्योगको सात अर्ब लगानी स्वीकृत
५ असार, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३२२ उद्योगले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा रु सात अर्ब ३३ करोड ३० लाख लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकाका सबैभन्दा बढी १४८ उद्योगको लगानी नेपालको सेवा क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी उद्योगको आकर्षण स्वफ्टवयर क्षेत्रमा देखिन्छ । लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका अमेरिकी उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा १४८ उद्योगको रु दुई अर्ब ६९ करोड ७० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत ...
आवाजबाटै अपराधी पहिचान, सुन लुट्ने योजना पर्दाफास
असार ५, काठमाडौं । विशालबजारमा सुन कारोबारी सञ्जय पाण्डेको पाँच किलो सुन लुटेको आरोपमा प्रहरी नायब निरीक्षक विजयप्रताप साह पक्राउ परे पनि उनको संलग्नता पुष्टिको बलियो प्रमाण फेला परेन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीले साहको मोबाइल जाँचका क्रममा त्यसमा अटो कल रेकर्ड एप्स फेला पार्यो । त्यसपछि साहको आवाजको नमुना लिएर सुन लुट्ने योजनाको अडियो क्लिप ‘भ्वाइस इस्पेक्ट्रअ एनालाइजर’ मार्फत परीक्षण गर्दा आवाज साहकै भएको पुष्ट ...
हाम्रा अर्थमन्त्री साच्चै अन्डर एसएलसी हुन् त ?
३ असार - काठमाडौं । यसवर्षदेखि एसएलसीमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु भएको छ र सबैजना पास भएका छन् । यसैक्रममा हाल सरकारमा एमालेबाट मन्त्री बनेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एसएलसी पास नगरेको चर्चा पहिल्यै देखि चल्दै आएको हो । उनी अर्थमन्त्री बन्दासमेत अन्डर एसएलसीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।उनले स्वअध्ययन गरेका भएतापनि आफ्नो शैक्षिक योग्यता बारे संविधानसभामा केही खुलाएका छैनन् । यसले पनि उनको शैक्षिक योग्यता कति भन्ने प्रश्न उब् ...
विद्युत उत्पादन बर्सेनि लक्ष्यभन्दा न्यून
असार ३ - काठमाडौं । सरकारले हेरक वर्ष विद्युत उत्पादन बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएपनि उपलब्धि भने निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाका सम्बन्धमा समेत सरकारी प्रक्षेपण फितलो देखिनुलाई अध्ययन र अनुसन्धानको कमजोरीका रुपमा लिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिइएकोमा जम्मा ३४ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। तल्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण ...
५ रुपैयाँमा १ सय वटा एसएमएस गर्न सकिने
असार १, काठमाडौं - मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नाईट एसएमएस प्याक नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले अब कुनै पनि एनसेलका नम्बरमा हरेक दिन बेलुका १० बजेदेखि विहान ६ बजेसम्म ५ रुपैयाँ मा १ सय एसएमएस पठाउन सक्नेछन् । नाईट एसएमएस प्याक असार १ गतेदेखि लागु भई ३ महिनाको अवधि सम्म संचालनमा रहने एनसेलले जनाएको छ । एनसेलका सबै ग्राहकले *१७११९# डायल गरी प्राप्त जानकारी अनुसार यो सेवा सुरु गर्न ...
सुनको भाउ ४० दिनयताकै उच्च विन्दुमा
असार १ - काठमाडौँ । सुनचाँदीको मूल्य ४० दिनयताकै बुधवार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बुधबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य प्रतितोला ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वैशाख २० गते ५६ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको सुन यो अवधिको बीचमा जेठ १७ गते ५४ हजार रुपैयाँसम्म झरेर कारोबार भएको थियो । यसअघि मंगलबार पनि ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा सुन कारोबार भएको थियो । त्यस्तै चाँदी पनि ४० दिनयताकै महँगो भएको छ । बुधबार चाँदीको मूल्य प्र ...
भारतबाट भित्रिएको गोलभेंडामा घातक कीरा
१ असार, काठमाडौं । खुला सीमाना र कडाइका साथ सीमा क्षेत्रमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन परीक्षण भारतको महाराष्ट्र र कर्नाटकबाट यो कीरा प्रवेश गरेको हुन सक्ने अध्ययनमा खटिएका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिकले जानकारी दिएका छन् । टुटा अवसोल्युटा (टीयूटीए एबीएसयूएलयूटीए) वैज्ञानिक नाम भएको यो कीराले गोलभेंडा खेतीमा विश्वभर विध्वंश मचाइसकेको छ। निकै घातक मानिने यो कीरा यसअघि दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, मोरक्को, टयुनेसिया, फ्रान्स, इटली, अल्जेर ...
नयाँ शक्ति घोषणासभाको खर्च विवरण सार्वजनीक
जेष्ठ ३२, २०७३- बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले पार्टी घोषणासभाको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । लेखा शाखाको नाममा सविना अर्यालद्वारा प्रकाशित खर्च विवरणमा १ करोड ६१ लाख ३७ हजार ३ सय रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख छ । खर्च विवरणमा १ करोड ४ लाख १ हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको, ५० लाख ८ हजार २ सय २७ रुपैयाँ वचत भएको उल्लेख छ । बैंक मौज्दात भने ७ लाख २७ हजार ९ सय ९३ रहेको छ । आक्रामक प्रचार प्रसार भएपछि नयाँ शक्तिको खर्चलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश ...
दश वर्षभित्र सबै युवा जनशक्तिलाई रोजगारी
जेठ ३२ - भक्तपुर । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले अबको कार्यभार आर्थिक समृद्धि भएकाले सबै राजनीतिक दलले एक भएर अगाडि बढे आर्थिक रुपान्तरण सम्भव रहेको बताउनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले देशको प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरी सबै युवालाई रोजगारी दिइने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दश वर्षभित्र सबै युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर युवा जनशक्ति बिदेसिन रोक्दै यहाँका युवाले बनाएका सामान ...
विकास योजनालाई विपक्षीले हावादारी भनेः प्रधानमन्त्री
जेठ २८ - झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासमा कसैले राजनीति गर्न नहुने बताएका छन् । विकास सबैको साझा मुद्दा भएकाले यसमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न जरुरी भएको उनको भनार्इ थियो । आज बिहान दमक–६ स्थित दापगा गाछीमा निर्माण हुन लागेको दमक भ्यूटावरको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, समृद्धितर्फ देशलाई रुपान्तरण गर्न सबै जुट्न सके परिवर्तन सम्भव हुने बताए । मुलुकको विकासमा वर्तमान सरकारले उल्लेखनीय कामको सुरुवात गर ...
साउनदेखि काठमाण्डौं उपत्यकामा फोहोरबाट बिजुली
जेठ २८ - काठमाडौं । उर्जा चर्चा र चासोको विषय हो । जलविद्युतको धनी देश लोडसेडिङले आक्रान्त भइरहेकै कारण उर्जा सधै चासो र चर्चाको विषय बनेको हो । केहि महिना अघिदेखि फाहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरा आएसँगै जनमानसमा यसप्रति चासो चुलिएको छ । यहि चासोलाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौं महानगरपालिकाले श्रावण महिनामा १४ किलोवाट बिजुली फोहोरबाट उत्पादन गर्ने लगभग पक्का भएको छ । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने कुरा खासै नौलो होइन । विभिन्न देशले फोहोरको सदुपयोग गरि ब ...
एउटा जिल्लामामात्र वार्षिक १३ करोडको पान बिक्री
सप्तरी, जेठ २८ । सप्तरीका २८ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनी छन् । कैयौं खुला आकाशमुनी बस्न बाध्य छन् । कतिपयको चुनो दुई–तीन छाकसम्म बल्दैन । तर यही जिल्लाका बासिन्दाले पान खानका लागि वार्षिक १३ करोड रुपैयाँ खर्चन्छन् । राजविराजमा बन्धुलाल दास र रोहितचन्द्र दास पानका थोक विक्रेता हुन् । बिहानैदेखि राजविराज हटियाका उनीहरुको पसलमा पात किन्न पानपसलेको घुइँचो हुन्छ । २० वर्षभन्दा पहिलेदेखि पातको थोक व्यापार गर्ने बन्धुलाल दासका अनुसार जिल्ला ...
कर नबुझाउनेमाथी कारबाही सुरु
जेठ २७ - लहान । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आव २०७२÷७३ मा ३५ जना करदातालाई कारबाही गरेको छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाएका मूल्य अभिवृद्धि करतर्फका २८, आयकरतर्फका सात जनालाई कारबाही गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सन्तबहादुर ढकालले जानकारी दिनुभयो । कर नतिर्ने मूल्य अभिवृद्धि करतर्फका २८ जना करदाताको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ भने आयकरतर्फका सात जना करदाताको जग्गा रोक्का गरिएको छ । यस्तै चालु आवमा राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आएको छ ...
जग्गामा महिलाको स्वामित्व अधीक
जेठ २७ - इलाम। महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्वमा सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेपछि जग्गा जमिन माथि उनीहरुको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । चालु आव २०७२/०७३ को वैशाख मसान्तसम्ममा यहाँ एक हजार ७४८ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ । अघिल्लो आव २०७१/०७२ मा यही अवधिमा यो सङ्ख्या एक हजार ७८० मात्र थियो । सरकारले महिला, दलित, सहिद परिवार, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा, उद्योगधन्दा, हाइड्रोपावर, चिया खेतीलगायतका आठ शीर्षकमा जग्गाको स्वामित्व लिँदा जग्गा प ...
२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १२ मन्त्रालयमार्फत जिल्लापरिषद्भन्दा माथिल्लो तहका आयोजनाका लागि ७५ जिल्लामा ९५ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । आगामी आव ०७३/७४ मा विकास निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत यो रकम खर्च गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय तहबाट स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो । यो रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने खर्च हुँदैन ...
भारतीयको आँखामा नेपालको ऊर्जा
जेठ २६ - काठमाडौं । मुलुकमा ऊर्जाको चरम सङ्कट बढेका बेला छिमेकी भारतका १९ उद्योगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र रु ४५ अर्ब ८० करोड ३० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । विश्वमा उदाउँदो महाशक्तिका रुपमा परिचित भारतका ६३१ उद्योगले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा रु ८० अर्ब ६७ करोड १० लाखभन्दा बढी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । भारतीय उद्योगको सबैभन्दा बढी लगानी नेपालको ऊर्जामूलक क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । सरकारले ‘विदेशी ल ...
तराईको घरजग्गा कारोबारमा भारी गिरावट
जेठ २६ - काठमाडौं । तराईका जिल्लामा घरजग्गा तथा रियल इस्टेट कारोबारमा शतप्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ। मधेस आन्दोलनबाट बढी प्रभावित ८ वटा जिल्लाको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा घररभवन स्थायी नक्सा पास शून्यबराबर भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैँकले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को पहिलो ६ महिनाको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गरी जारी गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समग्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्यामा २८ प्रतिशतले कमी आएको छ। गत वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा सो संख्यामा १ द ...
‘बाफिया कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका अहम’
२५ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नयाँ ऐनले सञ्चालक तथा संस्थापकलाई बलियो बनाए पनि नियमनकारी निकायले प्रभावकारी नियमन गरेको खण्डमा समस्या नआउने सांसद दीपक कुइँकेलले बताएका छन् । संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिको संयोजकसमेत रहेका कुइँकेलले नयाँ ऐन आउनु नै सकारात्मक रहेको बताए । सबै क्षेत्रको सहमतिमा बाफिया अर्थ समितिले पारित गरेको बताउँदै उनले भने, “उपसमितिका अधिकांश सांसद बैंकिङ व्यवसायमा संलग्न छन् । बहुमतीय प्रणालीम ...
७ महिनामा भ्रमण र उपचारमा राज्यकोषको १० करोड खर्च
जेठ २४ - काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च र नेता कार्यकर्ताको उपचारमा राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीदेखि मन्त्री, सांसद, प्रशासक, राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तालगायतले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण र उपचार खर्चबापत ८ महिनामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। भारत र चीनको राजकीय भ्रमणमा मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेता कार्यकर्ताल रा ...
कर्मचारीको तलब बढ्दैमा मूल्यवृद्धि हुँदैन
जेठ २३ - काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरेसँगै ‘सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा बजारमा महंगी बढ्छ’भन्ने चर्चा अहिले चलिरहेको छ। यस्तो चर्चा यसअघि पनि कर्मचारीको तलब बढ्दा हुने गर्थ्यो। तर कर्मचारीको तलब बढेपनि त्यस अनुपातमा महंगी नबढ्ने तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि भए ...
बजेटमाथि पक्ष र विपक्षका सांसदले दलगत धारणा राख्ने क्रम जारी
जेठ २१ - काठमाडौं । सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी भएको र प्रतिपक्षी सांसदले बजेट हचुवामा वितरणमुखी भएको धारण राख्नुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा पनि आव २०७३/७४को राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल जारी रहँदा सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदले दलगत धारणा राख्नुभयो । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि बजेटले गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको तर स्थानीय, प्रदेश तथ ...
बजेटले वित्तीय अराजकता ल्याउँछ– डा महत
जेठ १९ - काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेटले वित्तीय अराजकता ल्याउने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको बजेटमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै रहेकाले त्यसलाई सन्तुलन कायम गर्न नसकेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या आउने धारणा राख्नु भयो । नेता डा महतले बजेटमा एक वर्षको खर्च तथा आम्दानीको योजना र विवरण हुनुपर्नेमा दीर्घकालस ...
नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय लगानीको केन्द्र बनाउने जेठ १८ - काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाले उर्जा विकास अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा सुरु भएको उर्जा लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय लगानीको केन्द्र बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालमा गरेको लगानी सुरक्षित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्क भएर नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभयो । सम ...
आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु
जेठ १८ - काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा बजेट चुहावटका सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने आज सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सदनमा आव ०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ‘वित्तीय ...
जनमुखी बजेट जेठ १७ - नेपालगन्ज । सरकारले आगामी अर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सबै पक्षलाई समेट्न सकेको प्रतिक्रिया यहाँ व्यक्त गरिएको छ । “बजेट अलि बढी महत्वाकाङ्क्षी भए पनि महत्वाकाङ्क्षाबाट मात्र उद्देश्य प्राप्ति हुन सक्ने र विकास निर्माणको कामलाई थप प्रगतिपथमा लान सकिन्छ,” नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो । बजेटले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, गाउँको विकास, पर्यटनको विकास, ठूला ...
होला त तीन वर्षमा सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा ?
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/ ०७४ को बजेटमार्फत आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । कम विकसित मुलुुकका नागरिकहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्नेे विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले बीमा योजना अघि सारेको हो । दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसहित ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना’ चरणवद्ध रुपमा सुरु गरिँदैछ । आगामी आर्थिक वर् ...
मेलम्चीदेखि मेट्रो रेलसम्मः कति भयो काम ?
१५ जेठ, काठमाडौं । भौतिक विकासको दृष्टिले देशको मुहार फेर्न सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति कछुवाको भन्दा ढीलो देखिएको छ । जनतामा आधारभूत सेवा विस्तार गर्ने विशेष उद्देश्यसहित उच्च प्राथमिकता दिएर घोषणा गरिएका यस्ता अधिकांश आयोजनाहरुको प्रगति सुस्त रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिलेसम्म २१ वटा आयोजना घोषणा भएकामा एउटा पनि आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । लक्ष्य हासिल गर्न सकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र राजधानी ...
आज जम्बो बजेट आउने, माओवादी र कर्मचारी खुशी पार्ने तयारी
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमासमेत नाघेर जम्बो बजेट ल्याउँदैछ । बजेटको आकार १० खर्ब भन्दा माथिको हुनेछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अपरान्ह ४ बजे बजेट वक्तव्य दिने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटको आकार १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुनेछ । सरकारले ल्याउन लागेको यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ खर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८ खर्ब ९ अर्बको ...
तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद, वार्षिक तीन लाख आम्दानी
१५ जेठ, काठमाडौं । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालीन सभासद पट्टु थारु निराश भएर काठमाडौंबाट घर फर्किए । संविधानसभा विघटनपछि फुर्सदिला बनेका उको रोजाइ कृषि बनेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । बाँके, बैजापुर १ नवलपुरका थारुले तीन वर्षअघि करिव चार कट्ठामा तरकारी खेती सुरु गरे । आम्दानी राम्रो भएपछि एक वर्षपछि क्षेत्रफल बढाएर ८ कट्ठामा खेती गर्न थाले । अहिले उनी व्यवसायिक तरकारी कृषक बनेका छन् । थारुले बाह्रै महिना तरकारुी फलाउँ ...
इन्धनमा जताततै ठगी
१५ जेठ, काठमाडौं । इन्धन बोक्ने ट्यांकरमा कति तेल अटाउँछ भनेर गरिने मापन (क्यालिब्रेसन)बाटै ठगी धन्दा सुरु हुन्छ । सरकारका तर्फबाट आयल निगम प्रतिनिधि र ढुवानी व्यवसायीका तर्फबाट ट्यांकरचालकको उपस्थितिमा भारत सरकारबाट इजाजत प्राप्त निजी कम्पनीले ट्यांकरको क्यालिब्रेसन गर्ने गरेको छ । अहिले डिप रडका आधारमा ट्यांकरमा कति तेल अटाउँछ भनेर क्यालिब्रेसन हुन्छ । जस्तो–एउटा च्याम्बरमा १३४ सेन्टिमिटरबराबर उचाइमा ४ हजार लिटर तेल हुन्छ । तर, मिल ...
बजेटप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा व्यापक
जेठ १४ - काठमाडौँ । सरकारले नेपालको संविधानअनुसार शनिवार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । एक वर्षको सिंगो अर्थतन्त्र, आर्थिक गतिविधि, विकास आयोजना र अन्य सामाजिक सवालबारे बोल्ने बजेटका विषयमा बहस व्यापक बनेको छ यतिखेर जुन स्वाभाविक हो । बजेट जनताको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने खालको बन्नु पर्ने, उत्पादन बढाउन सहयोगी वन्नुपर्ने, ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक ...
सरकारी डाटा सुटुक्क भारत पुराउँदै एभेरेस्ट
काठमाडौं – एभेरेष्ट बैंक लिमिटेडले सरकारी गोप्य सूचना भारतीय गुप्तचर संस्थालाई चुहाउने गरेको आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छपिएको छ । नेपालका चर्चित बैंकहरु मध्येको एक रहेको एभेरेस्ट बैंकको काठमाडौँ लामिम्पाटमा मुख्य कार्यालय रहेको भनेयो बैंकमा देशका सानादेखि ठूला व्यापारीसम्मले कारोबार गर्ने गरेका छन् । व्यापारी मात्र होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखिका सरकारी खाता सोही बैंकमार्फत आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका छन् । सिंहदर ...
पर्यटक अढाई लाख घटे, तर आम्दानी दुई अर्ब बढ्यो
१३ जेठ, काठमाडौं । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सन् २०१५ मा विदेशी पर्यटकको आगमन घट्यो । तर, पर्यटकबाट हुने कुल आम्दानी भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ । नेपाल बस्ने पर्यटकले औसत खर्च बेसी गर्दा कुल आम्दानी बढेको हो । विभिन्न मुलुकबाट सन् २०१५ मा पाँच लाख ३८ हजार ९ सय ७० जना पर्यटक नेपाल भित्रिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै साढे दुई लाखले कम हो । सोही अवधिमा पर्यटकबाट ४८ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यो आम्दानी अघिल्लो ...
जनसंख्याकै हाराहारीमा मोबाइल फोन खपत
१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालको कुल जनसंख्याकै हाराहारीमा मोबाइल फोन देशभित्र खपत भइरहेको पाइएको छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार २ करोड ७५ लाख १६ हजार मोबाइल फोन प्रयोगमा छन् । ल्याण्डलाइन फोन समेत जोड्दा यो संख्या २ करोड ९२ लाख पुग्छ । मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा मोबाइल सेवा पुगेको छ । करिव ९० प्रतिशत भू-भाग मोबाइल नेटवर्कले कभर गरिसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी छ । यस्तै भ्वाइस सेवामा पिएसटिएनका ग्राहक ८ लाख ४६ हजार ९४०, लिमिटेड मोबिलिटीका ८ ...
धुर्मुस सुन्तलीको पुनर्निर्माण अभियानमा सिटी एक्सप्रेसको साढे पन्ध्र लाखको सहयोग
१३ जेठ, काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि १५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रम गरी सिटी एक्सप्रेसका प्रवन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले सिताराम कट्टेल "धुर्मुस" र कुञ्जना घिमिरे "सुन्तली"लाई सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । टण्डनले धुर्मुस/सुन्तलीको सामाजिक कामको प्रशंसा गर्दै सहयोग उपलब्ध गराउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भूकम्पपछिको पुन ...
सांसदलाई बजेटको रन्कोः कसले के माग्दैछन् ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहँदा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदहरुको बेचैनी बढेको छ । आफूले मागेका योजनाहरु रातो किताबमा पर्ने हो कि होइन भनेर उनीहरु व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न विकास योजनाका लागि मतदाताले दिने दबाव झेलिहरेका सांसदहरु केन्द्रका विभिन्न निकायमा धाउने क्रम जारी छ । यद्यपि, अब धाएर खासै केही हुनेवाला छैन, किनकी बजेटको म ...
शेयर बजारमा अस्वभाविक छलाङ !
काठमाडौँ, ११ जेठ - नेपाली शेयर बजारले पछिल्लो तीन दिनदेखि लगातार छलाङ मारिरहेको छ । कुनै समय २ सय ९२ अकमा रहेको नेप्से परिसुचक उकालो लाग्दा लाग्दै पछिल्लो पटक १५ सय ५५ अकले बढेको छ । मुलकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको वेला शेयर कारोवार बढ्नुलाई बिश्लेषकहरु अस्वाभाविक मान्छन । नेपाल शेयर कारोवारमा एकै दिन १ अर्व ६६ करोड भन्दा बढीको कारोवार हुनु पछाडीको कारणहरु खुल्न सकेको छैनन् । शेयर बजारमा एकै दिनमा एक अर्व ६६ करोड रुपैया भन्दा बढीको कारोवार भ ...
११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले साउदी अरेबियासँग नेपाली कामदार लैजानेबारे छुट्टै समझदारी (एमओयु) गर्ने भएको छ । यसको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेेर सुझावका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । परराष्ट्रले आवश्यक सुझाव दिनासाथ नेपाल र साउदीको श्रममन्त्री तहमा एमओयुमा हस्ताक्षर हुनेछ । मस्यौदामा नेपाली कामदारले साउदीमा न्युनतम ११ सय रियाल तलव पाउनैपर्ने उल्लेख छ । तर, साउदी सरकारले बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने विषय भने समावेश छैन । ...
नेप्से परिसुचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा
जेठ १० - काठमाडौं । सोमवार नेप्से एकैपटक १४ दशमलव ६८ अंकले बढेको छ । पछिल्लो केही दिन यता नेपाली शेयर बजारले एकपछि अर्को कीर्तिमान कायम गर्दै आएको छ । सोमवार नेप्से परिसुचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आइतवार बनाएको नयाँ कीर्तिमानी रेकर्डलाई तोड्दै सोमवार नेप्से १ हजार ५ सय २४ अंकमा पुगेको हो । सोमवार कारोवारमा आएका अधिकांश समूहको परिसुचक बढ्दा समग्र सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । सोमवार बीमा समूहको परिसुचक सबैभन्दा बढी २ सय ६ ...
धौलागिरिका ४२ सहकारी खारेज
जेठ १० - पर्वत । धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्लामा सञ्चालित ४२ वटा सहकारी खारेजीको सूचीमा परेका छन् । कार्यालयमा दर्ता भएका तर विभिन्न कारणले निस्क्रिय देखिएका सहकारी खारेजीको सूचीमा परेका हुन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय बागलुङका अनुसार धौलागिरि अञ्चलका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका ४२ वटा सहकारी सङ्घ संस्थालाई निस्क्रिय रहेको भन्दै खारेजीको सूचीमा राखिएको जानकारी दिइएको छ । खारेजीको सूचीमा पर्नेमा बागलुङका १५, पर्वतका २०, म्याग्दीका चार र मुस्ता ...
‘नेता कार्यकर्ता पोस्ने बजेट नल्याऊ’
काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पूर्वका उद्योगीले जोड दिएका छन् । विगतका बजेट राजनीतिमुखी हुँदा मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएकाले अब बजेटको ध्यान आर्थिक विकासमा हुनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका प्रथम उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय बताउँछन् । “विगतको बजेट नेता र कार्यकर्तामुखी भएकै कारण मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सकेन,” ...
अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य बढ्यो
जेठ ९ - काठमाडौं । आइतबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १ सय ८ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण गरेको छ । अमेरिकी डलरको खरीददर मूल्य १ सय ७ रुपैयाँ ६८ पैसा कायम गरिएको छ । यो मूल्य साँढे २ महिनायताकै महँगो हो । गत बिहीबार डलरको बिक्रीदर १ सय ७ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेकोमा शुक्रबार १ सय ८ रुपैयाँ ४ पैसा पुगेको थियो । अमेरिकी कृषि अर्थतन्त्रमा सुधारको लक्षण अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले हालको ब्याजदर ० दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाउने संकेत दि ...
बजेट भनेको जसलाई जति मन लाग्यो त्यति ल्याउने होइन : महत
अहिलेको अवस्थामा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार नै बढी भएको भन्दै त्यो भन्दा बढी आकारको बजेट नल्याउन सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्री महतको सुझाव छ। डा महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । बजेटको आकार बढाएर अर्थतन्त्रले धान्ने नसक्ने बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘बजेट भनेको जसलाई जति मन लाग्यो त्यतिको ल्याउने होइन,’ महतले भने( ‘कतिसम्म क्षमताले धान्छ, त्यतिमात्रै ल्याउनुपर्छ ।’ सरकारले भ ...
निगमले साढे तीन अर्ब ऋण घटायो
'सरकारसँग लिएको ऋण घटाउँदै गएका छौं,' प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'अब चार अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी छ।'अर्थमन्त्रालयले तेल आपूर्तिका लागि लिएको ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि निगमले ऋण तिर्दै आएको हो । निगमका कर्मचारीले ऋण नतिरी करिब ९० करोड बोनस खान लागे पछि चौतर्फी बिरोध पछि बोनस खान रोकेको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेको निगमले भारतको नाकाबन्दीको समयमा मूल्य समायोजन नगरी नाफा कमाएर धमाधम ऋण तिर्दै आएको छ । ...
वाणिज्यमन्त्रीसँग करिब दुई करोड नगद
जेठ ४ - १०५ तोला सुन, चाँदी १ हजार ५सय तोला र ४ थान हिराका हार। वाणिज्यमन्त्री जयन्त चन्दका श्रीमती र छोरीका नाममा काठमाडौं र ललितपुरमा गरी दुई रोपनी चार आना जग्गा रहेको छ। उनीसँग सवारी साधनका नाममा एक मारुती सुजुकी कार रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा जनाइएको छ । त्यस्तै सुन १०५ तोला, चाँदी एक हजार ५०० तोला र ४ थान हिराका साथै सिद्धार्थ, एभरेस्ट र हिमालयन बैँकमा एक करोड ९५ लाख ४९ हजार ३०५ मौज्दात त ...
सुन आयात शून्य
काठमाडौं–चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना सुन आयात शुन्य भएको छ । बजारमा दैनिक कारोबार भइरहे पनि वैधानिक माध्यमबाट सुन नभित्रिनुलाई रहस्यमय मानिएको छ । आयातकर्ता र ब्यवसायीले पहिलकै मौज्दात सुन विक्री भइरहेको दाबी गरेपनि पत्याउने आधार छैन् । फागुन १ देखि १५ सम्म १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको सुन आयात भएको तथ्थांक छ। त्यसपछि वैशाख १२ गतेमात्र सुन आयात भएको छ । त्यसपछि वशाख १२ गतेमात्र सुन आयात भएको छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ । ...
४५० ग्यास बोक्ने बुलेट किनिँदै
२ जेठ, काठमाडौं । ग्यास आयातमा प्रयोग हुने बुलेट खरिद गर्न उद्योगीहरुले सरकारसँग भन्सार छुट माग गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले उद्योगहरुलाई आफ्नै बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको छ । ५५ वटा उद्योगका लागि ४ सय ५० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढेको हो । आपूर्ति मन्त्रालय पनि बुलेट किन्न सकारात्मक भएपछि उद्योगीहरु छुट माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका हुन् । दुई महिनाअघि नै उद्योगीहरुले अर्थमा भन्सार छुटको लागि प्रस्ताव गरेपनि स्वीकृति भने पाएका छ ...
‘वनप्लस’ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा
एशियाली बजारमा छोटो अवधिमै लोकप्रिय बनेको वनप्लस स्मार्टफोन नेपाली बजारमा बिक्रि सुरु भएको छ । एन्ड्रोइडमा आधारित अक्सिजन अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने वनप्लस चिनियाँ स्टार्टअप कम्पनी हो जसले दुई बर्षको अबधिमा परम्परागत स्मार्टफोन कम्पनीहरुलाई चुनौती दिएको छ । आइहव नेपाल प्रा.लि वनप्लसको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हो । आइहवले पहिलो चरणमा यसै सातादेखि ‘वानप्लस एक्स’ मोडल नेपाली बजारमा बिक्रि सुरु गरेको छ । ‘प्रिमियम स्मार्टफोनका लाग ...
यी कारणले बजेट खर्च हुन सकेन
२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धान अनुसार नेपालमा सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ३ रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । किनभने सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्याको दलदलमा भासि ...
दुग्ध विकास संस्थानका प्रबन्धक साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
२८ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले दुग्ध विकास संस्थानका प्रबन्धक डा। शत्रुघ्नप्रसाद साहविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले साह र उनकी श्रीमती सुशीलाले दुई करोड ३८ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाच ...
नेपालको आर्थिक वृद्धि २.२ प्रतिशत : स्क्याप
२१ वैशाख, काठमाडौं । यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत हुने संयुक्त राष्ट्र संघको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक (स्क्याप) को सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछि देखिएको सीमा अवरोधपछि पनि पुनर्निर्माणका काम केही मात्रामा अघि बढेकाले आशातीत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण स्क्यापले गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने २ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताउँदै आएको छ । यसअघि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ०.५ प्र ...
हिमालय एयरलाइन्सको दोस्रो व्यवसायिक उडान श्रीलंकामा पनि
१४ वैशाख, काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले दोस्रो व्यवसायीक उडान पनि श्रीलंकामा गर्ने भएको छ । श्रीलंकामा पहिलो व्यवसायीक उडान उत्साहप्रद भएपछि दोस्रो पटक पनि उडान गर्न लागेको हो । हिमालयले वैशाख २१ गते श्रीलंकाको कोलोम्बोमा चार्टर्ड उडान गर्न लागेको जनाएको छ । हिमालयको एयरबस ३२०-२१४ विमान काठमाडौंबाट साढे ८ बजे कोलम्बोतर्फ उड्ने छ । कोलम्बोबाट एयरबस वैशाख २५ गते साँझ ४ बजे काठमाडौंमा अवतरण गर्ने तालिका छ । यसअघि हिमालयले च ...
याहु किन्न १० कम्पनीहरु तयार, चाडै बिक्रि हुदै
काठमाडौँ - इन्टरनेट जाएन्ट याहुले आफुलाई बेच्दैछ । आफ्नो मुख्य इन्टरनेट व्यवसाय बिक्रि गर्न लागेको याहु खरीद गर्नका लागि १० भन्दा बढि कम्पनीले रुची देखाएका छन् । कम्पनी खरीद गर्नका लागि १० भन्दा बढि मनसायपत्र याहुले प्राप्त गरेको छ । ती खरीद प्रस्ताव मध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य ८ अर्ब डलरवाला प्रस्ताव रहेको छ । याहुले यी १० बाट अन्तिम सात वटा मनसायपत्र छनोट गर्नेछ अबको हप्ता भित्रैमा । तर याहु खरीद गर्ने अन्तिम क्रेताको घोषणा गर्न भने अझै एक ...
मोक्ष आयुर्बेदको औपचारिक सेवा सुरु काठमाडौँ, १ बैशाख — ललितपुर बखुलण्डोलमा रहेको मोक्ष आयुर्बेद एण्ड पञ्चकर्म सेन्टरले बैशाख १ गते बुधबाबाट औपचारिक रुपमा सेवा सुरुवात गरेको छ । नव वर्ष २०७३ को अवसर पारेर आयोजित एक कार्यक्रमका बिच आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक टेकराज पन्थिले मोक्ष आयुर्वेदको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका महानिर्देशक पन्थीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयुर्वेदको फाइदा र महत्व बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो । सँगै उहाँले ...
यसरी आउँदैछ आईफोन ७, जान्नुहोस् ( भिडियो सहित )
काठमाडौ - बहुचर्चित अमेरिकन मोबाइल कम्पनी एप्पलले ल्याउन लागेको नयाँ आइफोन ७ मा प्यारासुट सिस्टम आउने दाबी गरिएको छ। यसअघि आइफोन ७ मा लामो दुरीको वायरलेस चार्जिङ सिष्टम कम हुने दाबी गरिए पनि यूट्यूब च्‍यानल सोनिटड्‍याकले प्यारासुट सिस्टम आउने दाबी गरेको हो। यो प्यारासुट सिस्टमको मद्दतले आइफोन कुनै ठाउँबाट खसे पनि यसको डिस्प्ले ड्‍यामेज नहुने तथा पछाडीबाट नै जमिनमा खस्ने दाबी गरिएको छ। यसको लागि यो आइ ...
रुकुम, २८ माघ । पछिल्लो समय मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि जिल्लाको गरायलाका किसान कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । कुरिलोको माग बढेको र ग्राहक घर दैलोमै पुग्न थालेपछि किसान यस खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । जङ्गलमा खेर गइरहेको कुरिलो संकलन गरी गरायला– १ भलाचौरका लालबहादुर ओली, बालाराम पुन र तिलक ओलीले खेत बारीमै कुरिलो लगाई आम्दानी लिन सुरु गरेका छन् । अन्न बालीभन्दा कुरिलोले मनग्य आम्दानी दिन थालेपछि उनीहरु कुरिलो खेती गर्न हाँैसिएका हुन् । अह ...
प्राइम बैंक एशिया प्रसान्त क्षेत्र कै उत्कृट
१९ माघ, काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैक यस वर्षको एशिया प्रसान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको रुपमा छनौट भएको छ । बैंकलाई बेलायतको अक्सफोर्ड अन्तरगतको यूरोप विजनेश एसेम्बली (इबीए)ले २०१६ को प्रेस्टिजिएस इन्टरनेशनल अवार्ड प्रदान गरेको हो ।अक्सफोर्ड अन्तरगत सन् २००० मा स्थापना भएको यूरोप विजनेश एसेम्ब्लीले समाजलाई आर्थिक, बैज्ञानिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउने संस्थालाई उक्त अवार्ड दिँदै आएको छ । । विशेषगरी, इबीए ...
यी हुन् सस्तो स्मार्टफोनका फाइदै फाइदा
भनिन्छ, महंगो रुन्छ एक पटक, सस्तो रुन्छ पटक पटक । यो उखान सुन्दा त यस्तो लाग्छ सबै चिज महंगो नै किनौँ । अझ स्मार्टफोनको मामिलामा त सस्तोमा हातै नहालौँ । तर यथार्थ के हो भने कम्तिमा स्मार्टफोनको सन्दर्भमा यो उखान लागु नै हुँदैन । सस्तो एन्ड्रोइड फोनको स्क्रिन आइफोन तथा सामसुंग एस सिक्स जस्तो उत्कृष्ट नदेखिन सक्छ । तर दुखी नहुनुस्, सस्तो मूल्यका स्मार्टफोनका पनि कैयन् फाइदा हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो फाइदा त यसलाई कम मूल्य पर्छ । सस्तो स्मार्टफोन जसक ...
सरकारले एक महिनाभित्र हेलिकप्टरको अधिकतम भाडा तोक्ने ४ माघ, काठमाडौं । सरकारले हेलिप्टरको अधिकतम भाडादर निर्धारण गर्ने भएको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । एक महिनाभित्र हेलिकप्टरको अधिकतम भाडादर तोक्ने पर्यटन सचिव दिनेश कुमार थपलियाले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘कार्यदल बनाएर हेलिकप्टर अपरेटर लगायतसँग छलफल भइरहेको छ, एक महिनाभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने भनेको छ’ उनले भने- ‘प्रतिवेदन आउनासाथ अधिकतम भाडा तोक्छौं ।’ हेलिकप्टर से ...
डिशहोमको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सिस्टम अपग्रेड हुँदै, रिचार्ज र क्रेडिट सेवा अवरुद्ध हुने काठमाडौं । डिसहोमले आफ्नो सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन सिस्टम अपग्रेड गर्ने भएको छ । कम्पनीले सिस्टम अपग्रेड हुँदा केही सेवा अवरुद्ध हुने बताउँदै सोमबारदेखि शुक्रवारसम्म अपग्रेडको काम सकिने जानकारी दिएको छ ।कम्पनीका अनुसार यो अवधिमा क्रेडिट सेवा र रिचार्ज सेवा अवरुद्ध हुनेछन् ।‘क्रेडिट सेवा सोमब ...
निर्देशन पालना नगरेपछि धितोपत्र बोर्डले ५ ब्रोकर कम्पनीलाई गर्यो कारवाही, कारोबार गर्नै राेक काठमाडौं । निर्देशन पालना नगरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाँच वटा ब्रोकर कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । गत मंसिर २० गते दिएको निर्देशन ताकेता गर्दा पनि ब्रोकर कम्पनीले पालना नगरेपछि कारोबार नै रोक्न बोर्डले निर्देशन दिएको हो । बोर्डले अक्सफोर्ड सेक्युरिटिज् प्रालि, साउथ एशियन बुल्स प्रालि, ...
हुन्डाईको नयाँ शोरुम इटहरीमा,लक्ष्मीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म शाेरुम खाेल्दै काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले इटहरीमा नयाँ शोरुम संचालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले इटहरीमा रोयल अटो वल्र्ड प्रालिलाई शोरुम संचालनमा ल्याएको हो ।शोरुमको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी अञ्चल प्रतिनिधि रोहितप्रसाद प्रसाई र लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका सहायक प्रवन्धक अनिश लामिछानेले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।यो शोरुमबाट गाडी बिक्री र बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्ल ...
डलरसँग कमजोर भएपनि धेरै देशको मुद्राभन्दा बलियो छ नेपाली रुपैयाँ, कुन देशसँग कति महँगो
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ फेरि तीन बर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि एक डलरको मूल्य १०८.५४ रुपैयाँ तोकेको छ ।डलर बलियो हुँदा नेपालीलाई फाइदाभन्दा वढी घाटै छ । यद्यपी यस्ता कयौं देश छन्, जहाँको मुद्राभन्दा नेपाली रुपैयाँ धेरै बलियो छ । यदि तपाई ती देश घुम्न जाँदै ह ...
सेयर बजार सूचक अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दूमा
३ माघ, काठमाडौं । नेपालको सेयरबजार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यसअघि ०७२ भदौ २९ गतेको १२०५ अंकको रेकर्ड तोड्दै आइतबार नेप्से सूचक १२१२ अंक टेकेको छ । सबै सूचिकृत कम्पनीहरुको अभौतिक सेयरको कारोबार सुरु भएका दिन नेप्सेले नयाँ रेकर्ड स्थथापित गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १ गतेदेखि अभौतिक सेयरको मात्रै कारोबार हुने व्यवस्था गरेको थियो । १ र २ गते विदा परेकाले आइतबारदेखि मात्रै पूर्णरुपमा अभौतिक सेयरको कारोबार सुरु भएको हो । अभौतिक सेय ...
एमालेद्धारा स्वास्थ्यमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, ५ माघ । नेकपा (एमाले) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो दलका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख सुचित ...
उपचार गरेर घर फर्कने क्रममा श्रीमानको ज्यान गएपछि गर्भवती श्रीमतीसहित तीन बच्चाको बिचल्ली
उदयपुर, माघ ५ – उपचार गरेर घर फर्कने क्रममा श्रीमानको ज्यान गएपछि गर्भवती श्रीमतीसहित तीन बच्चाको बिचल्ली भएको छ । भारतमा उपचार गरी घर फर्क ...
जानकी आँखा अस्पतालमा भारतीयको घुइँचो
जाडोमा स्वस्थ रहन यी ११ उपाय व्यवहारमा उतार्नुहोस्
एलो फिभरुका बिरामीको मृत्युपछि सङ्कटकाल घोषणा
काठमाडौं, माघ ६ । माघ १ गते शुन्यमा झरेको राजधानीको तापक्रम पछिल्ला दिनमा निरन्तर बढिरहेको छ। १ गते यो वर्षकै सबैभन्दा कम ०।४ डिग्री पुगेको राजधानीको न्युनतम तापक्रम बुधबार १।६ डिग ...
हेमराज जोशी|| ५ माघ, काठमाडौ । सामान्य चिनारी: ग्वाल्लेक बैतडी सदरमुकामबाट १५ कि मि दक्षिण-पुर्बमा पर्ने प्राकृतिक बिबिधतायुक्त धार्मिक शिखरको नाम हो । यो शिखरको फेदिसम्म नै सडक पु ...
१० चर्चित हलिउड चलचित्रहरु एक दम्पत्ती जो कहिल्यै एक अर्कालाई छुँदैनन नायब सुब्बा तयारीका दुई पुस्तक
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै गोप्य सूचना चुहाएको अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेकी एक अमेरिकी सैनिकको बाँकी जेल ...
आजको दैनिक पत्रिकामा आर्थिक समाचारः हुलाकी राजमार्गलाई पूर्व-पश्चिमसम्म विस्तार गरिने
२ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न समाचारले स्थान पाएका छन् । तराई-मधेशको विकासको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग अब पूर्वदेखि पश्चिमसम् ...
प्रधानमन्त्री युएईबाट फर्किएलगत्तै सरकार विस्तार हुनेः राप्रपालाई थप तीन र फोरम लोकतान्त्रिक�